shwezinu: January 2010
ငယ်ဘဝများ (၁၂) နှင့် ငယ်ကျွမ်းဆွေ တယောက် အကြောင်း (၂)
သူငယ်ချင်း လေး ရဲ့ အနာဂါတ်ကို မသေချာမှု့တွေ ဖန်တီးပေးခဲ့ တဲ့ အိမ်ကလေး ကို စိတ်နာနာ နဲ့ ကျနော် မကြည့် မိတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဘဲ ပိုင်ရှင်သစ် ဟာ ကျနော်တို့ အတွက် အမှတ်ရ စရာ အိမ်ကလေး ကို သိမ်းပိုက် သွားခဲ့ပါပြီ....
မနက်ခင်းလေး တခုမှာတော့ အိမ်ကလေး ကို ပြောင်းလာတဲ့ စုံတွဲ တတွဲကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်..၊ အသားဖြူဖြူ အရပ်ရှည်ရှည် မျက်မှန်အထူကြီး နဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ မျက်နှာပေး နဲ့ သြ..အဲဒါ ကိုမောင်မောင် (အဉ္စလီ) တဲ့လား..၊ အသားဖြူဖြူ အရပ်ပုပု လေး နဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှသူလေး ကတော့ ကိုမောင်မောင်ရဲ့ ချစ်ဇနီး မဖြူတဲ့....
ရင်မှာ ထိခိုက် ခံစားခဲ့ ရတဲ့ သီချင်းလေး တွေရဲ့ ဖန်တီးရှင် ကိုမောင်မောင် ကို လေးစားစွာ နဲ့ အိမ်ကလေး ကိုပြန်လည် စိတ်ဝင်စား လာမိပါတယ်....
ကျနော် တို့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက် အလုပ် အတူတူ လုပ်ခဲ့ ကြတဲ့ သူ့အဖိုးရဲ့ အလုပ် လုပ်တဲ့ အိမ်သေး သေးလေး မှာ သူတို့ ၂ယောက်နေကြပါတယ်....
ကျနော် တို့ ပြေးလွှားကစား ခဲ့တဲ့ အပင်ကြီးအောက် မှာ ဖန်တီးရှင် ရဲ့ သီချင်း သစ်လေးတွေ မွေးဖွား ခဲ့ပြီဘဲ.....၊ ကျနော် တို့ နှစ်ယောက် အငြင်းပွား ဆော့ကစားရာ သံစဉ်လေး တွေ နေရာမှာတော့ ကလပ်စစ် ဂီတ သံစဉ်သစ် တွေ အစားထိုး သွားခဲ့ပြီပေါ့....
မိုးရေတွေ ပြည့်လျှံနေတဲ့ အိမ်ရှေ့ မြှောင်းသေးသေး လေးဘေးမှာ အချိန်အကြာကြီး ငေးမော ကြည့်နေ တတ်တဲ့ ဖန်တီးရှင် ကို ပြန်လည် ငေးစိုက်ကြည့်နေရင်း ဟိုး နှစ်ပေါင်း များစွာက ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက် အဲဒီနေရာလေး မှာဘဲ စက္ကူလှေလေး တွေ ပြိုင်တူ လွှတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်လို့....ကျနော် တိုင်တည် လိုက်ရင် သီချင်း လေး တပုဒ်များ မွေးဖွား လာလေမလားလို့..မေးခွန်းတွေ ထုတ်မိ ပြန်တယ်....
အိမ်ကလေး မှာ ဘဲ ဖန်တီးရှင် ရဲ့ ရင်သွေးလေး ကို ချော့မြူဘို့ ချစ်ဇနီးလေး မဖြူ နဲ့ စကားတွေ ပြောဘို့ ..၊ ဖန်တီးရှင် ရဲ့ နှုတ်ဆက် အပြုံးလေး တချက် စကားလေး တခွန်းလောက် ရဖို့ အတွက် သူငယ်ချင်း ရဲ့အတိတ် ကအိမ်ကလေး ထဲ ကိုပြန် လည်ဝင်ရောက်ခဲ့စဉ်မှာတော့....သူငယ်ချင်းလေးက...
သူငယ်ချင်း မှာ အရင်းနှီးဆုံး ယောက်ကျားလေး သူငယ်ချင်း တယောက် ရှိတယ်..တနေ့ မှာ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် စကားပြောဖို့ အခွင့်ကြုံလာတဲ့ အတွက် တော်တော်များများ စကားတွေ ပြောဖြစ်တယ်....
တကယ်တော့ ကျနော့်ကို စကားမပြောချင်လို့ ရှောင်ဖယ် နေတယ်ဆိုတာ သူ့ပြောတာတွေ ကြားမှ သိခဲ့ရတယ်... ကျနော်က သိပ်ရက်စက် တယ်တဲ့....
ကျနော့် တသက်မှာ သူငယ်ချင်းလေးနဲ့ ပြန်လည် မဆုံဆည်း ခဲ့တော့ပေမဲ့ သူငယ်ချင်းလေး ကတော့ ကျနော့် ကို ပြန်လည် ဆုံဆည်းဖို့ ကျိုးစားခဲ့သေးတယ်နော်...
ကျနော် တို့ နှစ်ယောက် ခွဲခွာပြီး နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာခဲ့တဲ့ အချိန်မှာတော့ သူငယ်ချင်းဟာ မြို့လေး ရဲ့ တခုသော သင်္ကြန် မှာ တိတ်တိတ်ကလေး ပြန်လာခဲ့ တယ် ...
သူ့သူငယ်ချင်း စီမှာ ကျနော့် အကြောင်းတွေ မေးမြန်းခဲ့တယ်တဲ့..လက်တွဲဖော် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ကျနော့် ကို သူကြည့်ချင်သေးတယ် ဆိုပြီး ..အဲဒီ သင်္ကြန် ညလေးမှာဘဲ ကျနော်တို့ချစ်သူ နှစ်ယောက် ရဲ့ နောက်က တောက်လျှောက် လိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါသတဲ့ ....
အလိုက်ကမ်းဆိုး မသိတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ကြားထဲမှာ ချစ်သူငယ်ချင်း ဘယ်လောက်များ နာကြင် ခံစားနေ ရမလည်း....
တိတ်ဆိတ် တဲ့ ည အိမ်အပြန် လမ်းလေးပေါ် မှာ ပျော်ရွှင်စွာ လမ်းလျှောက်လာကြတဲ့ ကျနော် တို့ ချစ်သူ နှစ်ယောက် နောက် မှာ လက်တဘက်က လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်ရင်း နောက်လက် တဘက်က ရန်လိုနေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း လက်ကို တင်းတင်းဆုတ်ကိုင် ထားရင်း သူငယ်ချင်းဟာ လိုက်ပါ လာခဲ့ပါသတဲ့...
ချစ်သူ ရဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းကို ငေးမျှော်ကြည့် နေတဲ့ ကျနော့်ကို အမှောင်ရိပ်ကနေ တိတ်ဆိတ်စွာ ကြေကွဲစွာ နဲ့ နှုတ်ဆက် သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့.....
နောက်တနေ့မှာတော့ သူငယ်ချင်းလေးဟာ မြို့လေးကနေ တိတ်တိတ်လေးဘဲ ပြန်လည် ထွက်ခွာ သွားခဲ့ ပါပြီ...
ချစ်ခြင်း ကို ခံစား ရတဲ့ အတွက် နှလုံးသားတွေ နာကြင်ကြေကွဲ ခဲ့ကြသလို...အချစ်ခံရခြင်း အတွက်လည်း နှလုံးသားတွေ နာကြင်ကြေကွဲ ခဲ့ရတာပါဘဲ ဆိုတာကို တသက်စာ ပုန်းရှောင် သွားတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း လေး သိစေချင် စမ်းလှပါတယ်......
(အပိုင်း ၂ ကို ရေးဘို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး..ဒါပေမဲ့ နာကြင်စွာ နဲ့ဘဲ ရေးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်....သိချင်သူတွေ အားလုံး ကျေနပ်လိမ့် မယ် ထင်ပါတယ်..)
Posted by SHWE ZIN U at 12:35 PM9comments Links to this post
ဒဂုန်ခင်ခင်လေး နှစ်ပေါင်း ၆ဝ အပိုင်း (၅)
ယင်းသို့ ပုံကြီးချဲ့ နေကြသည့် ကြားထည်းမှာ ဗြုံးကနဲ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်လာပါသည်၊ စစ်ကျေညာ သော နေ့ကဆိုလျှင် တအိမ်သားလုံး မျက်လုံးတွေပြူးပြီး ယနေ့နက်ဖြန်ဆိုသလို ဂျာမဏီက လာ၍ သိမ်းတော့ မလိုလိုကြောက်ရွံ့နေကြသည်၊ မိန်းမပိုင်း ကတော့ ခက်တာပါပဲ၊ အလှူအတွက် ပစ္စည်းတွေ ကလဲ ၀ယ်ချမ်း စုဆောင်း ပြီးပြီ၊ ထွက်ပြေးရရင် ဒါတွေမသယ်နိုင်တော့ ဘူးဟု ညည်းတွားကြသည်၊ အချို့ ကလည်း မြန်မြန် လှူဖြစ်အောင်ဖြစ်သလို လှူလိုက်ပါစို့ဆိုသည်။ စစ်ကို မကြုံဘူးသူတွေဖြစ်၍ အလွန် ဝေးကွာသည့် ဥရောပနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေသောအင်္ဂလိပ်နှင့် ဂျာမန် တို့၏ ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ မြန်မာပြည်နှင့် အနီးအနား မှာ ဖြစ်နေသလို စိတ်ဓါတ်ချောက်ချားနေကြ သည်၊ "ကျုံးပေါ်တီပေါ်လို့ ပြည်တော်အပ်ရမည်" ဟူသော အတိတ်တပေါင်ကို ရွတ်သူကရွတ်၍၊ မှန်အိမ်မှာစာနီနဲ့ ဂျာမနီမုံ့ဖက်ထုပ် ဆိုပြီး ည, ညလယ် ရောင်းတာကို နိမိတ်ကောက်သူ ကကောက်၊ မုန့်ဖက်ထုပ်သည်ကို ပုလိပ်ဘက်မှ လိုက်ဖမ်းကုန်ပြီ ပြောသူက ပြောနှင့် တသောသော တကြိတ် ကြိတ်နှင့် စိတ်ဓါတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်ကို တွေ့မြင် နေရပါသည်။
"ဗေဒါပင် ကမ်းကပ်တော့၊ နန်းအပ်မှအေးလိမ့်မည်" ဆိုသော တပေါင် ကြောင့်၊ အင်္ဂလန်ပြည် ပဉ္ဇမြောက် ဂျော့ဘုရင်က ဂျမဏီပြည့်ရှင်ဘုရင် ကိုင်ဇာကိုထီးနန်း အပ်ရမှာသေချာသည် ဟုလည်း တိုးတိုးပြော နေကြသည်ကို ကြားရသည်၊ ထိုခေတ်က ဘယ်ကစ၍ ရောက်လာသည်မသိရသော ဗေဒါပင်ကလေး များကို အိမ်တိုင်း၌ အင်ဒုံတွင်ရေထည့်ပြီး အလှစိုက်လေ့ရှိကြသည်၊ နောက်ပိုင်းပွားများ လာသဖြင့်အင်း အိုင် ချောင်း မြစ်တို့မှာ ဗေဒါပင် တွေပြည့်ကြပ်လာပြီး ရေစီးမရှိသော အင်းအိုင်တို့တွင် ရေကိုမမြင်ရ အောင်ပိတ် ဖုံးလာသည်၊ ဒါကို တပေါင်ဆရာတို့က မိမိတို့နီးစပ်ရာ လဘက်ရည်ကြမ်းဝိုင်းတွင် ပဲပြုတ် ဆီဆမ်း နှင့်မြီးရင်း ယခင်ကသင်္ဂြိုဟ်ပရမတ် ငြင်းကြမည့်အစား ဂျာမဏီ ပထမကမ္ဘာစစ် တရားကို နှီးနှော နေကြ ပါသည်။
သို့သော် ရက်မှလသို့ကူးလာသောအခါ ရိုးသွားပြီးကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုတွေ ပြေသွားကြပါသည်။ အင်္ဂလိပ် သတင်းစာ မြန်မာသတင်းစာများ၌ပါလာသော စစ်သတင်းကိုလေ့လာနားထောင်ရုံမှတပါး စိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့မှု့ များ လျော့ပါးသွားကြပါသည်၊ ဘိုးဘိုးဝက်မစွတ်မြို့စားမင်းကြီးမှာ မင်းတုန်း ဘုရင်ကြီးနှင့် သီပေါမင်း တို့နှစ်ဆက်တိုင် အနောက်တိုင်းသို့ သံတမာန်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သွားတိုင်း ပါဝင်ခဲ့ရ၍ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ အိန္ဒိယပြည် ဆင်မလား စသည်များကိုရောက်ဘူးပြီး အခြားသော မှူးတော် မတ်တော်ကြီး များကဲ့သို့ သို့ဆောင်းစကားနှင့်သိုးဆောင်းစာကို တော်သင့်လျှောက်ပတ် ရုံမျှ တတ်မြောက် နားလည် ခဲ့သူ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မြန်မာပြည်နှင့်အင်္ဂလန်ပြည်ဂျာမဏီပြည်တို့ မည်မျှ ဝေးကြောင်း၊ သူတို့ နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွား နေသော စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်မှာမြန်မာပြည်က တိုက်ရိုက် ထိခိုက်နိုင်ပျက်စီးစေနိုင်မည့် အရိပ် အယောင် မရှိ ကြောင်းကို ဆိုင်ရာမင်းယောက်ျားပိုင်းတွင် ရှင်းလင်း ပြောနေရသည်ကို တွေ့မြင် နေရ ပါသည်၊ ဖေဖေဦးမြတ်ကျော်ကလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှင့် ဂျာနယ်မှာပါရှိသော စစ်သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံ များ ကို၎င်း၊ မြေထဲပင်လယ်နှင့်ဘလက်စီးခေါ် ပင်လယ်နက်ကို ဆက်ထားသောတူရကီပြည်နှင့် ဘူလ်ဂေး ရီးယားပြည်အကြားရှိ ဒါလင်နယ်ရေ လက်ကြားတိုက်ပွဲမှ ရေငုတ်သင်္ဘောများနှင့် တိုက်ခိုက်ကြ ပုံများ ကို၎င်း၊ ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စစ်ဗဟုသုကို ဖြန့်ရင်းပင် အလှူနေ့ရက်ချိန်းက တစ, တစနီးကပ် လာပါ သည်။
နေ့ရက်ကို ဘိတ်စာများ ကမ်းပြီးလေပြီ၊ အလှူကိစ္စပုံကြီးချဲ့ လက်စတွေကိုလည်းဆက်လက်လုပ် ကိုင်စီမံလျက်ခြေသွက်နေကြပါပြီ။ အကျွေးအမွေးက မင်းမျိုးမင်းနွယ်တို့အကြိုက် နန်းတွင်းသုံး အချိုအုပ်-အဆိမ့်အုပ်-အချဉ်အုပ်- လဘက်အုပ်စသည်များဖြစ်၍ ဦးမြတ်ကျော် အကြိုက်က ကိတ်မုန့်စုံ နှင့် အိုက်စကရင် တို့ကို မေမြို့ ဗီယာနာကဖီး ခေါ် အင်္ဂလိပ်မုန့်တိုက် ကြီးမှ မှာယူပြီးဧည့်ခံ ဘွိုင်ကုလား များပါ အသုံးပြု ပါသည်၊ ထိုခေတ်က ဗီယာနာကဖီးမှာ ရန်ကုန်မြို့နှင့် အင်္ဂလိပ်တွေ အနေများသော မေမြို့ မှာသာ ရှိပါသေးသည်၊ မန္တလေးမြိှု့ရှိ ဧည့်ခံပွဲများမှာ မြန်မာဆန်ဆန်သာ ကျွေးမွေးဧည့်ခံမြဲဖြစ်၍ အင်္ဂလိပ် မုန့်တိုက် များ မပေါ်လာသေးသော အချိန်အခါ ဖြစ်ပါသည်။
ဇာတ်ပွဲများ ထိုအခါက တဟုန်ထိုး အလွန်လူကြိုက်များသော ဘာဂျာဘအေးခေါ် ဇာတ်မင်းသား ခေါင်း ဆောင်သည့် ဇာတ်ဖြစ်၍ နေ့ပိုင်းထိုင်ဆိုစန္ဒယားဝိုင်းမှာ အဆိုတော် ဦးလူကြီးနှင့် ဒေါ်စိန်သုံ ဒေါ်စိန်ဆင် ကြီး တို့ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် အလှူမတိုင်မီတနေ့ညဉ့်မှာ၊ ဆိုင်းဝင်သည်ဟုထုံးစံရှိ၍ ဆိုင်းတီးရသည်၊ ဆိုင်းနှစ်ဝိုင်းကို ၀င်းပေါက်ဝ ရှိ ကျောက်လမ်းမပေါ် မှာ အရှေ့ဘက်အပေါက်တွင်တ၀ိုင်း၊ တောင်ဘက်အပေါက်တွင် တ၀ိုင်း တီးစေ သည်၊ ထိုဆိုင်းဝိုင်းနှစ်ဝိုင်းမှာ ဆိုင်းဆရာ-ဆရာစိန်နှင့်စိန်ဗေဒါကြီး တို့ ညီအစ်ကို အပြိုင်ကြဲ စေသော ဆိုင်းပွဲ များဖြစ်ပါသည်။
ညဉ့်ဦး ဆိုင်းပွဲများ စည်ကားနေချိန်တွင် ရင်းနှီးသောဧည့်သည်များ တဖျောက်ဖျောက် လာလျက်ရှိ သည်၊ မဏ္ဍပ်တွင်း၌ လှူဘွယ်ဝတ္တုပစ္စည်းပဒေသာပင်များလည်း ပြင်ဆင်သူကပြင်ဆင်ကြသည်၊ ထိုအချိန်တွင် အလှူဒကာ ပျောက်နေသဖြင့် လိုက်ရှာရသည်၊ ဘယ်မှာမှ ရှာ၍မတွေ့၊ ဧည့်သည်များ ကလည်း မေးလှသည်၊ မေမေစိတ်ပူနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ခဏကြာသောအခါ ကိုမြတ်ကျော် ၏ အိမ်တော်ပါ ငယ်တပည့်ဖြစ်သူ တဦးက မေ့မေ့အနား တိုးတိုး လာပြောသည်။
(မောင်မောင် ရယ်လေ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါကြီး ခေါင်းပေါင်းရုပ်ဖျက်ပြီး၊ ဆရာစိန့်ဆိုင်းဝိုင်းကြီးထဲမှာ ၀င်တီး နေတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဟု ဆိုလေသည်၊ အမေက လူတွေသိမှာ ရှက်လှချီရဲ့ဟုပြောပြီး အရေးတကြီး လက်တို့ ၍ အခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်ကို မြင်ရပါသည်)
ကျမအဘို့တော့ သူတို့အလှူကိစ္စအတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဘာမှ နားမလည်ခဲ့သော်လည်း မှတ်သား မိသမျှ မင်းခမ်း မင်းနားနှင့် ချဲ့ကြသလောက်မှာ အတော်ကလေး ပင်ပန်း လိုက်ပါသေးသည် ။ အလှူ မတိုင်မှီ ၂-ရက်ခန့်ကလှူသောဘုရား ဆင်းတုတော်တဆူနှင့် စာတိုက်ကျောင်းဆောင်များ ကိုအတီးအမှုတ် နှင့် သွားပင့်ကြရသည်၊ ဘုရားကိုတင်၍ပင့်သော မှန်စီရွှေချရှေးကယာဉ်ရထားတခု ကို ဆွေမျိုးတသိုက်က ပိတ်ဖြူကြိုး နှင့်ဆွဲရသည်၊ နောက်မှယောကျာ်းများက ညင်ညင်သာသာတွန်း ပေးကြသည်၊ ယာဉ်ရထား၏ ရှေ့ပိုင်းမှာ မြန်မာဘုရင် လက်ထက်က စောင်းတီးရာ၌ နာမည်ကြီး တဦးဖြစ်သော ဒေ၀ဏ္ဍန္ဒာ မောင်မောင်ကြီး ပဉ္ဇသီခနတ်သား ကဲ့သို့ ၀တ်ဆင်ပြီး စောင်းတော်ပိုက်ခါ တီးလာသည်၊ ဒေ၀ဏ္ဍန္ဒာ မောင်မောင်ကြီးမှာ ရဟန်းဘောင် ၀င်ထားရာမှ ခေတ္တလူဝတ်လဲထားချိန် ဖြစ်၍၀က်မစွတ်မြို့စားကြီးက တူရင်း သားရင်း ကဲ့သို့ ခင်မင်ခဲ့ သူဖြစ်၍ တကူးတတန်လာရောက်ကူ ညီခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ ထိုနည်းအတူပင် ရွှေဘိုမြို့ ၌နေထိုင်သော အဝေးရောက်မင်း ဦးအောင်ကြီးက လည်းရှေးနန်းစဉ်ထုံးစံအတိုင်း သူကိုယ်တိုင် စည်တော်ကြီး သီချင်းများကို သီဆိုတီးရွမ်း၍ သင်းကြန် ဆောင်ဆင်းသောအခမ်းအနားမှာ ကူညီ ပါသည်။
သင်းကြန်ဆောင်ဆင်းရသော အဓိပ္ပာယ်မှာ အလှူပွဲ မ၀င်မှီ ဘုရားပင့်သောနေ့ ညနေပိုင်း တွင် ရွှေချည်ထိုး ရာမှ ပြီးစီးသော စည်းပုံ၊ ထမီ၊ သိုရင်းအကျီများ နှင့် နားသမည့် စိန်အပ်တစုံကို ကလပ် များမှာ တင်လျက် ကန်တော့ပွဲနှင့် အန္တရယ်ကင်းပရိတ်နာထားရသည်၊ နောက်တနေ့ သင်းကြန် ဆောင်သို့ ဆင်းရန် ပုဏ္ဏား များက အချိန်အခါရွေးပြီး စောင့်ရသည်၊ အချိန်ကျ၍သင်းကြန်ဆောင် အဆင်းမှာ စည်တော်ရွမ်း ရပါသည်၊ အဝေးရောက်မင်း၏ စည်တော်ကြီးအဖွဲ့က သင်းကြန်ဆောင် ရှေ့မှာရှိပါသည်၊ သင်းကြန် ဆောင်ကို ရောက်သောအခါ ခေါင်းလျှော်ဟန်ဆံပင်အဖျားကို သရော် ကင်ပွန်းရေနှင့် ပုဏ္ဏားမများ (ပုဏ္ဏားမ ကို ဆိုလိုသည်)က စတိအဖြစ် လျှော်ပေးခြင်း လက်သဲ, ခြေသဲတို့ကို စတိမျှသာ လှီးပေးခြင်း ပြုပြီး မနေ့က ပရိတ်နာထားသော ကုလပ်နှင့်သိုရင်းအကျီ စသည်များကိုအချိန်နာရီနှင့်ကိုက်ညီအောင် စ၍ ၀တ်ရသည်၊ ၀တ်ပြီးသောအခါအိမ်ပေါ်ကို ပြန်တက်လာရသည်၊ ရွှေချည်ထိုးထည်ကြီးတွေကို သယ်ပိုး ၀တ်ဆင် လာရသည်မှာ အလွန်လေးလံ ပြီးထူလွန်းလှသဖြင့် ချွေးတလုံးလုံး နှုင့် ဒုက္ခခံ လိုက်ရသည့် ဖြစ်ခြင်း၊ သို့ပေမင့် သူတို့ လူကြီးများ ၏ အယူအဆနှုင့်ဝါဒက ဒါတွေကိုမလုပ်လျှင်ဘဲ ငရဲကြီး ရတော့ မလိုလို။
နောက်တစ်နေ့ ဧည့်ပရိတ်သတ်များ အလယ်၌ဒါကြီးတွေကို ၀တ်ပြီး ထိုင်ရဦးမည်ကို ကြိုတင်စိုးရိမ် မိသည်၊ သို့သော် ရှောင်မရတိမ်းမရသော ကိစ္စဖြစ်သည်၊ နားထွင်းရန်ညောင်စောင်းမှာ ထိုင်ရလေပြီ ပုဏ္ဏးတော် တွေက ကြွက်ကြွက်ညံအောင် ရွတ်ကြ, ဘတ်ကြ ပူဇော်ပွဲမြှောက်သူထမင်းခွန့် ထမင်း ခံလုပ်သူ တွေနှင့် အနားတွင်ဆူနေကြသည်၊ ပီးတော့မှအနာတရနားကို စိန်ထိပ်အပ်နှင့် ထိုးဖောက် ခြင်းခံ ရသည်၊ နားထွင်းပေးသူက မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး သမီးတော်ချွန်းတော်မြို့စား ထ်ိပ်ခေါင် တင်ဖြစ် ပါသည်။
ထိုအချိန် ကစပြီး နာလွန်းသဖြင့်ပူထူသွားပြီး ဘာမှ မမှတ်မိတော့ဘဲ အခန်းထဲ ပြန်ပို့လိုက်ကြသည် အထိ အော်မငိုမိ ရန် အတော် ကြိုးစား ထားရပါသည်။
နောက်ပိုင်း မှာတော့ ၀ဋ်ကျွတ်သွားပြီ ဟု အ၀တ်ထူ ကြီးတွေ ချွတ်ပစ်ပြီးဝမ်းမြေုာက် ၀မ်းသာရွယ်တူ ကလေး များနှင့် မုံ့တွေ စားလိုက် ပွဲကြည့်လိုက်နှင့် အချိန်ကုန်ခဲ့သည်။ ငွေကုန်လူပန်းနှင့် တခမ်းတနား လုပ်ခဲ့သော ကိစ္စများမှာပြီးစီး၍ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနေရသည့် နေ့ရက်ကလည်း အတော် ကုန်သွားကြ ပါသေး၏
အခွင့်မှာ ၆-လယူလာခဲ့ရာ ၃-လတိတိကျန်နေသေး၍ မန္တလေးမှာပင် အနားယူ နေကြပါသေးသည်၊ ထိုအတွင်း ဘိုးဘိုးမစွတ်မြို့စားမင်းကြီးသည် ကျမအားနေ့စဉ်အပါးသို့ခေါ်ထားပြီး စာဖတ်ခိုင်းသည်၊ ဖတ်ရသော စာမှာ ဦးကုလား မဟာရာဇ၀င် အထိဖြစ်၍ ဖတ်ပြရင်းနားမလည်သော ခက်ဆစ် အဓိပ္ပာယ်များ ကို စိတ်ရှည်, လက်ရှည်ရှင်းပြသည်၊ ဓမ္မစကြာသုတ်မှ အနတ္တလက္ခဏာသုတ်အထိ ကျောက်ပန်းတောင်း ၀တ်ကျောင်း ဇရပ်မှာ လူကြီးများနှင့်ရောနှောရွတ်ခဲ့၍ အလွတ်ရနေသော ကြောင့်အကျက်မခိုင်းတော့ဘဲ၊ ငါ့မြေးကစိတ်ကြမ်းကိုယ်ကြမ်းရှိသည်၊ သို့ကြောင့်သင်္ဂြုလ် ၉-ပိုင်း ကုန်အောင်ကျက်ရမည်ဟု ဆိုကာ တနေ့ စာကျက်မှတ်၍ အလွတ်ရသောအခါ နောက်တနေ့ သင်္ဂြုလ်ကိုရုပ်ခွဲပေးသည်။ သင်္ဂြုလ်ကျမ်း ကိုသင်လျှင် လူပျော့ပြောင်းနူးညံလာသည်၊ သဒ္ဒါတတ် လျှင် နှုတ်သွက် လျှာသွက်ရှိသည်ဟု အယူ ရှိကြ ပါသည်။ သို့ကြောင့်သင်္ဂြုလ်တတ်လျှုင်ပျော့ သဒ္ဒါ တတ်သျှင်ဆော့သည်ဟူ၍ စကားပုံရှိပါသည်၊ ကျမကို ပျော့ပြောင်း နူးညံ့လာစေခြင်းငှါ သင်္ဂြုလ်ကို စ၍ သင်ပေးရသည်ဟု ဆိုပါသည်။
အနောက်ပိုင်း မိန်းမ ဆောင်ဘက်သို့ ၀င်လာလျှင်တော့ ဖွားဖွားဝန်ကတော်ကြီးအနားမှာ မိန်းမ ဧည့်သည် တွေ မပြတ်ပါ၊ သူတို့သည်ရှေးကနန်းတော်သူ အပျိုတော်ကြီးငယ်နှင့်မြို့စားရွာစားများ ဖြစ်ကြပါသည်၊ ကျမ ထိုင်၍ နားထောင်လျှင် နန်းတွင်းတုံးကရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်ဖြစ်သူကို ပြန်ပြောနေကြခြင်း၊ သီပေါမင်း ပါတော်မူစဉ်က ဘယ်သို့ဘယ်ပုံထိတ်လန့်၍ ပြေးဝင်ပုန်းအောင်း ခဲ့ရခြင်းစသည်များသာ ဖြစ်ပါ သည်၊ သူတို့ထိုင်ပုံနေပုံများမှာ အလွန်ညောင်းညာဘွယ် ကောင်းပါ သည်။ ကြမ်းပေါ်မှာ သင်ဖြူချော ကလေး ခင်းပြီး ကြုံ့ကြုံ့ ၀ပ်၍ မေးထောက်ခါ တဘက်ကဖက်ဖြူ ဆေးပေါ့လိပ်ကြီးတွေ သောက်ရင်း စကား ပြောလေ့ ရှိကြပါသည်။ သူတို့အပါးသို့ ကျမရောက်သွား လျှင် သူတို့ကဲ့သို့ ပျော့ပျော့ ပြောင်း ပြောင်း မနေတတ်သောကြောင့် ကိုယ် အမူအရာ အားဖြင့် ကျွတ်ဆပ်ဆပ် ကြွစောင်းစောင်း ဖြစ်နေပုံ ရပါ သည်။
တယောက်ကို တယောက်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် ထူးလိုက်ရသည့် 'ဘုရား'ကလည်း အမောတကောပင် အိမ်ကို ဆွေထဲ မျိုးထဲက ဧည့်သည်လာလျှင် ထိုင်, ထိုင်ခြင်းရှိခိုးဦင်္းချကြသည်၊ ပြန်ခါနီးလျှင်လည်း ရှိခိုးဦးတင်းပြီးမှ ပြန်ရသည်၊ သည်ကိစ္စမှာ သေးငယ်သည့်ကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ ၀ါကြီးဝါငယ်ကြီးစဉ်ငယ် လိုက်ဦးချကံတော့ရသော အလေ့ အထ ဖြစ်၍ သူတို့မှာ အပန်းမကြီးသော်လည်း ကျမအဘို့မှာ အကျင့် မရှိ၍ အထူး အဆန်း ဖြစ်နေ ပါသည်၊ တခါတလေလည်း ဖွားဖွားမမသက်ပြောဘူးသော ၀ိဋဋူပမင်းသားနှင့် သာကီဝင် တွေ တွေ့သော အခါ ငယ်ရွယ်သူတွေကို ရှိမခိုးစေရအောင် ဖွက်ထား သည်ဆိုသော ၀တ္တုထဲက အပိုဒ်တခုကို သွား၍ သတိရကာ ဧည့်သည်ပြန်ခါနီး ဒီဥစ္စာမျိုးတွေ မလုပ်ရအောင် ကပြာကယာ ပြေးရှောင် ထွက်သွား မိသည်။ ဒါတောင်မှ မရအရခေါ်ပြီးခိုင်းကြပါသေး သည်၊ ဂေါရဝေါစနိဝါတောစဆိုသော မင်္ဂလာ တရားတော် အရ ပြုလုပ်ကြရခြင်း ဖြစ်စေကာမူ ဧည့်သည်လာတိုင်း, လာတိုင်းဂါရဝေါစတွေ ခဏ, ခဏ လုပ်ရ သည်မှာ ကြာတော့ ခလေးပီပီ လက်ညောင်း လာသောကြောင့် လစ်ပြေးခြင်း သာ ဖြစ်သည်၊၊
တခါတခါမှာလည်း ကျမကိုယ်တိုင် ဂါရဝေါစခံရပါသေးသည်၊ဤအခါမျိုး၌ကျမမှာ မျက်လုံးပြူးတူး ပြဲတဲနှင့် မနေတတ်၊ မထိုင်တတ်ဖြစ်သွားရပါသည်၊ ( ကိုယ်တော့် မေမေ ဘုရားကခေါ်နေတယ် လဘုရာ့) ဆိုသော စကားလုံး မျိုးပင်၊ သူတို့သည်အိမ်ဖေါ်များ၏ သားသ္မီး ကလေးတွေဖြစ်၍ ကျမနှင့် ကစားဖေါ် ကစား ဘက်များဖြစ်ကြသည်။ ရွယ်တူကလေးချင်းချင်း သူတို့ကဘုရားထူးကြ ရပြန်သည်၊ ဒါတွေ မန္တလေးမြို့ရှိ နန်းတွင်းအဆက် အနွယ် အိမ်တိုင်းမှာ တွေ့ရစမြဲ ဖြစ်ပါသည်၊ သူတို့သည်ရှေးက အစဉ်အလာအတိုင်း အကျင့် မပျောက်ကြပါ၊ ရှေးခေတ်တပည့် လက်သား ဟောင်းများသည် မြန်မာဘုရင်မရှိ၍ မိမိ ဆရာသမား များ တန်ခိုး အာဏာ မှေးမိန်လာသော်လည်း အရိုအသေ တရားမပျက်ကြပါ၊
ကျေးဇူးသစ္စာ ကိုလည်း သိတတ်ကြသူကများပါသည်၊ ကျမကိုယ်တိုင် သိမှီသော အရွယ်တွင် ၀က်မစွတ် မြို့စား ကြီး ဘိုးဘိုးဖွားဖွားတို့အိမ်၌ ရှေးက (ငွေဝယ်ကျွန်နှင့်လက်ဆောင်ရကျွန်) ခေါ်သည့် အမျိုးသ္မီး များကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရ လက်ထက်၌ အထားရသဖြင့် သူ့နေရာဋ္ဌာနသို့ ပြန်လွတ်လိုက်ရာဝယ် အချို့မှာ အိမ်ထောင် ရက်သားကျ၍ ချမ်းသာကောင်းစားနေသည့်တိုင် အောင်မမေ့မပျက် တနှစ် တကြိမ် လာရောက် ၍ ကံတော့ကြသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရ ပါသေးသည်၊ ၄င်းနည်းတူပင် မှူးတော် မတ်တော် မြို့စားကြီး များ၌ အဆောင်ကိုင်များ၊ အဆောင်ကိုင်မှူး၊ ဝေါထမ်းဆင်ထိန်းစသူတို့လည်း ကိုယ့်စီးပွား ကိုယ်ရှာ စား၍ ချမ်းသာကြီးပွား သွားသည်တိုင်အောင် မမေ့မပျောက် တစ်နှစ်တကြိမ် လာရောက်၍ ကံတော့ ကြသည်က်ို တွေ့မြင်လိုက်ရ ပါသေးသည်၊ ၄င်းနည်း တူပင်မှူးတော်မတ်တော် မြို့စားကြီးများ၌ အဆောင်ကိုင်များ၊ အဆောင်ကိုင်မှူး၊ ဝေါထမ်း ဆင်ထိန်းစသူတို့လည်း ကိုယ့်စီးပွား ကိုယ်ရှာစား၍ ချမ်းသာ ကြီးပွားသွားသည် တိုင်အောင် မမေ့မလျော့ လာရာက်ကံတော့ တတ်ကြပါသည်။
ငွေကုန်ကြေးကျ စရိတ်စကတွေ ကလည်း မများသေးသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်၊ အောက်မြန်မာ ပြည်မှ အင်္ဂလိပ် လက်အောက် သို့အနှစ်-၅၀ ခန့်စော၍ရောက်သောကြောင့် အနောက်တိုင်း အစားအသောက် အနေ အထိုင်များ ရောနှောလာသော်လည်း အထက်မြန်မာပြည် မန္တလေး မြို့မှာတော့ ခေတ်နောက်ကျ လျက်ရှိပါသေးသည်။ အိမ်ခြေတရာလျှင် (၁၀) ဦးလောက်မှ အိမ်မှာလဘက်ရည်ကာဖီ ဖျော် သောက်လေ့ မရှိကြသေးသည်ကို ကျမ ၉-နှစ် ၁၀-နှစ်ရွယ်အထိ သိမြင်ခဲ့ရပါသည်။ ကာဖီဆိုင်ကိုကာဖီ ရှပ် ဟုခေါ်သည်။ ၄င်းဆိုင် များမှာ အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသား များ ကာလသားများသာ ၀င်ရောက် သောက်လေ့ရှိပါသည်။
ယောကျာ်းများသည် ဆံပင်ထားကြသည်၊ လူပျိုကာလသားများးက ဆံပင်ကို ခပ်စောင်းစောင်း ထုံးလျက် ခေါင်းပက်လက် ပေါင်းသည်။ ဆင်ကပေါင်းဟုလည်း ခေါ်သည်၊ ယခုခေတ် ဇာတ်မင်းသားများ ပေါင်းပုံနှင့် ခတ်ဆင်ဆင် တူပါသည်။ လူအိုများကတော့ ဆံပင်ထုံးပြီးပုဝါကို အုပ်ပေါင်း၊ ပေါင်းလေ့ရှိကြသည်ကို သိမှီ တွေ့မြင် လိုက်ပါသေးသည်၊ အင်္ဂလိပ်ဆံတောက်၊ ဗိုလ်ဆံ တောက်ဟု အင်္ဂလိပ်ကျေင်းသား တချို့တလေ အစပြု၍ ထားလာကြကိုပင် မြန်မာ့ဦးစွန်းမပယ် စကောင်းဟု အရေးတကြီး တားဆီး ပြောဆို နေကြ သည်ကိုလည်း မှတ်မိသေးသည်၊ သို့သော် အောက်မြန်မာပြည်မှာတော့ ဗိုလ်ဆံတောက် ညှပ်ခြင်း၊ လဘက်ရည် ကာဖီအချိုသောက်ခြင်း စသည်များ ယဉ်ပါးနေကြပြီ ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
သို့နှင့် ခွင့်ရက်စေ့ ခါနီးသောအခါ အစိုးရထံမှ မည်သည့်အရပ်သို့သွားရမည် ဆိုသောအမိန့်စာ ကို စောင့်ရင်း ဖေဖေဦးမြတ်ကျော် သည် ကျမအားမန္တလေးကွန်ဗွင့် ကျောင်းတွင် ဘော်ဒါထား ခဲ့မည်ဟု ၀တ်စုံများ မှာယူခြင်း၊ သေတ္တာအိပ်ရာများဝယ်ခြမ်းစေ ခြင်းပြုပါသည်၊ ဤတွင်အဖေနှင့် အမေတို့ သ္မီး ကျောင်းထားရေး ကိစ္စကို စိတ်ကူးတမျိုးစီဖြစ် လာပါသည်၊ ဖခင်က ဂါဝန်ဝတ် ကျောင်းမှာ ထား၍ အင်္ဂလိပ်စာ ကို တန်းကုန်သင်နိုင်သရွေ့ သင်ပေးလိုသည်။ အမေကတော့ မိန်းကလေးဖြစ်၍ ခွဲမထားချင်ပါ၊ သ္မီးကို အလုပ်၊လုပ်စား စေမည်မရည်ရွယ်၍ အတူနေပြီး အင်္ဂလိပ်စာ အသင့် အတင့် ဘတ်တတ်ရုံ လောက်သာ ထပ်သင်စေလိုသည်။ ထိုခေတ်ကမိန်းမပိုင်း အထက်မြန်မာပြည်မှာ မိန်းကလေးများကို အလွန်ဆုံး ၁၂- နှစ်သ္မီးထက်ပို၍ ကျောင်းမထားလို သောအစွဲလမ်း လျှိ့ဝှက်ချက်တခုရှိသည်။
ဤအထဲမှာ အထူး သဖြင့် မေမေ၏ အသိုက်အအုံ အသိုင်းအ၀ိုင်းများသည် ကျောင်းထားမည့် အကြောင်းကို သိသွား ကြသည် နှင့် တပြိုင်ထည်း ရင်တမမနှင့်် ဖြစ်ကုန်ကြသည်၊ ဒီကလေး ဂါဝန်ဝတ် ကျောင်းမှာ သွားပို့ထားရင် ယေရှုခရစ်မကြီး ဖြစ်သွားတော့မှာဘဲဟုဆို ကြသည်။ ဤအဆိုက မိခင်ဖြစ်သူကိုပို၍ စိုးရိမ် သောက ဖြစ်သွား စေသဖြင့် ဖခင်အား ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားမြစ်ပါတော့သည်။ ဖေဖေဦးမြတ်ကျော်၏ ရည်ရွယ် ချက်မှာ အများနှင့် တစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့် လက်မြှောက် အရှုံးပေးလိုက် ရပါတော့သည်။
ဤသို့သော အကြောင်းများ ကြောင့် ခွင့်ရက်စေ့၍ အစိုးရဋ္ဌာနမှ မကွေးမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ အလုပ်ဝင် စေရန် အကြောင်းကြားစာ ရောက်လာသောအခါ ကျမသည် မန္တလေးတွင် မနေရစ်ခဲ့ရတော့ဘဲ မကွေး မြို့သို့ စာပို့သင်္ဘောကြီးနှင့် စုန်ဆင်းလိုက်ပါ လာခဲ့ရပြန်ပါသည်။ မကွေးမြို့တွင် တနှစ်ခွဲခန့် နေရသော အခါ အိမ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မှာအင်္ဂလိပ် ၇-တန်းကျောင်းတခုရှိသည်၊ ကျမကို ကျောင်းထားရန် စိတ်ကုန် သွားဟန်ရှိ၏။ ဘာမှမပြောတော့ဘဲ နေသည်၊ မေမေကလည်း အိမ်ရှေ့တွင် ကျောင်းရှိ နေသားနင့် ဆက်လက် ထားပေးရန် ဂရုမစိုက်ဘဲ တလနီးပါး အချိန်ကုန် သွားသည်၊ သို့သော် ကျမ ကျောင်းထား ပေးဘို့ပူဆာတော့မှာ အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူ ပုလိပ်ရုံးစားရေး ကြီးတယေက်ကို သွားရောက် ကျောင်းအပ် ပေးလိုက်စမ်းပါဟု ခပ်ပေါ့ပေါ့ပင် ပြော၍ ထည့်လိုက် သည်။
ထိုကျောင်း မှာ ၅-တန်းအထိ ရောက်လာပြီးရွှေဘို့မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရပြန်ပါသည်။ ရွှေဘိုမြို့ တွင်လည်း တနှစ်ခွဲခန့် ကျောင်းဆက်နေရပါသေးသည်၊ ၆-တန်းမှလွန်၍ ၇-တန်းစာမေးပွဲ ၀င်ရခါနီးတွင် မန္တလေး သို့ ရွှေ့လာရ၍ ကျမ၏ကျောင်းစာ သင်တန်းသည် ဤတွင်နိဋ္ဌိတံခဲ့ရပါသည်။ သို့သော် ရွှေဘိုမြို့ တွင် နေထိုင်ခဲ့ရစဉ်အခါ ကျမအဘို့ရာဇ၀င် အမှတ်အသားဘက်မှကိုယ်တွေ့ မျက်မြင် အမြတ်ထွက် ခဲ့ရသည်များ ကို စာပေရေးသား နေသော အခါရောက် မှ တန်ဘိုးကို နားလည် မိပါသည်။
ကျမ၏ဘိုးဘိုးဝတ်မစွတ် မြို့စားကြီးသည် မကွေးမြို့၌ နေစဉ်က တကြိမ်အလည် လာဘူးသည် ၊ ရွှေဘိုမြို့ ရောက်သော အခါလည်း တကြိမ် ရောက်လာသည်။ အဝေးသို့ခွဲ ထည့်လိုက်ရသော သ္မီးကိုအချစ်ပိုပုံရသည်၊ သ္မီးနှင့် သားမတ် တို့ကလည်းအခလည် ရောက်တိုင်းပြုစုယုယရာ၌ လိုလေသေးမရှိအောင် ၀တ္တရား ကျေကြ ပါသည်။
မကွေးမြို့သို့ ရောက်လာစဉ်ကလဲ မကွေးမြသလွန် ဘုရားကုန်းတော်သို့ တက်လျှင် ကျမကအတူပါခဲ့ ရသည်။ ဧရာဝတီမြစ်နဖူးရှိ မကွေးမြသလွန်ဘုရားကုန်းအောက်မှနေ၍ မင်းဘူးမြို့ တဘက်ကမ်း ရှိ စက္ကိန်းတဲ့ ဘုရား သမိုင်း၊ မကွေးမြတ်သလွန် ဘုရားသမိုင်း မလွန်မြို့ရှိ မြသပိတ် ဘုရားသမိုင်း နှင့် လယ်ကိုင်း ကျောင်းတော်ရာ သမိုင်းများ ပါဝင်သော ရွှေစက်တော်ဘုရားသမိုင်းကို မြေးငယ်အားစိတ် လက်ရှည် စွာဖြင့် ပြောပြ တတ်လေသည်။
ယခုရွှေဘိုမြို့သို့ အလည်ရေက်လာသောအခါမူကား မြို့ခံလူကြီးတချို့မှာ ရတနာ ပုံနေပြည်တော် ထီးကျိုးစည်ပေါက် ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက ရေကြည်ရာမြတ်နုရာ ဆိုသလိုပြောင်းရွေ့နေထိုင်လျက်ရှိသော နန်းတွင်း အဆက်အနွယ် အရာရိုအရာခံဟောင်းများနှင့် မြို့စားရွားစား သီပေါမင်းအပျိုတော် ဟောင်း များလည်း ရှိကြသည်။ သူတို့သည် ရှေးအဆက်အနွယ် ဟောင်းများကိုတယောက် လာ ရောက်တွေ့ ကြသည်၊ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်ပြောကြေသည်။ ဗဟုသုတနှီးနှောဖလှယ် တတ်ကြ သည်။
သူတို့တစုနှင့် ဘိုဘိုဝက်မစွတ် မင်းကြီးသည် ကျမကိုခေါ်ကာရွှေဘို၏ ရှေးဟောင်းရာဇာဝင်၊ အင်းဟင်္သာ ဆင်း၍ ဟင်္သာမုဆိုးလေးနှင့်ခွင်းရာ၌ မုဆိုးဘိုရွာက ထန်းသုံးတပ်သားများနှင့် အလောင်း မင်းတရားကြီး အကြောင်းနှင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများဖြစ်သော အလောင်းမင်းတရားကြီး ၏ ချက်မြှပ်ရာ ရွှေချက်သို စေတီ၊ အလောင်းဘုရား၏ ဂူ၊ အလောင်းမင်းတရားကြီး၊ အောင်မြေနင်း ရာဋ္ဌာန၊ ဇမ္ဗူဆီမီး၊ ရွှဂူကြီး၊ ရွှေလင်းပင်၊ ရွှေခြသေ့င်္၊ ရွှေစေတီစသော ဘုရားစေတီများနှင့် မဟနန္ဒာ ကန်တော်ကြီး- ကန်ဦးစေတီစသော ကောင်းမှုတော်များကို မှတ်မှတ်ရရရှိအောင် ပြောပြလေ သည၊ မဲဇာ တောင်ခြေ ရတုကို အလွတ် ဆိုခဲ့သော်လည်း ထိုအထဲမှ အဓိပ္ပါယ်များကို ပြတ်ပြတ်သား သားယခုမှပင် ကိုယ်တွေ့ မျက်မြင် ရာဇာဝင် နောက် ကြောင်းခံကာ လေးလေးနက်နက် သိရှိရပါသည်။
ရွှေဘိုမြို့၌ နေစဉ်အခါက အိမ်နှင့်မနီးမဝေး မှာနေထိုင်သော "မကျီးကန်-ခင်လေး"ခေါ်သီပေါမင်း၏ နန်းမတော်ကြီးစုဘုရာလတ်၏ အပျိုတော်မကျီးကန်ရွာစားသည် ထိုအခါက အိုမင်းမစွမ်းရှိ၍ စိန်ကုန် ကျောက်ကုန်များ ရောင်းရန်အစိုးရ အရာရှိများ အိမ်သို့ဝင်ထွက်သွားလာနေ သူဖြစ်သည် တွင် အရာရှိပိုင်း ကလည်း သနားသဖြင့် တတ်အားသရွေ့ ၀ယ်ယူကြသည်။
ကျမတို့ရောက် သောအခါ ပင်ပန်းစွာသွားလာနေမည့်အစား အိမ်မှာလာနေရန် မေမေကခေါ်ထားပါသည်၊ ထို့ ကြောင့်အများအားဖြင့် အိမ်တွင်ညဉ့်အိပ်ညဉ့်နေ လာရောက်ခါ ကျမနှင့်အတူအိပ်ပါသည်၊ သူမအိပ် ခင်ကျမအား သီပေါမင်းနှင့် စုဘုပြောပြတတ်ပါသည်၊ သူ၏သခင်ရင်းများဖြစ်သောကြောင့်လည်း အလွမ်း ပြောပြောပြနေသည်ဟုဆိုပါသည်၊ တခါတခါလည်း ပြောရင်းပြောရင်းမှ မျက်ရည်များသုတ် သည်ကို တွေ့ရပါရော အဆိုးပါဒွေးရောယှက်တင် ဖြစ်နေပါသည်၊ သူသိထားသော အတွင်းရေးများ သည် အခြား သော နန်တော်သူတို့ သိရှိကြသော ရှုဒေါင့်မြင်ကွင်းမျိုးထက်ပင် ပိုပိုသာသာကြားသိ ရပါသည်၊ သူသည် ထိုအချိန်အခါက အတွင်းကျကျနေရ၍ စုဘုရားလတ်၏ ခိုင်းစေတော်မှုသမျှကို မြတောင်မြို့စားမင်သ္မီး ဘ၀မှ နန်းမတော်ကြီး စုဘုရားလတ်ဘ၀အထိ ပိပိယိယိအကျိုးတော်ဆောင် ခဲ့ရသူဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ခဲ့ရပါသည်။
ထိုအခါမှာ ပထမကမ္ဘာစစ်က ဘော်လန်ဒီရာစစ်သား စုဆောင်းခြင်း၊ စစ်စရိတ်ငွေချေးခြင်း၊ ဘိလပ် မှ "မွန်တေဂူ"၏ ကတိများပေးခြင်းစသည်တွေ လွန်ခဲ့ပြီးစစ်ပြေငြိမ်းစ ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်၊ မြန်မာ ပြည်သို့ အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်ကြီး လတ်ကစ်ဘက်ပြတ်သွားသူ လာမည်ဆို၍ မြန်မာပြည်က လက်ဖ တင်နင် ဂေါ်ဝါနာ ခေါ် ဒုတိယဘုရင်ခံက အစပြုပြီး အစိုးရအရာရို ဋ္ဌာနအားလုံးအလုပ်များ ကြရပါ သည်၊ ကျမ ဖေဖေ ဦးမြတ်ကျော် သည် မန္တလေးအထိသွား၍ အလုပ်ဝတ္တရားဆောင်ရွက်ရပါသည်။
၎င်းမှပြန်လာသော အခါရွှေဘိုမြို့မှနေ၍ ရန်ကုန်မြို့သို့ မြို့မရာဇ၀တ် ၀န်ထောက်ကလေး ရာထူး နှင့် ပြောင်းရွှေ့ ရန် စာရောက်လာပြန်ပါသည်။
သို့သော် ဦးမြတ်ကျော်သည် ရုတ်တရက်မော၍ နှလုံးသွေားအားနည်းခြင်း၊ ချောင်းဆိုးလျှင် သွေးပါလာ ခြင်း စသော ရောဂါဖြစ်လာသည်၊ အပရိကပင် မှတ်ထင်၍ ဆရာဝန်ခေါ်ပြရာရောဂါ အခြေအနေ မဆိုးမှီ အနားယူ ဆေးစားစေချင်ကြောင်းကို ဆရာဝန်က အကြံပေးလေသည်၊ ဦးမြတ်ကျော် အလိုက ဆေးလည်း စားမည်၊ ရန်ကုန်လည်း အလုပ်လက္ခံရန်သွားမည်၊ ၂-မျိုးဆုံး ဖြတ်သည်။
မုန်းတိုင်းတချီစ, လေပြီ ဆက်ရန်
Posted by SHWE ZIN U at 6:52 AM5comments Links to this post
သူတို့တစ်တွေ အခုဘာလုပ်နေကြသနည်း။ ကျွန်မနှင့် အတူတူမီးရထားတွဲစာသင်ခန်းတွင် အတူတူ ''ခရီးသွား'' ခဲ့ကြသူများ ဘာလုပ်နေကြသနည်း။
တိုမိုကျောင်းအားကစားပြိုင်ပွဲနေ့တွင် ဆုတံဆိပ်အများဆုံးရရှိသော တာကာဟာရှီသည် နောက်ထပ်အရပ် မြင့်လာခြင်းမရှိသော်လည်း မီဂျီတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရသော အီလက်ထရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ကို ရရှိခဲ့လေသည်။
သူသည် ယခုအခါဝယ် ဂျပန်ပြည်အလယ်ပိုင်း ယာမာနာရေကန်အနီးရှိ အီလက်ထရွန်နစ်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု တွင် မန်နေဂျာဖြစ်နေပါသည်။
ကျွန်မသည် သူနှင့်သူဇနီးကို တွေ့ဆုံရန် ဟန်မာမတ်ဆုသို့သွားပါသည်။ သူ၏ဇနီးသည် သူ့အကြောင်းကို ကောင်းစွာသိထားသူဖြစ်ပါသည်။ တိုမိုကျောင်းအကြောင်းကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူမကို ပြောပြထားသည့်အ တွက် သူမသည် တိုမိုကျောင်းသူတစ်ဦးကဲ့သို့ပင် တိုမိုကျောင်းအကြောင်းကို သိထားပါကြောင်းဖြင့် ကျွန်မ ကို ပြောပြပါသည်။ သူမ၏ခင်ပွန်းသည် အခြားသူများနှင့် ယှဉ်လိုက်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပုပုကလေး ဖြစ် နေသော်လည်း အထူးခိုင်မာကြောင်းဖြင့် ကျွန်မကို ပြောပြပါသည်။
တာကာဟာရှီက သူသည် တိုမိုကျောင်းသို့ ပထမဆုံးစတင်ရောက်ရှိသည့်နေ့က ကျောင်းတွင် ကိုယ်အင်္ဂါမ သန်မစွမ်းသူအချို့ကို မြင်တွေ့ရသဖြင့် စိတ်သက်သာရာရခဲ့ကြောင်း၊ တိုမိုကျောင်း၌ ပညာ သင်ကြား ရသည် မှာ စိတ်ပျော်ရွှင်သောကြောင့် အိမ်ပြန်ရမှာကိုပင် စိတ်မပါကြောင်း ပြောပြပါသည်။
ဆရာကြီး ကိုဘာယာရှီသည် မိမိကို စိတ်အားမငယ်ဖို့ အမြဲအားပေးစကားပြောကြောင်း၊ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှု အပြည့်အ၀ထားဖို့ အမြဲတိုက်တွန်းကြောင်း၊ လူအများ၏ နောက်ဘက်တွင် နေလေ့ရှိသော မိမိအား ဆရာကြီးက လူရှေ့သို့ခေါ်ထုတ်ကာ အစစအရာရာကို သတ္တိရှိရှိ၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြင့် ရင်ဆိုင်ရန် အလေ့အ ကျင့်များ ပြုလုပ်ပေးကြောင်း တာကာဟာရှီက ပြောပြပါသည်။
တာကာဟာရှီအား ယခုကဲ့သို့ လူတော်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးသောအချက်များတွင် သူ၏ကောင်း မွန်သော မိသားစု၊ ကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းများ ပါဝင်လေသည်။
မည်သို့ပင်ရှိစေ ဆရာကြီးက ကျွန်မကို ''မင်းဟာ တကယ့်ကို လိမ္မာတဲ့ မိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ဖြစ် တယ်၊ မင်းသိရဲ့လား''ဟု အားပေးစကားပြောသလို သူ့ကိုလည်း ''မင်း ဒါကို လုပ်နိုင်တယ်''ဟူ၍ အားပေး လေ့ရှိရာ ထိုအားပေးချက်သည် သူ၏ဘ၀ကို ကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးရာ၌ အလွန်ထိရောက်မှုရှိခဲ့ သည်ဟု ကျွန်မ ယုံကြည်ပါသည်။
ဟာမာမတ်ဆုမှ ကျွန်မပြန်ခါနီးတွင် တာကာဟာရှီသည် ကျွန်မမေ့နေသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြောပြ ပါသည်။ သူက ''သူသည် တိုမိုကျောင်းသို့ လာသည့်အခါ လမ်းခရီး၌ အခြားကျောင်းမှ ကျောင်းသား များ၏ အနိုင်ကျင့်မှုကို အမြဲလိုလိုခံရလေ့ရှိကြောင်း၊ ကျောင်းသို့ရောက်သောအခါ သူသည် မျက်နှာ မကောင်းဘဲ စိတ်အားငယ်နေလေ့ရှိရာ ကျွန်မက သူ့ကိုကြည့်ပြီး ဘာဖြစ်လာသလဲဟု မေးလေ့ ရှိကြောင်း၊ အကျိုးအကြောင်းကို သိရသောအခါ ကျွန်မက ကျောင်းဝင်းအပြင်ဘက်သို့ အမြန်ဆုံး ပြေးထွက်သွားလေ့ရှိ ကြောင်း၊ ခဏအကြာတွင် ကျွန်မပြန်ရောက်လာပြီး 'သူတို့မရှိကြတော့ဘူး၊ နောင်ကို ဒီလိုဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး'ဟု ပြန်ပြောကြောင်း၊ ထိုအခါ သူသည် အလွန်ပင်ဝမ်းသာမိကြောင်း''ဖြင့် ပြန်ပြောပါသည်။
''နင်က အဲဒီလို ပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက် ငါလေသိပ်ကို ပျော်သွားတာပဲ''ဟု ခွဲခွာခါနီးတွင် တာကာဟာရှီက ပြောပါသည်။
ထိုအကြောင်းကို ကျွန်မမေ့နေပါသည်။ ကျွန်မသည် သူ့ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ ယခုလိုသတိပြန်ရ စေသောကြောင့် တာကာဟာရှီကို ကျွန်မအလွန်ပင် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဆရာကြီးမစ္စတာ ကိုဘာယာရှီ၏ တတိယသမီးဖြစ်သူ မိရိုး-ချန်သည် ကူနီတာချီ ဂီတကောလိပ်၏ ပညာရေး ဌာနမှ ဘွဲ့လက်မှတ်ရခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ထိုကောလိပ်ကျောင်း၌ပင် တေးဂီတဆရာမအဖြစ် အမှုထမ်း လျက်ရှိပါသည်။ သူမသည် ငယ်စဉ်ကတည်းက လမ်းလျှောက်ရာ၌လည်းကောင်း၊ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားရာ၌ လည်းကောင်း တေးဂီတသံစဉ်အတိုင်း အချက်ကျကျ လှုပ်ရှားလေ့ရှိကြောင်းကို ဖခင်ဖြစ်သူ မစ္စတာ ကိုဘာယာရှီသည် ကောင်းစွာသတိပြုမိခဲ့လေသည်။
ဆက်ကိုး မတ်ဆူယာမ (မစ္စက်ဆိုက်တို)
တိုမိုကျောင်းသို့ ကျွန်မ ပထမဦးဆုံး ကျောင်းစတက်သည့်နေ့က ကျွန်မဆုံတွေ့ခဲ့သည့် ယုန်အရုပ်ပါသော ဂါဝန် လှလှကလေးကို ၀တ်ဆင်ခဲ့သော မျက်လုံးပြူးပြူးနှင့် မိန်းကလေး ဆက်တိုး-ချန်သည် တိုကျို အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာပြ ဆရာမအဖြစ် အမှုထမ်းလျက်ရှိနေပါသည်။ သူမသည် ဂျပန် တောင်တန်း ဒေသတစ်ခုတွင် တောင်တက်ရင်း တွေ့ခဲ့သူတစ်ဦးနှင့် အိမ်ထောင်ကျနေပါသည်။ သူတို့၏ သားဦး အမည်ကို သူတို့စတင်တွေ့ဆုံရာ တောင်တန်း၏အမည်ဖြစ်သည့် ''ယာဆူတာကာ''ဟု ခေါ်တွင် စေပါသည်။
ကျွန်မကို မယူဘူးဟု ပြောခဲ့သော တာအိဂျီ-ချန်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော ရူပဗေဒပညာရှင်တစ် ယောက်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ သို့သော်သူသည် ယခုအခါတွင် ဂျပန်ပြည်တွင် မရှိဘဲ အမေရိကန်ပြည် သို့ရောက်နေပါသည်။ သူသည် အမေရိကန်ပြည်၌ပင် အိမ်ထောင်ကျနေပါသည်။
ကျွန်မ၏ ကျစ်ဆံမြီးကို ဆွဲခဲ့သူ အိုအိသည် သစ်ခွပန်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အောင်မြင်မှုရရှိနေပါသည်။ သူ သည် တိုမိုကျောင်းမှ ထွက်ခဲ့ပြီးနောက် အခြားမည်သည့်ကျောင်းတွင်မျှ ပညာမသင်ကြားတော့ပေ။ သူသည် သစ်ခွပန်းစိုက်ပျုိးရေးအလုပ်တွင် ကျွမ်းကျင်သောကြောင့် ဂျပန်ပြည်အနှံ့သို့ ခရီးထွက် နေရ ပါသည်။ ကျွန်မ သည် အလွန်အလုပ်များနေသော အိုအိနှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့်သာ စကားပြောခဲ့ရပါသည်။ သူစကား ပြောသော လေသံသည် တိုမိုကျောင်းတုန်းက လေသံအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့မျှ ပြောင်းလဲ ခြင်းမရှိပါ။
မီးသင်္ဂြုံလ်ထားသော ပြာများကို ယူခဲ့မည်ဟု ရွှတ်နောက်နောက်ပြောသော မီဂီးတာသည် သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး ဘွဲ့တစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော်သူသည် ပုံဆွဲခြင်းအလုပ်ကိုသာ စိတ်အားထက်သန်သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်ကို မလုပ်တော့ဘဲ ပန်းချီကျောင်းသို့ တက်ရောက်ကာ ဘွဲ့လက်မှတ်ကို ရယူပြီးနောက်၊ ကိုယ်တိုင် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို တည်ထောင်ထားလေသည်။
တိုင်းပြည်အတွက် စစ်မြေပြင်သို့ သွားရောက်ကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသော ကျောင်းစောင့်ကြီး ရာရိုး-ချန်သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးသောအခါ ပြန်ရောက်လာပါသည်။ သူသည် နိုဝင်ဘာလ(၃)ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပမြဲဖြစ်သည့် တိုမိုကျောင်းသားဟောင်းများ မိတ်ဆုံပွဲသို့ မပျက်မကွက် တက်ရောက်လေ့ရှိပါ သည်။
မြန်မာပြန်သူ - မြသိန်း
နောက်ဆုံးအပိုင်းတွင် ပုံလေးများ ထည့်ရန် အကြံပေးခဲ့သော ညီမငယ် မိုမိဂျိ နှင့် တော့တိုး-ချန် ကလေး အား ချစ်ခင်စွာ အားပေး ဖတ်ရှု ခဲ့သော စာချစ်သူများ အား အထူး ကျေးဇူးတင် လျှက်......
ကမ္ဘာကြီး ကောင်းကျိုးအတွက် အလေးထား လုပ်ဆောင်ခဲ့သော လူသားများအား ထာဝရလေးစား လျှက်...
တော့တိုး-ချန် ပြီးရင် ဘာတင်မလည်း ဆိုတဲ့ စာချစ်သူများ အတွက် မြန်မာပြည်၏ဟယ်လင် ဦးမြင့်ဆွေ (ဖြူး) ဘာသာပြန်.. မူရင်း HELLEN OF BURMA BY HELEN RODRIGUEZ အား တင်ပေး ပါမယ်..ဒါလည်း ဖြစ်ရပ်မှန်ပါဘဲ..အားလုံးဘဲ စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါတယ်..
စာချစ်သူများ အား အစဉ်လေးစားလျှက်
Posted by SHWE ZIN U at 1:51 AM4comments Links to this post
Labels: မြသိန်း ဘာသာပြန် တော့တိုး-ချန်
လူမှန်းသိတတ်စ ကထဲက ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ တယောက်အပါအဝင်ပေါ့..၊ ကျနော် တို့ အိမ် နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် အိမ်မှာနေကြတယ်..။
အဲဒီခေတ်က အိမ်ဝန်းကြီးတွေက အကျယ်ကြီးတွေ..၊ ကျနော် တို့ အိမ်ဝန်းကလည်း ကျယ်တာဘဲ..ဒါပေမဲ့ သူတို့ အိမ်ဝန်းက ပိုကျယ်တယ်..၊လူ လည်းနည်းတော့ ပိုပြီးတော့ ကျယ်သလိုဘဲ.....အဖိုး အဖွား ရယ် ဦးလေး ၂ ယောက်ရယ် သူငယ်ချင်းရယ်..စုစုပေါင်း ၅ယောက် ဘဲ နေကြတယ်..၊ တဝန်း ထဲ မှာ အိမ် ၂လုံး ဆောက်ထားတယ်..၊ အိမ် အကြီး တလုံးမှာ သူတို့ နေကြတယ်..၊ နောက်တလုံးက သူတို့ အဖိုး အလုပ် လုပ်တဲ့နေရာ..အဲဒီအိမ်လေး ထဲမှာ သားရေ ပိုက်ဆံအိတ် ကလေးတွေလုပ်တယ်..ယောက်ကျား ကိုင် ပိုက်ဆံအိတ် အသေးလေး တွေနဲ့ မိန်းမ တွေ ကိုင် ဘို့ ဆလင်းဘက် တွေလည်း လုပ်တယ်.. သားရေ အစစ်နဲ့ အိတ်ပေါ်မှာ မြန်မာ ရိုးရာ ပန်းချီပုံလေးတွေကို ဖောင်းကြွ ရေးပြီး.. ဆေးချယ် ထားတယ်.. မင်းသား မင်းသမီး ရုပ် ကလေးတွေနဲ့ တခြား မြန်မာ့ရိုးရာ ပုံလေး တွေပေါ့..၊ လက်ဖြစ် ဆိုတော့ အိတ်လုံး ရေ နဲနဲဘဲ ထွက်တယ် ဈေး လည်း ကြီးတယ်..၊ အဲဒီခေတ်က နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေ ကိုရောင်းဘို့ နဲ့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ သူတွေသာ သုံးနိုင်တဲ့ အိတ်လေးတွေပေါ့..။
ကျနော် က သူငယ်ချင်း စီကိုသွားလည်ရင်း အဲဒီအိတ်ကလေးတွေနဲ့ ရင်းနှီးနေတယ်..၊ ကျနော့် သူငယ်ချင်း က သူ့အဖိုး ကို အလုပ်ကူ လုပ်ပေးရတယ်..၊ အိတ် အရောင်တင်ပေးတာတို့ အိတ်ဘေး လေးတွေကို သားရေ ကြိုးနဲ့ တွဲချုပ်တာတို့ ကလေး လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ကလေး တွေပေါ့..။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းက အဲဒီအိမ်ရဲ့ မြေးဦးပါ .....ဒါပေမဲ့ သူ့အမေက မိဘတွေ သဘောမတူတဲ့ လူနဲ့ ယူလို့ ဆိုပြီး သေခန်းဖြတ် ထားတာတဲ့..၊ ကျနော့် သူငယ်ချင်း တယောက်ထဲကိုဘဲ သူတို့က ခေါ်ထားတယ်..၊ သူ့ အဖေ ရော အမေ ရော အိမ် ကို အ၀င်အထွက် မလုပ်ရဘူး..၊ နောက်ပြီး သူငယ်ချင်း အမေတို့ က ရှမ်းပြည် က ရွာလေး တရွာမှာ နေကြတယ်တဲ့..၊ ကျနော်တောင် တော်တော်ကြီးမှ သူ့အမေ ကိုတွေ့ဘူးတယ်..။
သူ့ အဖိုးအဖွားတွေက ကျနော့် သူငယ်ချင်းကို စည်းကမ်း အရမ်းတင်းကြပ်ထားပြီး မျက်နှာသာလည်း မပေးဘူး..၊ သူ့ အဖိုး ကလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်..၊ ဦးလေး တွေကလည်း လူ့ဂွစာ တွေ..၊ ကျနော့် သူငယ်ချင်း ဟာသူ့ အဖိုး အိမ် မှာ တော်တော် မျက်နှာငယ် ပါတယ်..၊ သူငယ်ချင်း က မျက်နှာငယ်ရတော့ ကျနော်ကလည်း သူ နဲ့ ပေါင်းတာဆိုတော့ ကျနော် ပါ အဲဒီအိမ် မှာ မျက်နှာငယ်ရပါတယ်..။
ကျနော်တို့ အတွက် သူတို့အိမ်ဝန်းထဲမှာ ဆော့စရာတွေ စားစရာအပင်တွေ အများကြီးပါ..၊ ကျနော် မှတ်မိသလောက် ပြောရရင် အိမ်ခေါင်းရင်းမှာ သက်တန်းရင့် စက္ကူပန်းရောင်စုံ ခြုံကြီးရှိတယ်၊ စပယ်ရုံတွေ ရှိတယ် ..၊ မာလကာပင် ၃-၄ ပင်လောက်ရှိတယ်..၊ နောက်ပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်း ကျနော် တို့ မန္တလေး မှာ စိုက်လေ့ မရှိတဲ့ ဖြစ်လည်း မဖြစ်ထွန်းတဲ့ ဖျော်ရည်သီးပင် (ပင်မှဲ့ သီးပင်) စင်ကြီး ရှိပြီး အသီး သီးချိန် ဆိုရင် အဲဒီ အပင်ကြီးက အသီးတွေ အများကြီး သီးတယ်..၊ နောက်ပြီး အုန်းပင် ၂ပင် ၃ပင် ရှိတယ်..၊ အဲဒါက အိမ်ခေါင်းရင်း မှာ..၊ အိမ်နောက်မှာ လည်း အဲဒီလိုဘဲ..အပင် အစုံရှိတယ်၊ သြဇာပင် တွေလည်းရှိတယ်..၊ အိမ်ရှေ့မှာ နှင်းဆီပန်း ရောင်စုံတွေ ကိုလည်း အိုးတွေနဲ့ စိုက်ထားသေးတယ်..၊ ကျနော် တို့ ကလေး တွေ အတွက် ဆိုရင်တော့ အားလုံးဟာ မက်မောစရာ ဆော့စရာတွေ ကြီးဘဲပေါ့..။
သူငယ်ချင်း ရဲ့ အိမ်ဝန်းတံခါး က အမြဲ ပိတ်ထားတယ်..၊ သော့ပိတ်ထားတာ..၊ ကျနော်ကလည်း သူငယ်ချင်းနဲ့ ဆော့ချင်တယ်..သူငယ်ချင်းကလည်း အဲဒီအတိုင်းဘဲ.. ကျနော် တို့ ၂ယောက်ဟာ သူတို့ အိမ်က လူကြီးတွေ အရိပ်အခြေကြည့်ပြီး အခွင့်သာတာနဲ့ သူတို့ အိမ်တံခါး သော့ဖွင့် ပြီး အထဲဝင် ရတယ်.. သူငယ်ချင်းက ဖွင့်ပေးတာပါ.၊ သူငယ်ချင်းက အပြင်မှာ ဘယ်တော့မှ မဆော့ရဘူး ရပ်ကွက် ထဲက ကလေးတွေ နဲ့ လည်း သူတို့ အိမ်က ပေးမဆော့ဘူး ကျနော် တယောက် ကိုဘဲ မလွဲသာလို့ အဝင်ခံ တာနဲ့ တူပါတယ်..။
ကျနော်က ရပ်ကွက်ထဲ ဗျောင်းဆန်အောင် ဆော့ပြီးရင် သူငယ်ချင်း အတွက် အဖော် သွားလုပ် ပေးရ သေးတယ်.၊ အိမ်ထဲရောက်ပေမဲ့ သူငယ်ချင်းက သူ့အလုပ်တွေ မပြီးသေးရင် မဆော့နိုင် သေးပါဘူး.. သူ့အလုပ်တွေ ပြီးအောင်လုပ်ရသေးတယ်..၊ ကလေး လည်း ကလေး နဲ့ တန်အောင် သူ့အဖိုး က ခိုင်းသေးတာ..၊ သူ့အဖိုး က ဆိုးလွန်းတော့ အလုပ်သမား လေး ၂ယောက်လောက် ရှိတာ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် နဲ့ ဆိုတော့ သူတို့ မရှိတဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီအလုပ် တွေကို ကျနော့် သူငယ်ချင်းလေး ဘဲ လုပ်ရတာပါ။
ကျနော်ကလည်း စပ်စုတဲ့သူ နောက်ပြီး အလုပ်ပြီးမှ ဆော့ရမှာ ဆိုတော့ သူငယ်ချင်း ရဲ့ အလုပ်တွေ ကူလုပ် ပေးရတော့ တာပေါ့..၊ အလုပ်လည်း လုပ် ပေးရသေးတယ်..သူ့အဖိုး မကြိုက်ရင် အငေါက်က ခံရသေးတယ်..၊ အဲဒီ အိမ် မှာ သူငယ်ချင်း နဲ့ ဆော့ဘို့ တော်တော်လေး မျက်နှာငယ်ခဲ့ရပါတယ်..၊ နောက်ပြီး အိမ်ဝန်းထဲမှာ ဆော့တာ ဆိုတော့ သိပ်ပြီး ပြေးတာလွှားတာတွေ မကစား နိုင်ပါဘူး.. တူတူပုန်းတမ်း တို့ အိုးပုတ်တန်း တို့ပေါ့ ..ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းက ယောက်ကျားလေး ဆိုတော့ အိုးပုတ်တန်း တွေဘာတွေ မဆော့ချင်ပါဘူး..၊။
အချိန် တော်တော်များများကို ကျနော်တို့ ကာတွန်းစာအုပ်တွေ ထိုင်ဖတ်ကြတယ်.. အပင်တွေ ပေါ် တက်လိုက် ဆင်းလိုက် ဆော့တယ်..၊ သားရေကွင်းပစ်တန်း၊ ပိုလိုကား ရိုက်တန်း၊ ပေသီး လှိမ့်တန်း ကစားတယ်..၊ စားရတဲ့ အသီးတွေ အကုန် ခူးစားတယ်..၊ နောက်ပြီး သူငယ်ချင်းက ဗန်ဒါစေ့ တွေ ထုပေးတယ်..၊ အဆန် မကြေအောင် ထုပေးတာလေ.. စားလို့ ကောင်းတယ်..နောက်ပြီး ကျနော့် အတွက် မာလကာသီး (ရွက်ပုန်းသီး) တွေ ခူးထားပြီး ကျွေးတယ်..၊ ဒါတွေက သိပ်ငယ် တဲ့ ဘဝလေးတွေ ထဲက သူငယ်ချင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တစိတ်တပိုင်းပေါ့..။
သူငယ်ချင်းက တော်တော်ရိုးပါတယ်.. ကလေး အတွေးနဲ့ ပြောရရင် တော်တော် အ ပါတယ်..၊ သူ့ အဖိုး တို့ ဦးလေး တို့ကလည်း သူတို့မကြိုက်တာ တွေ့ရင် လက်ပိုက်ခိုင်းပြီး ကြိမ်လုံးနဲ့ ရိုက်တာပါ..၊ ကျနော် တို့ လို ဘယ်တော့ မှ အရိုက်မခံရတဲ့ သူတွေရဲ့ စိတ်ထဲ မှာတော့ သူငယ်ချင်းဟာ အတော် သနားစရာ ကောင်းနေပါတယ်..၊ ဒါကြောင့်လည်း ကျနော် က သူငယ်ချင်း အတွက် မျက်နှာ အငယ်ခံပြီး သူငယ်ချင်း လုပ်ပေးခဲ့ ရတာပါ..။
သူငယ်ချင်း ကတော့ ကျနော်က ဒီလောက် အနစ်နာခံ ပေါင်းပေးထားတာတောင် ကျနော်တို့ မောင်နှမတွေ များဆော့ကြရင် ကျနော်က ဘက်မတူဘဲနဲ့ အငယ်တွေနဲ့ ဆော့တယ် ဆိုပြီး သူက မောင်လေး ညီမလေး တွေဘက်က ကူပြီး နိုင်အောင် ဆော့ပေးခဲ့တယ်..၊ ကျနော့် သားရေကွင်းတွေ ပေသီးတွေ ပိုလိုကား တွေဆိုရင် မောင်နှမ တွေနဲ့ နိုင်ထားသလောက် သူ ကူပြီး ဆော့ ပေးရင် အကုန် ကုန်တာဘဲ..အဲဒီမှာ ကျနော် သူ့ကို မခေါ်ဘဲ ခဏခဏ နေဘူးပါတယ်..ကျနော် ရှုံးအောင်လုပ်တဲ့ အမှု့နဲလေ..။
ဒါပေမဲ့ သူ ပြန်ချော့တဲ့ မာလကာသီးတွေ နဲ့ ဘန်ဒါစေ့ဆံ တွေကြားမှာ ကျနော် မခေါ်တာ ကြာကြာ မခံပါဘူး..၊ ပြန်ပြန် ခေါ်သွားကြတာပါဘဲ..၊ သူ ကျနော်ကို ချော့တဲ့ အထဲမှာ သူ့အဖိုး အလုပ် က ပိုက်ဆံအိတ် သေးသေးလေးတောင် ပါပါသေးတယ်..၊ အဲဒီပိုက်ဆံအိတ်ကလေးတွေက ချစ်စရာ အရုပ်ကလေး တွေနဲ့ သိပ် လှပေမဲ့ တခါမှ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ မထင်မိပါဘူး..၊ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်း လုပ်ပေး တဲ့ အိတ်ပေါက်စ လေးကိုတော့ စွဲလန်းမိပါတယ်..။
ကျနော့် အတွက် ဘယ်အချိန် ကထဲက သူ့အဖိုးမသိအောင် လုပ်ထားတဲ့ အိတ်ကလေး လည်း မသိပါဘူး မင်းသမီး လေး ဆီမီးခွက် ကနေတဲ့ အရုပ်ကလေး ပါတဲ့ အိတ်ကလေးပါ..၊ ချစ်စရာလေးပါ.. ဒီအိတ်ကလေး မျက်နှာနဲ့ အဲဒီတခါက သူ့ကို ချက်ခြင်း ပြန်ခေါ်လိုက် ရပါတယ်..။
အဲဒီ အိတ်ကလေး ကို ကျနော် သိတ်ချစ်ပါတယ်.. အချိန်တော်တော်ကြာ သိမ်းထားပါသေးတယ်.. သူ ကလည်း ပြောပြတယ်.. ဒီအိတ်ကလေး ပြီးအောင် သူကိုယ်တိုင် သားရေအပိုင်း သေးသေး လေးရှာပြီး ချုပ်ထားတာပေါ့. နောက်ပြီး အဲဒီအပေါ်က ဖောင်းကြွ ပုံကြမ်းလေး ကို လည်း သူ ဘဲ မတတ်တတတ်နဲ့ ဆေးချယ် ထားတယ်ပေါ့..၊ ဒါကြောင့် မင်းသမီးလေး ရဲ့ ဆေးရောင် လေးတွေက သိပ်မသေသပ်ပါဘူး... ဒါပေမဲ့ ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုယ်တိုင် ကျနော့် အတွက် ရည်ရွယ် လုပ်ထားတာ ဆိုတော့ အိတ်သေးသေး လေး ကို ချစ်ခဲ့ပါတယ်..။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ တတွေကြီးပြင်းလာခဲ့ ကြပါတယ်..၊ ကြီးပြင်းလာတာနဲ့ သူငယ်ချင်း ဘဝ လေးဟာ ပိုပိုပြီး ခက်ခဲလာတယ် ထင်တယ်..၊ နောက်ပြီး သူ့ဦးလေး တွေ နဲ့ အဖိုးကလည်း ကျောင်းသွားချိန်က လွဲလို့ ငယ်ငယ်က အတိုင်းဘဲ သူ့ ကို အိမ်ထဲမှာ ဘဲ ထိမ်းချုပ်ထားချင်သေးတယ် ထင်ပါတယ်..၊ သူငယ်ချင်း ကလည်း အရွယ်ရောက် ခဲ့ပြီ ဆိုတော့ သူသွားချင်၊ လာချင်တာတွေကို လစ်ရင်လစ်သလိုထွက်သွားလေ့ ရှိသလို.. သူဦးလေး တွေကလည်း အလျှော့ မပေးဘဲ သူ့ကို အဲဒီအချိန်ထိဘဲ လက်ပိုက်ခိုင်းပြီး ကြိမ်လုံး နဲ့ ရိုက်လေ့ ရှိတုန်းပါဘဲ..။
သူငယ်ချင်းက ရှက်တတ်ပါပြီ..၊ သူ ဘဝမှာ သူ မနေပျော်တော့ပါဘူး..၊ လွတ်လပ်ခြင်းကိုလည်း သူ နှစ်သက် တတ်ပါပြီ...........
လပြည့်ည တည ကျနော် တို့အိမ်ရှေ့က မြလေးပန်းရုံ အောက်က တန်းလျှားခုံ လေးမှာ ကျနော် တယောက် ထဲ မိုးချုပ် တဲ့ထိ ထိုင် ပြီး လရောင် နဲ့ တိတ်ဆိတ်ခြင်း ရဲ့ အရသာကို ခံစားနေတုံး သူငယ်ချင်း ရောက်လာတယ်..၊ ကျနော့် ဘေးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်း ရဲ့ ပုံရိပ် ဟာ နူးညံလွန်း တယ်....။
ကျနော် မမျှော်လင့် တဲ့ စကားတွေ ပြောလာတယ်.. သူ ကျနော့် ကို တသက်လုံးချစ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့ ..၊ သူ အခု အဝေးကို ထွက်သွားတော့ မှာမို့ ဖွင့်ပြောတာပါတဲ့..လ ရောင် တွေ စွန်းထင်းနေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းမှာ အချစ်ရောင် တွေနဲ့ ဖိတ်ဖိတ်လက် နေတာကို ကျနော် မယုံကြည် နိုင်စွာနဲ့ ငေးကြည့် မိတယ်..၊ သြ ..သူငယ်ချင်းဟာ တကယ်ဘဲ အချစ်အကြာင်း ပြောတတ်တဲ့ ယောက်ကျားတယောက် ဖြစ်လာပါ ပေါ့လား လို့.. ကျနော် တကယ်ဘဲ သူ့ကို ယောက်ကျား တယောက် အဖြစ် သဘောမထားတဲ့ အပြင် ကျနော့် ကို ဒီလို ချစ်စကား ပြောလာလိမ့်မယ် ဆိုတာလည်း မျှော်လင့်မထားခဲ့ပါဘူး..။
သူ့ ချစ်စကားတွေဟာ ကျနော့် အသဲနှလုံးကို ဆွဲကိုင် မလှုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး..၊ သူ့ ချစ်စကားတွေထက် ပညာ တပိုင်းတစနဲ့ သူ့ဘဝလေး ဒုက္ခရောက်သွားမှာကိုဘဲ ပိုပြီးတော့ အစိုးရိမ်ကြီး နေခဲ့ပါတယ်..........
ကျနော် တို့ ၂ ယောက်ပညာတွေ အတူတူ သင်ကြမယ်.. ချစ်ခြင်းတွေကို နောက် မှ စဉ်းစားကြမယ် သူငယ်ချင်းရေ... ထွက်မသွားလိုက်ပါနဲ့လို့ ကျနော်ပြောခဲ့ပါတယ်..၊ သူ ကလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်.. သူ ဟာ ယောက်ကျား တယောက် ပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ ကိစ္စ တခုကို ဘယ်တော့မှ မပြင်ဘူးဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်..။
သူ မသွားခင် တညက ခုံတန်းလေးမှာ ဘဲ ကျနော်တို့ တွေ့ခဲ့ကြသေးတယ်.. ကျနော်စီက တိကျတဲ့ အဖြေ တခု ရခြင်ပါတယ်တဲ့.. ချစ်ခြင်းတရား တွေ သယ်ဆောင်သွားပြီး .. သူ ပိုက်ဆံချမ်းသာအောင် လုပ်မယ်တဲ့.. ကျနော့် အတွက် ချစ်ခြင်း နဲ့ ချမ်းသာခြင်း တွေကို သူလက်ဆောင် ပြန်ယူ ခဲ့ပရစေတဲ့..၊ သူငယ်ချင်း ရေ ဒို့ တကယ် မချစ် တတ် သေးပါဘူး...လို့ ပြန်ပြော ခဲ့တဲ့ ကျနော့် လက်မောင်း ၂ဘက် ကို ဆွဲကိုင် လှုတ် ရင်း မျက်ရည် တွေကျလာတယ်......ဒို့ ၂ ယောက် တသက်လုံး ဝေးပြီနော် တဲ့..........
ငယ်သူငယ်ချင်းလေး အကြောင်းကို ပြန်စဉ်းစားမိတဲ့ ကျနော့် လက်မောင်းလေး နှစ်ဘက် နာကြင်လာခဲ့ ရသလို .............
ဘယ်တော့မှ ပြန်လည် မဆုံဆည်း တော့တဲ့ ကျနော့် ငယ်သူငယ်ချင်းလေး အတွက် ကျနော့် နှလုံးသား လေးလည်း နာကြင် ခဲ့ဘူးပါတယ် ......
ချစ်သူငယ်ချင်းရေ..တကယ်ဘဲ တသက်လုံး ဝေးခဲ့ ပြီနော်....။
Posted by SHWE ZIN U at 6:41 AM 10 comments Links to this post
ဒဂုန်ခင်ခင်လေး နှစ်ပေါင်း ၆ဝ အပိုင်း (၄)
၀လုံးကိုဝိုင်းအောင်ရေးရသော ကင်ဒါဂါတင် အတန်းသူ ကလေးများမှာ ကြက်တောင်စည်း ဘူးပွင့်ကလေး များနှင့် ချည်းလိုလိုဖြစ်သောကြောင့် ကျမ၏ဆံတိုကို သူတို့နဲ့ တူအောင်အပေါ်ပိုင်း ကစုစည်းထား လိုက်သည်။ သို့သော် အောက်ပိုင်းကဆံစများက ဆံရစ်ဝိုင်းလို မဟုတ်ဘဲပွစိပွ ရောင်း မြင်မကောင်း အောင်ရှိသည်။ မေမေထံမှာနားပူနားဆာ လုပ်လွန်း၍ သရက်ထည်စတခုကို လုံကွင်းအဖြစ်ချုပ်ပေးသည်။ အထပ်ဆင်နှင့် ဘာနှင့်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းလုံကွင်းကိုဂါဝန်ပေါ်မှ နေ၍၀တ် သည်။ ထမီကဲ့သို့ မ၀တ်ဘဲ မနက် ကျောင်းသွားခါနီးမှ အချိန်မီလဲလှယ်ဆင်ယင်ရသောကျောင်း ၀တ်စုံများဖြစ်ပါသည်။
ဗူးပွင့်ကို အချိန်မှီချည်နှောင်ပေးရန် အိမ်ဦးခန်း၌ ဆွမ်းပွဲပြင်နေသော ဖွားဖွားမမသက်ကို မယားဒယား လုပ်၍ နားပူရပါသည်။ ဖွားဖွားလက် မအားသောအခါ ကြီးကြီးယုခေါ် ဖွားဖွားယုကို အပူ ကပ်ရသည်။
ကြာတော့ ဒီကိစ္စကို ဖခင်ဖြစ်သူဦးမြတ်ကျော် သိသွားပါသည်။ သူသည် စိတ်ဝင်စားစွာနှင့် သ္မီးဘာလို့ဒီလို ဆံပင်ကို စီးခိုင်းရဒါလဲကွယ်ဟု သဘောမတူသော လက္ခဏာနှင့်မေးသည်။ သ္မီးကို ကျောင်းက ၀ိုင်း,၀ိုင်း ပြောင်လို့ပါ။ ကုလားမလို့လဲ ပြောကြတယ်၊ ဒါကြောင့် ဗမာ့လုံချည်အင်္ကျီလဲ ၀ယ်ပေးပါ။ ဆံရစ်လဲ ကိုက်ပေးပါ ဟု အတိအလင်းဖွင့်၍ ပူဆာတော့သည်။ အမေနှင့် အဖွားတို့က လည်းသဘောတူ ခေါင်းရိပ်ပြီး ဆံရစ်ဝိုင်း ထားပေးလိုက်ပါတော့ဟု ထောက်ခံကြသည်။
(ခရော့ခ်)ဘ၀မှ ဆံရစ်ဝိုင်းဘ၀ရောက်အောင် အောက်ခြေကဆံပင်မျာကို သင်ဒုန်းဒါးနှင့်တင်၍ ရိတ်ချရန် အလုပ် စလေပြီ-ပဋ္ဌမ ဦးဆုံးနဖူးစက ဆံပင်များကို သင်ဒုန်းဒါးနှင့် ရိတ်ချလိုက်သောအခါ ဂျိကနဲရှိကနဲ မြည်သော အသံ နှင့် ဒါးကတုန်း၍လားမသိ စူးစူးဝါးဝါး နားကျင်လှသဖြင့် တခါထည်း ရုံးထပြေးမိပါသည်။ သင်ဒုန်းဒါး ကိုင်သူကို သူရဲသဘက် ကဲ့သို့ ကြောက်လန့် သွားမိသည်။ လာခဲ့-လာခဲ့ တပိုင်းတပြစ်ကြီး နဲ့ ဆိုပြီး လိုက်ခေါ်လေပြေးလေ နောက်ဆုံးအဖေ့ရင်ခွင်ထဲမှာသွား ပုံးနေမိသည်။ သည်တော့ ဖေဖေက ပြုံးသည်။ ဖေဖေအပြောသားနဲ့ သ္မီးကဆံရစ်ထားချင်ဒါကိုး ဟုဆိုရင် သူ့တွင် ကတုန်းဆံထောက်ညှပ်ရန် အမြဲ ၀ယ်ထားသော "စက်ကတ်ကျေး"နှင့် မနာ မကျင်ရအောင် ပြုပြင်ပေးစေသည်။ ဆံရစ်ဝိုင်း ကလေး များကိုလည်း ကတ်ကျေး နှင့် ညီညီဖြတ်ပေးစေသည်။ သို့ပေမင့် နဖူးတဲ့တဲ့ထိပ်မှ သင်ဒုန်းဒါးနှင့် ရိတ်ချ ထားသော ဒါးရာနှစ်ချက် က မညီမညာဖြူဖြူကြီး ပေါ်နေသောကြောင့် နောက်တနေ့ကျောင်းသွားရာ၌ ငါ့တော့ သူများနဲ့ တူလာပြီဟု စိတ်ထဲက ကြော့ကြော့မော့မော့ ဖြစ်ခဲ့သလောက် မှန်းချေ မပေါက်ဘဲ ရှိပြန် ပါသည်။ အကြောင်း ကတော့ ထိပ်ကသင်ဒုန်းဒါးရာကြီးကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး ဘူးသီးကြွက်ကိုက် ထားသလို ဘဲတော့ ဟုဝိုင်း၍ အလှောင် ခံရပါတော့သည်။
သို့ကြောင့် သင်ဒုန်းဒါးချက် မိထားသော ဆံပင်များ ရှည်မလာမချင်းကျောင်းသို့ မသွားတော့ဘဲ အရှက်ပြေ ဖေဖေနှင့်တောတက်ရာ လိုက်မည်ဟုဆိုကာ တောတက်ရာသို့ ပါလာခဲ့ပြန်သည်။ ဦးမြတ်ကျော် သည် တပည့် မြင်းစီးပုလ်ိပ် အမှုထမ်း ယောင်္ကျားတွေချည်း အဖေါ်ပြု၍ တောတက် သောအခါ မြင်းနှင့် သွားလေ့ ရှိပါသည်။ အကောင်းသုံးတတ်သူဖြစ်သည့် ၀သီအတိုင်း တောက်တက် ဘို့ မြင်းကြီးနှစ်ကောင် ၀ယ်ထားရာ၌ မြင်းကုန်းနှီးကို ရေနံချောင်းမှ အမေရိကန် အင်ဂျင်နီယာတို့ နှင့် အတူပေါင်း၍ မှာယူ လိုက်သော ကောင်းဘွိုင်ခေါ် အမေရိကန်နွားကျောင်းသားများသုံးသော ထိပ်မှ အကောက်ကြီးနှင့် မြင်း ကုန်းနှီး အကြီးစားမျိုးကို သုံးပါသည်။ အင်္ဂလိပ်လုပ် အစိုးရသုံး မြင်းကုန်းနှီးများကို သူမကြိုက်ပါ။
ဗမာဖြစ် ရှေးမြင်းကုန်းနှီးများကိုမူကား သာ၍ပင်မနှစ်မြို့သူ ဖြစ်ပါ သည်။
တောတက်သော မြင်းကြီးနှစ်ကောင်တွင် အဖြူနှင့်အနီမှ အနီတကောင်က အလွန်လိမ္မာ၍ သဘော ကောင်း သည်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းနယ်မှာလည်း မြင်ပုကလေး တမျိုးထွက်၍ ကျမအ တွက်ကလေးစီး မြင်းပု တကောင်ကိုလည်း ထားပေးသေးသည်၊ ကျမသည် မြင်းပုကလေးနှင့် မြင်းစီးခြင်း နိုင်နင်း လာသော အခါ များသောအားဖြင့် မြင်းအနီကြီးကို စီးစေသည်။ မြင်းစီး၍ တော လိုက်သောအခါ ဘောင်းဘီ နှင့် ရှပ်တို ကို ၀တ်၍ လက်ကိုင်ပုဝါ လည်ပင်ချီထားပြီး အပေါ်က ဦးစွန်းဖုတ် ကို ကက်ဦးထုပ် ဆောင်းထား သောကြောင့် ဘူးသီးကြွက်ကိုက် ဆိုသောဒဏ်ရာမပေါ်လာတော့ ပါ၊ ဟိုစဉ်အခါက သည်ဂိုက်မျိုးကို ဘာခေါ်မည် မပြောတတ်ပေမင့် ယခု ပြန်တွေးကြည့်လိုက်လျှိင် စကောက်လုင် ကလေးများ ခပ်ဆန်ဆန် ဖြစ်မည် ထင်ပါသည်။
တောလိုက်ပါ များသောအခါ ငယ်ရွယ်သူကျမ၏ စိတ်ဓါတ်များသည် ကြမ်းတမ်းလာသည်၊ တောတက် ရောက်တိုင်း သေနတ်ပစ် ထွက်ကြသူများနှင့် အတူပါသည်ု၊ မြင်းစီးပုလိပ်များနှင့် ရွားသားများပေါင်း၍ ဂျိုးတယ်ခြင်း, ခါထောင်ခြင်း, ပဒပ်ရိုက်ခြင်း စသည်များကို သူတို့နှင့်အတူ လိုက်၍ ကြည့်တတ်သည်၊ ပဒပ် ဆိုသည်မှာ ပုတ်သင်ညိုနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်အကောင် တမျိုးဖြစ်၍ ကျောက်ပန်းတောင်းနှင့် ပုပ္ပါးနယ် တ၀ိုက် တွင်သာ ရှိတတ်ပါသည်။ ကျမ အဖေက လမ်းခရီးတွင် မြင်းပေါ်မှနေ၍ နှစ်လုံးပူး သေနတ်နှင့် ဂျိုးအုပ်များ ပစ်လိုက်သော အခါ မြင်းပေါ်မှခုန်ဆင်းပြီး ပြေး ကောက်တတ်လာသည်၊ မျက်ပေါက်ကျဉ်းနှင့် ပွေးဆိုသော အကောင် တမျိုးကို ရှာဖွေတူးဖေါ် သူများနှင့်လည်း ရောလိုက်တတ်သည်၊ တောသို့လိုက်တိုင်း တောလိုက် မုဆိုး စိတ်များ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နှင့် သက်ဝင်လာပြီး ကြမ်းတမ်းလာသည်။
သို့သော် ကျောင်းပြန်တတ်ရသောအခါမူ မိန်းခလေးဘာဝ အဖေါ်အပေါင်း များနှင့် တွေ့၍ မိန်းမစိတ်, မိန်းမ သဘာဝကို ပြန်ရတတ်ပြန်သည်။ ကျောင်းအားရက်၌ အဖွါးအနားကပ်ရပြန် သောအခါ ဘုရာစကား၊ တရားစကား၊ နိပါတ်ပုံပြင် စကားများကြောင့် နူးညံ့ယဉ်ပါး လာရပြန်သည်။
တလလျှင် အနည်းဆုံးတပတ်လောက်တော့ ပုပ္ပါးတောင်တ၀ိုက်သို့ ဖခင်နှင့်အတူ မြင်းစီး ၍ တောတက် လိုက်သည်၊ ကျန်ရက်များမှာကျောင်းသွားသည်၊ ကျောင်းပိတ်ရက်တွင် အဖွားများ အနားကပ်၍ ဓမ္မသ၀န ဓမ္မဒေသနာကို ယဉ်ပါးခဲ့ရသည်၊ သို့ကြောင့် တလထဲမှာ တောလိုက်မြင်းစီး မုဆိုးစိတ်ဝင်လိုက်၊ ကျောင်း ကျတော့ ဦးစွန်းဖုတ်၌ စည်းကြိုးစီးခြင်း, ပန်းပန်ခြင်းစသော မိန်းကလေးသဘာဝ ပြန်ရလိုက်၊ ဥပုသ်နေ့ များ၌ ပရိတ်တရားနှင့် ဘုရားတပည့်တော် ဖြစ်လိုက် နှင့်ပင် မြန်မာစာတတိယတန်းကို စကောလားရှစ် နှင့် များ အောင်လိုက်သေးသည်၊ ထိုအချိန်မှာပင် ကျောက်ပန်းတောင်း၌ ၄-တန်း အထိ သင်သော အင်္ဂလိပ်ကျောင်းကလေး တကျောင်းက အတောက်တခေါက် လာဖွင့်ပြန်ရာ ကျမနှင့်တကွ ကျောင်းသား တ၀က်လောက်မှာ မြန်မာကျောင်း ရောအင်္ဂလိပ်ကျောင်းပါ နှစ်ဘက်ခွဲ၍ သင်ကြရသော အခွင့် အရေး လည်း ကြုံပြန်ရသေးသည်။
ယင်းသို့ တောတက်လိုက်သော ရက်ကတပိုင်း၊ ကျောင်းတက်ရသော ရက်က တ၀က်နှင့် ပင် နှစ်နှစ်ခွဲ လောက် နှင့် ကျောင်းသုံးဒေါင်းတံဆိပ် ဖတ်စာများမှတပါး အပြန်အပမှာ စာများကိုတွေ့ လျှင်လည်း မရမက စာလုံးပေါင်း ၍ ဖတ်သည်။
အင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်းများမှ အရုပ်များကို ဖခင်စားပွဲ မှ ယူ၍ကြည့်ခါ စားလုံးပေါင်းအတတ်လျှင် မေးပြီး ဖတ်ပြစေသည်၊ ဒါကိုဖခင်ဖြစ်သူက သဘောကျ၏။ မြန်မာ မဂ္ဂဇင်း၏ အမည်မှာ မြန်မာ့မဂ္ဂဇိန် ဟု မှတ်မိ ပါသည် အဖုံးမှာ စက္ကူချောဖြစ်၍ နောက်ဘက်မှာ ၀ှိုက်တဝေး ကုမ္ပဏီ ကုန်တိုက်က ကြော်ငြာစာ တခုတွင် နဘေထပ် နှင့််ရေးထားသည်၊ ၎င်းနဘေကာရံကို ရအောင်ဖတ်၍ အလွတ် ရွတ်ဆိုပြရသည်၊ 'ကြံပုံမချို့-ရန်ကုန်မြို့-ဥာဏ်စုံလို့ဆိုက်-စရိုက်မနှေး-အကြိုက်ပေးတဲ့- ၀ိုက်တဝေးတိုက်ကြီး မှာ ဇာနှင့်ပိုးဖဲ-တမျိုးတွဲပြီး- သိုးမွှေးလဲဝါ-ကတ္တီပါနှင့်' စသော စကားပြေ မဟုတ်သည့် နဘေကာရံ များကို မှတ်သား ခဲ့ရ ဘူးသည်၊ ထိုခေတ်က ကြော်ငြာပုံများမှာ စကားပြေ နှင့် မရေး ဘဲ နဘေကာရံ နှင့် လင်္ကာ အဖြစ် ရေး၍ ကြော်ငြာသည်၊ အချို့ကတေးထပ်ဒွေးချိုး လေးချိုးစသည်တို့ နှင့်ရေးစပ်ကြော်ငြာသည်၊ လူကြီးပိုင်းက အဓိပ္ပာယ် နားလည်သော်လည်း ခလေးများ ကတော့ ဘာမှ မသိ၊ ဆိုကောင်းရွတ်ကောင်း၍ ဆိုနေကြခြင်း ဖြင့် ကြော်ငြာ ပေးသလို ဖြစ်သွားသည်။
အင်္ဂလိပ်ဓါတ်ပြားနှင့် စက်သီချင်းကို အစောဆုံး ခေတ်အပိုင်းဆီလောက်က ၀ယ်ယူပြီးဖြစ်ရာ မြန်မာ ဓါတ်ပြားများ ဇာတ်ထုပ်များ စတင်ပေါ်ပေါက် လာသောအခါလည်း စောစောစီးစီးရောက် နေပြီဖြစ်၍ ထိုစဉ်က နာမည်ကျော်ရုပ်သေး မင်းသမီးဦးဖူးညို၏ ကိုကြီးနတ်နှင့် လင်ပျောက်ရှာတော် ပုံငိုချင်းများ၊ တောင်ယံတော် သီချင်းနှင့် မဒွေးလေး၏ ဂန္ဓမာတောင်သီချင်းကြီးများကို ဓါတ်ပြာထဲ က လေယူလေသိမ်း အတိုင်း ပုံတူကူးချသလို အလွတ်ရနေသောအခါ ဖခင်ဖြစ်သူက ပတ္တလားနှင့် လိုက်တီးပေးသည်၊ ဤတွင် စည်းဝင် စည်းထွက် မှန်နေသဖြင့် ဖေဖေ၏အဆိုတော်ဖြစ်မှန်း မသိဖြစ်ခါ ရုံးအားသော အချိန်တိုင်း သီချင်း အဆိုခိုင်း လေ့ရှိသည်၊ ကျမက သီချင်းဆိုပေးဘို့ စိတ်မ၀င်စားသောအခါ နိုင်ငံခြား ကုန်တိုက်များမှ ပို့ထားသော ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာကတ်တလောက် ဖွင့်ပြပြီး ဒီထဲမှကြိုက်ရာ အရုပ်များမှာ ပေးမည်ဟု ချော့၍ သီချင်း အဆိုခိုင်းလေ့ရှိပါသည်။
သို့ကြောင့်အဆိုတော် လုပ်ခကစားစရာများမှာ လူနှင့်ရွေးမရသော ၃-နှစ်သ္မီးခန့်ရှိ ဒေါ်လီ ရုပ်ကြီးမှအစ တထွာတညိုအထိ အရုပ်များကို ၎င်း၊တကဲ့သံလမ်းနှင့် သွားသော မီးရထားများ၊ ကလေးကစားသော ရုပ်ရှင် ပြစက် ဖလင်ကားများနှင့် သုံးဘီးစက်ဘီး စသည်တို့မှာ ကြာသော်ခန်း လုံးပြည့်အနှံ့အပြား ဖြစ်နေပါသည်၊ ထိုကစားစရာ မျိုးများသည် ယခုခေတ်၌ နေရာမရွေးဝယ်၍ ရနိုင်သော်လည်း ထိုအချိန်ဆီကတော့ ရန်ကုန်ရှိ အင်္ဂလိပ်ပိုင် ကုန်ဆိုင်ခွဲများနှင့် အိန္ဒိယပြည်ကာလ ကတ္တားမြို့ရှိ ပင်မဆိုင်ကြီးများသို့ တကူး တကန့်မှာ ယူမှရပါသည်၊ ရောက်သောအခါမှာလည်း ကျေက်ပန်းတောင်း စားတိုက်မှပါဆယ်အဖြစ် မသယ်နိုင် ၍ ညောင်ဦးမြို့သင်္ဘောဆိပ် အထိ သွားရောက် ရွေးယူ ပစ္စည်းချပြီး နွားလှည်းနှင့် နှစ်ညအိပ် သယ်ယူ လာခဲ့ရသဖြင့် ကရိကထ အလွန်များပါ သည်၊ ထိုအထည်းမှပင် အနည်းဆုံးတလတကြိမ် လောက်တော့ အိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့် ကစားစရာများ ကိုအနည်းနှင့်အများ သယ်ယူနေရမြဲဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ဝိုင်းအတွင်း ခေါင်းရင်းဘက်တွင် နှစ်ခန်းပတ်လည် ဘုရားစင်နှင့် ၀တ်ကျောင်းဇရပ် တခုရှိသည်၊ ထို ၀တ်ကျောင်း ဇရပ်မှာဖခင်ဦးမြတ်ကျော်၏ အစ်ကိုအလတ်ကွယ်လွန်သူ မောင်မောင်ပုအတွက် အထိမ်းအမှတ် တခု အဖြစ် လှူဒါန်းဆောက်လုပ်ထားသည်၊ ဆွေမျိုးတစုမှ သက်ကြီးရွယ်အိုတို့သည် ညစဉ် ညတိုင်း ပန်းဆီမီးကို ကိုင်ဆောင်ကာ ဘုရားဝတ်ကျောင်းသို့ စုရုံး ရောက်လာကြပြီး ဘုရာရှိခိုး ၀တ်တက် ကြသည်၊ ပရိတ်ရွတ်ကြသည်၊ ပရိတ်ရွတ်ပြီးသောအခါ သဂြိုဟ် ပရမတ်စသော တရားစကားများကို ဘိုးဘိုးကြွယ် က (ဦးဘိုးဆွေ၏ညီ) ဟောပြောလေ့ ရှိသည်၊ ၀တ်တက်ဝတ်ကပ် လာသူများကို အလှည့်ကျ ကုသိုလ် ပြုသူများက တကိုယ်လျှင် ငှက် ပျောရွက် ဖက်ခွက်နှင့် ထည့်ထားသော လဘက်တခွက်ကျစီ ကမ်းသည်၊ ပျောင်းဖူးဖက် ဆေးပေါလိပ်နှင့် မီးချစ် တခုစီပါသော နေ့လည်းပါသည် ၊ ဖွာဖွားမမသက်မှာ တောင်ဝှေး လည်းပါ သည်၊ ဖွားဖွားမမသက်မှာ တောင်ဝှေးအားထားရသူ ဖြစ်၍ ၀တ်ဇရပ်သို့ မဆင်းနိုင် သော်လည်း ဖွားဖွားယု နှင့် အတူ ကျမကလည်း အမြဲ လိုက်သွားတတ်သည်။
ဤသည်ကြောင့် ငါးပါးသီလ၊ ရှစ်ပါး သီလများ အလွတ်ရနေသည်၊ ပရိတ်ရွတ် ပရိတ်မွှန်းများကိုလည်း တကူးတက မသင်ရဘဲ ရွတ်နိုင်လာ သည်၊ သို့သော်ဘိုးဘိုးကြွယ် ပြောနေသောသဂြိုဟ်နှင့် ပရမတ် စကား တွေကိုတော့ နားလည်းမလည်၊ သဘောမပေါက်ဘဲရှိပါသည်။ သည်လိုနှင့်ပင် ကျမအသက် ၉-နှစ်ရွယ်တိုင် ရောက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းတက်ရက် ပြတ်တောင်း, ပြတ်တောင်း နှင့် ပင် တတိယတန်း ကို စကောလားရှစ် အောင်ပါသည်၊ ဤအချိန်တွင် မန္တလေးမြို့ရှိ ဘိုးဘွား တို့ထံမှ သမီးကို နားထွင်း မင်္ဂလာပြုလုပ်ရန် အချိန် တန်ပြီဟု သတိပေးနှိုးဆော်စာများ ရောက်လာလေ့ရှိသည်၊ နားထွင်းမင်္ဂလာ ပြုလုပ်လျှင်လည်း တောမြို့ကလေးတွင် မပြုလုပ်စေလို၊ သူတို့မျက်မှောက်၌ မင်းမျိုးစိုးနွယ်တို့ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အခမ်း အနား တွေနှင့် ပြုလုပ်စေလို၍ အခွင့်ရက်ရှည် ယူလာခဲ့ရန် အကြံပေးလေသည်။
ထိုအချန်ကာလအတွင်းမှာပင် ဖေဖေဦးမြတ်ကျော်တွင် အဆင်မပြေချင်သော မျက်နှာဖြူရာဇာဝတ် ၀န်ကြီး အသစ်နှင့် လာ၍ဆုံစည်းရပြန်သည်၊ ဘိလပ်သား မျက်နှာဖြူများသည် သူတို့နိုင်ငံတွင် အလုပ်မရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါး သူများကို၎င်း၊ စစ်တပ်မှပိုလျှံနေသော လူများကို၎င်း၊ သူတို့နှင့် လက်သင့် ရာကို ၀ံသာနု ရက္ခံတတရား လက်ကိုင်ပြုကာ သူတို့ရာထူး အမျိုးမျိုးခန့်အပ်၍ ပို့လေ့ရှိခဲ့သည့် အားလျော်စွာ သာမန် စစ်မှုထမ်း တယောက်အား မြန်မာပြည်သို့ ပို့လိုက်ပြီး၊ ဒီကမျက်နှာဖြူ အရာရှိကြီးမျာက အတော်အသင့် သင်ကြားပြီး တောပိုင်း မြို့ငယ်များသို့ အလုပ်သင် မိုးကျရွှေကိုယ် ရာဇ၀တ်ဝန်ကြီး ဘ၀နှင့် လွှတ်လိုက် သူဖြစ်ပါသည်။
သို့ကြောင့် ၎င်းမှာ မြန်မာပြည်၏ ဗဟုသုတလည်းမရှိ၊ အလုပ်ဝတ္တရားကိုလည်း လုံးဝအုပ်စုံ နားမလည်ရုံ မက သူ့အ၀တ်အစား များကလည်း ခပ်စုပ်စုပ်ဖြစ်သည်၊ သူသည်မြင်းခြံ ဒိစတြိတ်ကို ကိုင် ရသူ ဖြစ်၍ မြင်းခြံ တွင် နေရသည်၊ နယ်များကိုနှစ်လ သုံးလတကြိမ် ဆင်း၍စစ်ဆေး ကြည့်ရှု သည်၊ နယ်အရာရှိတို့က တင်ပြသော ဒိုင်ယာယီ များကိုလည်း ကြည့်၍ နယ်အခြေ အနေကို လေ့လာရသည်။
ရာဇ၀တ်ဝန်ကြီး လာမည်ဆိုသောအခါ နယ်စီး အင်စပိတ္တော်ကြီးက တာဝန်အရပ်ရပ် ဂါတ်တဲအသီး သီးတို့ကို အကြောင်းကြားကာ အပြစ်တင်စရာ အချက်အလက် မရှိရလေအောင် ပြင်ဆင် စေခိုင်းထား ရသည်။ ဂါတ်တဲရောက်သော အခါယူနီဖေါင်းအပြည့် ဆင်ယင်ထားသော ပုလ်ိပ်အရာ ရှိကြီးငယ်များက စစ်ရေးပြသည့် အလား ပုလိပ်ရေးပြရသည်။ မြန်မာပုလိပ်တို့၏ ရှေးခေတ်ခေါ်မှာ (ဒလိန်းပြ)သည်ဟု ပြောဆို သုံးစွဲ သည်ကို ကြားခဲ့ဘူးပါသည်။
"ဒလိန်းပြ"သောအခါ ယူနီဖေါင်း ၀တ်ထားသော နယ်စီးအင်စပိတ္တော်ကြီး၏ ဒါးလွယ်သည် ပြိုးပြိုး ပျက်ပျက် အရောင်ထွက်နေသာ ငွေရည်သုတ် အဘိုးတန် ဒါးလွယ်ကြီးဖြစ်နေသည်၊ ဒါးအိမ်မှ ဒါးကို ထုတ်ယူပြီး "ဆလု" လုပ်လိုက်သောအခါလည်း လျှပ်စီးလက်သလို ဖြစ်သွားသည်၊ ကျမ အမြင် မှတ်မိသမျှ ပြောရလျှင် အမေရိကန်ရုပ်ရှင် ဇာတ်လိုက် ရိုနယ်ကော်လ်မင်းတို့ ခေတ်က ဇန်ဒါ အကျဉ်းသမားရာဇ၀င် ဇာတ်ကား ထဲမှာ မင်းညီမင်းသားများကိုင်သော လက်ကိုင်ဂွင်းနှင့် ဒါးလွယ် ကြီးမျိုး ဆင်ဆင်ဖြစ်နေသည်။
ဒါကိုရာဇ၀တ်ဝန်ကြီးက ဗြိတိသျှအင်ပါယာ အ၀င်အိန္ဒိယလက်အောက်ခံ ပြည်မှတောနယ် ကလေး တွင် ဤလိုဒါးမျိုး ကိုင်ဆောင်သူ တွေ့ရသည်မှာ သူတို့ကိုစော်ကားနေသည်ဟု ယူဆသွားလေသ လားမသိ၊ မကြာခဏ ဒါးကိုမျက်စောင်းထိုး၍ ကြည့်ခြင်းခံနေရသည်၊ စစ်ဆေးရာ၌ ဘာအပြစ်မှ မတွေ့ရသော်လည်း သူ့မျက်နှာကြီးမှာ တင်းမာခက်ထရော်၍သာ နေပါတော့သည်။
ဤနှင့်လည်းမပြီးသေးပါ၊ ပုပ္ပါးတောင်ကိုသွားလို၍ လိုက်ပို့ရဦးမည်၊ သို့ကြောင့်မြင်းနှင့် တက်ကြရ မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သူ့မြင်းကလည်း နုပ်နုပ်- ကုန်းနှီးကလည်း စုပ်စုပ်ဖြစ်နေ၍ ဖေဖေ ဦးမြတ်ကျော် သည် သူ့မဒရပ်မြင်းဖြူကြီးကို အမေရိကန်မြင်းကုန်းနှီးတင်၍ ၀န်ကြီးစီးဘို့ရာ အစားထိုးပေးပြီး သူက မြင်းနီကြီး နှင့် သာမညကုန်းနှီး တင်းစီးကာ လိုက်ပါခဲ့သည်။
ဒါပေမဲ့ မျက်နှာမသာယာပါ၊ သူ့စိတ်ထဲတွင် သူတို့လက်အောက်ခံ နိုင်ငံငယ်ကလေးတခုရိ တောမြို့တွင် မဟာအရှက်တော် လာကွဲရလေခြင်းဆိုသော အယူအဆမာန်မာနနှင့် စိတ်ထဲမှာ အခဲမကြေဖြစ်သွားပြီး နောက်ပိုင်းအချိန်ကာလများ၌ အပြစ်အမျိုးမျိုးရှာ၍သာ နေလေတော့သည်၊ တခါတခါလည်း အလုပ်တွင် နစ်နာစေမည့် မှတ်ချက်မှတ်တမ်းများ ရေးသွားခြင်း၊ အထက်ကိုစာ တင်ခြင်း စသဖြင့် နိုင်ရာနှင့်ကိုင်၍ ညှဉ်းစ ပြုသည်ကို ခံရပါတော့သည်၊ ထို့ကြောင့်မန္တလေးမြို့ သို့သွားရန် ခွင့်စာကို အမြန်ဆုံး တင်ထားလိုက်သည် ထိုမျှမကသေး နယ်စီးအင်စပိတ္တော်ကြီး တဦးကို သူ့သဘောနှင့်သူ မပြုလုပ်နိုင် သေးသော အချိန်မှာပင် စစ်ဆေးစရာရှိသည်ဟု ရာထူးကို ၇-ရက်ခန့်ချထားခြင်းစသော အဓမ္မကိစ္စများ ပါဝင်လာလေသည်၊ သိုသော်ထိုစဉ်က မြင်းခြံနယ်ရှိ ဘိလပ်သား အရေးပိုင်ကြီး မစ္စတာတပ်စမှာ မန္တလေးက သိဟောင်း, ကျွမ်းဟောင်းများ ဖြစ်ခဲ့၍ ထိုကိစ္စကို သူတို့အချင်းချင်းအထက်သို့ အကြောင်းကြား လိုက်လေသလား မသိထိုရာဇ၀တ်ဝန် ကြီးအားရခိုင်တိုင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ ရမှီပင်ခွင့်စာ ကျလာသဖြင့် ကျမတိုကမီသားတစုမှာ ညောင်ဦး မြို့ ဆိပ်ကမ်းမှနေပြီး အဆန်စာပို့ သင်္ဘောကြီးနှင့် မန္တလေးမြို့ သို့ တပျော်တပါး ဆန်တက်လာပါ တော့သည်။
မန္တလေးမြို့သို့ ရောက်ကြပါပြီ၊ တမြို့တရွာတွင် ခွဲခွါနေထိုင်ရာမှ ပြန်တွေ့ရ၍ ၀မ်းသာအားရနှင့် စကား လက်ဆုံ ပြောမကုန်ဖြစ်ကြသော ဘိုးဘွားဆွေမျိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင်က တမျိုး၊ မိတ်ဟောင်း ဆွေဟောင်း, တပည့်သားမြေးတို့က တသွယ်နှင့် ၀ိုင်းဝိုင်းလည် တိုးမပေါက်အောင် ဖြစ်နေသည်။ ကျမကိုလည်း တသိုက် တမြုံကြီးက ၀ိုင်းဝန်းမြှောက်စားပြီး ဘာဘဲ လုပ်လုပ် ချည်းကျူး မကုန် တော့သည် တကား။
အိမ်ဦးခန်းတွင် ၀က်မစွတ်မြို့စားမင်းကြီးသည် (ကျမက ဘိုးဘိုးဘုရား) ဟု ခေါ်သည်၊ ကျမဖခင်နှင့် အတူ အခြားသော ရှေးက မှုးကြီး, မတ်ရာတို့သား, မြေးများသာ ဖြစ်ကြသူယောကျာင်္း ဧည့်ပရိသတ်နှင့် အတူ နားထွင်း အလှူကိစ္စကို ဆွေးနွေးခန့်ခွဲ စီမံစပြုနေကြပါသည်။
နောက်ပိုင်း မိန်းမဆောင်တွင် ဖွားဖွားဝက်မစွတ် ၀န်ကတော်ကြီးက အမှုးပြု၍ မိန်းမဧည့်သည် များကို မေမေပါ ဧည့်ခံလျက် အလှုကိစ္စအတွက် အကြမ်းအားဖြင့် စီမံခန့်ခွဲနေကြသည်၊ မေမေသည် ထိုအချိန်က သားသ္မီး ၄-၅ယောက် မွေးဖွားခဲ့သော်လည်း အဖတ်မတင်ပါ၊ သို့ကြောင့်ယခုပါလာသော ကိုယ်ဝန် ပဋိသန္ဓေ မှာ မန္တလေးတွင် မွေးရသဖြင့် အဖတ်တင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆကြသည်၊ ယူဆကြသည့် အတိုင်း ထိုခလေးမှာ ယောကျာင်္းကလေး ဖြစ်ပြီး အသက်ရှည်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် ကျမတွင်မွေးချင်း အရင်းအချာ ဆိုလျှင် ၎င်းနောက်ဆုံးမွေး မောင်ငယ် တယောက်သာရှိပါသည်၊ အယူသီးသော ဘိုးဘွားမိ ဘများသည် ထိုခလေး ကို အဖတ်တင်စေခြင်းငှါ၊ ပုခက် တင်ခြင်း၊ အမည် ပေးခြင်း စသော အသိုင်းအ၀ိုင်း များကို မလုပ်ဘဲ နှိမ့်ချထားသည်။ သူ့ကိုအမည်သီးခြား ပေးထားခြင်းမရှိ၊ မောင်မောင်ဟုခေါ်ကြသည်၊ ၎င်းကို မောင်မောင် ဟု ခေါ်ကြသည်၊ ၎င်းမှာသူ့နာမည်မဟုတ်ပါ၊ မှုးမျိုးမတ်နွယ်တို့ ထုံးစံမှာ ယောကျာင်္းကလေး ဆိုလျှင် မောင်မောင် နှင့် မိန်းကလေး များဆိုလျှင် ခင်ခင်ချည်းဘဲဖြစ်၍ ထိုအခေါ်မှာ နန်းတွင်းအစဉ် အလာ ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်း ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ ဘုရင့်သားတော်များက ကိုယ်တော်ထိပ်ခေါင်တင် စုဘုရား သားတော်များကလည်း ထိတင်, တင်တင် စသော အသုံးများနှင့် ရှေ့မှတင်၍ သုံးစွဲခေါ် သဖြင့် ရှေးအခါ ကတော့ အမည်ကိုကြားရုံနှင့်ပင် ဘုရင့်သားတော်- သ္မီးတော်များ၊ အိမ်ရှေ့မင်းသားတော်- သ္မီးတော်များ၊ အိမ်ရှေ့မင်းသားတော်- သ္မီးတော်များနှင့် မှုးတော်-မတ်တော်ကြီးများ၏ သားမြေးများကို ခွဲခြား သိပြီးသား ဖြစ်သွားပါသည်။
ကျမအတွက် ပုခက်တင်မင်္ဂလာပြုစဉ် ဘိုးဘိုးဘုရားက ပေးထားတဲ့အမည်မှာ "ခင်လေးခင်" ဟူ၍ဖြစ် ပါသည်၊ ရခိုင်ပြည ဘုရင်ခံအဖြစ် ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်၌ ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော ကျောက်ဆောက် မြို့စား မင်းကြီးကတော်၏ အမည်မှာလည်း ခင်လေးခင်ဟု ခေါ်ပါသည်၊ ထိုရခိုင်ပြည်ဘုရင်ခံ ကျောက် ဆောက်မင်းကြီးနှင့် မင်းကြီးကတော်မှာ ၀က်မစွတ်မြို့စားမင်းကြီး၏ အဘိုးနှင့်အဖွားများ တော်ပါသည်။
၀က်မစွတ်မြို့စား မင်းကြီးက ငါ့မြေးအားငါ့အဖွား၏အမည်ကို ပေးမည် ဟု အလွန်ချစ်သော စေတနာနှင့် ပေးထားသော အမည် ဖြစ်ပါသည်၊ သို့သော်-ကျမသည် လူမှန်းသိချိန် ၌ ထိုအမည် ကို မနှစ်သက်မိပါ ၊ သို့သော် လူကြီးများရှိစဉ်အချိန်က ထင်ထင်ရှားရှား မပြောင်းလဲ ၀ံ့သော်လည်း ၁၂-နှစ် ၁၃-နှစ် အရွယ် စာ,နယ်,ဇင်း လောကသို့ဝင်ရောက် ရေးသားစကခင်ခင်လေးဟု အမည်ကို တိတ်တဆိတ် ကြိတ်၍ ပြောင်းထား ခဲ့ပါသည်။
အိမ်ဦးပိုင်းမှ နားထွင်းမင်္ဂလာ အခမ်းအနား အတွက် မီးကုန်, ယမ်းကုန် စီမံကိန်း ဆွဲကုန်ကြပါပြီ၊ တမြို့ တနယ်၌ အစိုးရအရာရှိ လခစားတဦး အနေနှင့် အနေအထိုင်,အသုံးအစွဲကြောင့်တခါ, တခါ ဓါတ် ယာယီ မသိ မျိုးရိုးဇာတိ နှင့် အင်အား အခြေခံကို မသိသော အထက်အရာရှိမျိုး နှင့် တိုးမိပါက အငြိုအငြင်ခံရ ကသိကအောက်ဖြစ်ရ သော်လည်း မန္တလေးမြို့ပေါ် မှာတော့ မျိုးရိုးအခြေခံ နှင့် အင်အား ရှိသလို သုံးစွဲ ချဲ့ထွင်နိုင်ပါသည်၊ ကိုယ့်ပစ္စည်းနှင့် ကိုယ်လွတ်လပ်စွာ လှူဒါန်းချဲ့ထွင်နိုင်ပါသည်။
သံဃာတော်များကို လှူးရိုးစဉ်ဖြစ်သော လှူဖွယ်ဝတ္ထုများအပြင် ဖခင်ဦးမြတ်ကျော်သည် ၀ိုက်တဝေး နှင့် ဘောင်ရာဆောင်ဒင် ကုမ္ပဏီတို့မှတယောက်အိပ် ကြေးကုတင်၊ ဇာခြင်ထောင်နှင့် ယူနီဖောင်းသေတ္တာ များကို စောစောစီးစီးက ၀ယ်ယူထားသဖြင့် အိမ်ကြီးအောက်ထပ်၌ ကြမ်းစင်တခုထိုးကာ ကုန်လှောင် သော ဂိုဒေါင် တခုကဲ့သို့ ပစ္စည်းတွေ စုပုံတင်ထားရပါသည်၊ အိမ်မကြီးပေါ်တွင် နားထွင်းဆောင် ဟူ၍ အဆောင်သစ် တခု ထပ်ဆောင်စေသည်၊ ကျယ်သော ၀င်းခြံကြီးတခု အပြည့်၁၄- ခန်းမဏ္ဍပ်ကြီးထိုး၍ တဘက်မှာ သံဃာစင်တဘက်မှာ သင်းကြန်ဆောင်ဟု အဆောင်ငယ်တခုနှင့် အိမ်ကြီးနှင့် မျက်နှာချင်း ဆိုင်မှာ ဇာတ်စင်ကြီးတခုကိုပါ အခိုင်အမာ ဆောက်လုပ်စေသည်။
နားထွင်းရန် ထိုင်ရမည့်ညောင်စောင်းကိုလည်း အဟောင်းမကြိုက်ဟု အသစ် အလုပ်ခိုင်းသည်၊ နားထွင်း သူဝတ်ဆင်ရမည့် သိုရင်းအင်္ကျီစည်းပုံ စသည်များကို ရွှေချည်ထိုးရပ်၌ အသစ်ထိုးချုပ်စေသည်၊ နန်းတွင်း ယဉ်ကျေးဘွယ်ရားများ၊ ပြန်လည်ထုတ်ဖေါ်၍ နဂထာ ရွှေရောင်ကွမ်းအစ် များနှင့် ဖေါ့ရုပ်လုံး ငယ်၊ တို့ဖြင့် အနုအယဉ် လက်ရာမြောက် ချယ်လှယ်ထားသောဆေးဖုံ၊ လေးညှင်း၊ နာနတ်၊ ဖက်ပြောင်း ဆေးပေါ့လိပ် ရောင်စုံ စသည်များကို၎င်း၊ ရွှေငါးကြင်း, ငွေငါးကြင်း, ရွှေပုဇွန်, ငွေပုဇွန် စသော၊ ထမင်းခွန့် ထမင်းခံပွဲ အတွက် အရုပ်များ ကလပ်များ၊ ပူဇော်ပွဲ များကို အငှါး မသုံးဘဲ စိတ်တိုင်းတကျ ကိုယ်ပိုင် မှာလုပ် စေသည်၊ ဧည့်ခံပွဲ အတွက် မင်းမျိုးမင်းနွယ် တို့အတွက်တဆောင်၊ အနောက်တိုင်းသားတို့အတွက် တဆောင်၊ သူဋ္ဌေး သူကြွယ် ကုန်သည် စသူများ အတွက် က တဆောင် အခန်းခန်း ခွဲ၍ စီစဉ် ကြပါသည်။
ပဋ္ဌမကမ္ဘာစစ်နှင့် နားထွင်းမင်္ဂလာ ဆက်ပါမည်...
Posted by SHWE ZIN U at 6:29 AM3comments Links to this post
တိုမိုကျောင်းကို တည်ထောင်သူ ဆိုဆာကူးကိုဘာယာရှီ အကြောင်းကို ကျွန်မ ရေးလိုသည်မှာ ကြာလှပြီ။
ကျွန်မ၏ ယခု ရေးသားချက်များသည် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာများသာ ဖြစ်ပါ သည်။
ကျွန်မအနေဖြင့် ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုသည်မှာ ကျွန်မသည် မစ္စတာကိုဘာယာရှီအား ကျွန်မ လူကြီး ဖြစ်လာ လျှင် ဆရာကြီး၏ ကျောင်း၌ ကျောင်းဆရာမအဖြစ် အမှုထမ်းပါမည်ဟု ကတိပေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် မစ္စတာကိုဘာယာရှီ၏ အကြောင်းကိုသာ ယခုလို စာရေးပြီး လူအများသိအောင် သာ ပြုလုပ်ပေး နိုင်ခဲ့ပါ သည်။
မစ္စတာကိုဘာယာရှီသည် ခရစ်နှစ် ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန် အနိစ္စ ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍သာ သူသည် ယခုအချိန်အထိ အသက်ရှင်နေဦးမည်ဆိုလျှင် သူ၏အကြောင်းကို ကျွန်မအား ပိုမို ပြောပြ နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
တိုမိုကျောင်းသည် ၁၉၄၅ခုနှစ်တွင် တိုကျိုမြို့ ဗုံးကြဲခံခဲ့ရစဉ်က မီးလောင်ပြာကျခဲ့ရသည်။ မစ္စတာ ကိုဘာယာရှီသည် တိုမိုကျောင်းကို သူ၏ ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေရာ ကျောင်းကို ဆောက်ရာ၌ သူသည် အချိန်များများ ယူရပါသည်။ စစ်ပြီးသောအခါ မူလကျောင်းဟောင်း နေရာ၌ပင် မူလတန်း ကျောင်းကို စတင်သည်။ ထိုတစ်ချိန်တည်းမှာပင် သူသည် နောင်အခါ၌ ကူနီတာချီ ဂီတ ကောလိပ် ၏ ကလေးများ ပညာရေးဌာန ဖြစ်လာမည့် ဌာနတွင် လိုအပ်သော အကူအညီ များကို ပေးသည်။ သူသည် ဂီတသံဖြင့် ယိမ်းကနည်းတစ်မျိုးကို သင်ကြားပြီး ကူနီတာချီ မူလတန်း ကျောင်း တည်ထောင်ရေး ၌ အကူအညီ ပေးသည်။ သူသည် အသက်၆၉နှစ် အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် သူ၏ စံပြကျောင်းတစ်ကျောင်းကို နောက်ထပ် မတည်ထောင်နိုင်တော့ဘဲ ကွယ်လွန် သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
တိုမိုဂါကူးအန် သည် တိုကျိုမြို့၏ အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ တိုယိုကို မီးရထားလိုင်းပြေး ဆွဲရာ ဂျီယူဂါအိုကာ ဘူတာရုံမှ သုံးမိနစ်ခန့်ဝေး သော လမ်းလျှောက်သွားလျှင် ရောက်နိုင်သော အကွာ အဝေးတွင် တည်ရှိသည်။ ထိုကျောင်းနေရာသည် ယခုအခါတွင် 'ဥဒေါင်းငှက်ပဒေသာဆိုင်ကြီး' နှင့် မော်တော်ကား များ ခေတ္တအပ်နှံရာ နေရာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနေလေပြီ.
ကျွန်မသည် နေ့တစ်နေ့တွင် ထိုကျောင်းနေရာဟောင်းသို့ ရောက်သွားပါသည်။ ကျွန်မတို့ ကျောင်း နေစဉ် က အနေအထားများ၊ အမှတ်အသားများ၊ ဘာမျှကျန်ရှိတော့မှမဟုတ် ဆိုသည်ကို ကျွန်မ သိပါ ၏။ သို့သော်လည်း ကျွန်မသည် မော်တော်ကားများ ခေတ္တအပ်နှံရာ နေရာ၊ သတ်မှတ်ထားသောနေရာ တွင် ကားကို ဖြည်းညင်းစွာ မောင်းသွားမိသည်။ ၎င်းနေရာသည် စာသင်ခန်း ရထားတွဲဟောင်းများ ရှိခဲ့ရာ နေရာနှင့် ကစားကွင်း တည်ရှိခဲ့ရာ နေရာပင် ဖြစ်သည်။ မော်တော်ကားများကို ခေတ္တအပ်နှံရာနေရာ ပေါ်မှ တာဝန်ခံ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဟန်တူသူက "မလာနဲ့၊ မလာနဲ့၊ ကားတွေ ပြည့်နေပြီ၊ နောက်ထပ် လက်ခံဖို့ နေရာမရှိဘူး"ဟု ကျွန်မကို အော်ပြောပါသည်။
"ကျွန်မ ကားအပ်ဖို့လာတာ မဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်မရဲ့ နေရာဟောင်းကို လာကြည့်တာပါ"ဟု ကျွန်မ ပြန်ပြောလိုက်ချင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်မဆိုလိုချက်ကို ထိုသူသိမှာ မဟုတ်ဟု စဉ်းစားမိသော ကြောင့် ကျွန်မသည် ကားကို ပြန်မောင်းထွက်လာပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်မသည် အတိတ်က အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်စဉ်းစားမိသဖြင့် ကားမောင်းသွားရင်း မျက်ရည်များ ကျလာပါသည်။
ဤကမ္ဘာလောကကြီးတွင် ပညာရေးဘက်၌ ကျွမ်းကျင်သူ လူအများရှိသည်ကို ကျွန်မ သိပါသည်။ သူတို့သည် ကလေးသူငယ်များကို ချစ်တတ်၊ ခင်တတ်သူများ ဖြစ်ကြပြီး သူတို့တွင် အဆင့်အတန်း မြင့်မားသော အတွေးအခေါ်များ ရှိကြပါသည်။ သူတို့သည် စံပြကျောင်းများကို တည်ထောင်လိုကြသူ များ ဖြစ်မည်မှာ သေချာပါသည်။
သို့သော်လည်း စိတ်ကူးထဲတွင် ရှိသော စံပြကျောင်းကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ရေးသည် ခက်ခဲ သည်ဟု ကျွန်မသိရှိ နားလည်ထားပါသည်။ မစ္စတာကိုဘာယာရှီသည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် လေ့လာမှု့ များနှင့် ပြင်ဆင်မှု့ များကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှ ၁၉၃၇ခုနှစ် တွင် တိုမိုကျောင်းကို စတင်ထည်ထောင် နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ခုနှစ် တွင် တိုမိုကျောင်းသည် မီးလောင်ပြာကျခဲ့ရသည်။ ကျောင်း ၏ သက်တမ်းမှာ အလွန်ပင် တိုတောင်းလှပေရာ ကျွန်မအနေဖြင့် များစွာ စိတ်မကောင်းခြင်း ဖြစ်မိပါသည်။
လူ့လောကထဲသို့ စတင်ရောက်ရှိလာသော ကလေးများ၏ ပင်ကို စရိုက်သည် ဖြူစင်ပါသည်ဟု မစ္စတာ ကိုဘာယာရှီ ယုံကြည်ထားသည်။ သို့သော်လည်း ထိုကလေးများ၏ ပင်ကိုစရိုက်ကောင်း သည် သူတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများနှင့် အချို့လူကြီးများ၏ လွဲမှားသော လွှမ်းမိုးမှုများကြောင့် ပျက်စီး ယိုယွင်းခြင်းသို့ ရောက်ရှိသွားကြရသည်ဟု မစ္စတာကိုဘာယာရှီ ယူဆထားလေသည်။ သူ၏ ရည်ရွယ် ချက်မှာ ထိုကလေးများသည် တဖြည်းဖြည်း ကြီးပြင်းလာရင်း လူကောင်းများ၊ လူတော်များ ဖြစ်လာ လိမ့်မည် ဟု ယုံကြည် ထားလေသည်။
မစ္စတာကိုဘာယာရှီသည် သဘာဝလောကကြီးကို ချစ်မြတ်နိုး၏။ တန်ဖိုးထား၏။ ကလေးများ၏ ပင်ကို စရိုက်များကို သူတို့၏ ပုံမှန်အခြေအနေအတိုင်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် စေချင်၏။
သူ၏ သမီးငယ် မိရိုး-ချန်က သူမ၏ ဖခင်သည် သူမငယ်စဉ်က သူမကို လမ်းလျှောက်ခေါ်သွားလေ့ရှိ ကြောင်း၊ သဘာဝရဲ့ တေးဆိုသံတွေကို ငါတို့သွားနားထောင်ကြစို့" ဟု ပြောပြီး လမ်းလျှောက်ခေါ်သွား လေ့ရှိကြောင်းဖြင့် ကျွန်မကို ပြောပြဖူးပါသည်။ သူသည် သမီးဖြစ်သူကို သစ်ပင်ကြီးများ ရှိရာသို့ခေါ် သွားပြီးလျှင် သစ်ရွက်များနှင့် သစ်ကိုင်းများသည် လေပြည်လေညင်းများနှင့်အတူ လှုပ်ရှားနေပုံ၊ သစ်ရွက်များ၊ သစ်ကိုင်းများနှင့် ပင်စည်တို့ အပြန်အလှန် အထောက်အကူ ပြုနေပုံ၊ လေတိုက်ခတ်မှု နှုန်း အမြန်အနှေးကို လိုက်၍ သစ်ရွက်များ၏ လှုပ်ရှားမှုများမှာလည်း အပြောင်းအလဲရှိပုံကို ပြောပြ သည်။ လေငြိမ် နေလျှင် သူတို့သည် စိတ်ရှည်စွာဖြင့် လေတိုက်မည့်အချိန်ကို စောင့်နေတတ်ကြောင်း၊ သူတို့သည် မြစ်များ၊ ချောင်းများကိုလည်း လေ့လာကြကြောင်း။ သူတို့သည် အိမ်အနီးရှိ တာမာမြစ်ဆီ သို့ သွားကြပြီး ရေစီးသံကို နားထောင်ကြကြောင်း၊ ရေစီးဆင်းပုံကို ကြည့်ကြကြောင်း၊ ဤသို့သော အလုပ်မျိုးကို သူတို့သည် ဘယ်တော့မျှမငြီးငွေ့ဘဲ လုပ်ကြကြောင်းကို သူမက ကျွန်မအား ပြောပြခဲ့ဖူး ပါသည်။
မစ္စတာကိုဘာယာရှီသည် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကို မလိုလားပေ။ သူသည် သူ၏ ကျောင်းအကြောင်းကို မကြေညာပေ။ ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဓာတ်ပုံများဖြင့် ဖော်ပြခြင်း၊ သတင်းဆောင်းပါးများ ရေးသား ခြင်းမျိုးကို မပြုလုပ်ပေ။ သို့သော်လည်း ပညာရေးဌာနအနေဖြင့် သူ့အား ကလေးများ ပညာရေးတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်ဖြင့် အသိအမှတ်ပြုထားလေသည်။
တိုမိုကျောင်း အားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့ဖြစ်သော နိုဝင်ဘာ(၃)ရက်နေ့သို့ ရောက်သည့်အခါ တိုင်း တိုမိုကျောင်းသားဟောင်းများသည် ကူဟွန်းဘတ်စု ဘုရားကျောင်းတွင် စုဝေးတွေ့ဆုံလေ့ရှိကြ ပါသည်။ ကျွန်မတို့တစ်တွေ၏ အသက်များမှာ လေးဆယ်ကျော် ငါးဆယ်တွင်းသို့ ရောက်လာကြပြီဖြစ် သော်လည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တွေ့ဆုံကြသည့်အခါ ငယ်စဉ်ကအတိုင်း ပြောကြဆိုကြ ဆက်ဆံလေ့ရှိ ကြပါသည်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နောက်ကြ ပြောင်ကြပါသည်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ခေါ်ခဲ့ကြ သော ငယ်နာမည် များ ခေါ်ကြပါသည်။ မစ္စတာကိုဘာယာရှီ ချန် ထားခဲ့သော အမွေအနှစ်များတွင် ဤ တွေ့ဆုံပွဲသည် တစ်ခု အပါအ၀င် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မသည် ပထမဦးဆုံး ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ မူလတန်းကျောင်းမှ ကျောင်းထုတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်မကောင်းကောင်း မမှတ်မိတော့ပါ။ အမေက ကျွန်မကို လမ်းပေါ်က အတီးအမှုတ်သမားများအကြောင်းနှင့် စာရေးစားပွဲအကြောင်းကို ပြောပြဖူးပါသည်။ ကျွန်မကျောင်း ထုတ်ခံရသည်ဟု ပြောပြခြင်းကို ကျွန်မ မယုံကြည်နိုင်အောင် ဖြစ်မိပါသည်။ ထိုအချိန်ထိုအခါက ကျွန်မ သည် ကျောင်းထုတ်ခံရလောက်အောင် ဆိုးခဲ့လေသလော။
လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်က ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မသည် နံနက်ပိုင်း ရုပ်မြင်သံကြား အခန်းတစ်ခန်းတွင် ကျွန်မကို ငယ်စဉ်က သိခဲ့ပါသည်ဆိုသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းကို ဖွင့်ခဲ့ရပါသည်။ သူမသည် ကျွန်မ၏ အတန်းပိုင်ဆရာမမဟုတ်ပါ။ ကျွန်မ ပထမဆုံး နေခဲ့ရာ မူလတန်းကျောင်းမှ ကျွန်မတို့၏ အတန်းနှင့် ကပ်လျက် အခန်းမှ အတန်းပိုင် ဆရာမဖြစ်ပါသည်။
ထိုဆရာမ ပြောသည်များကို ကျွန်မသည် အံ့အားသင့်စွာဖြင့် နားထောင်နေမိသည်။
"မင်းဟာ ဆရာမရဲ့အတန်းနဲ့ ကပ်လျက်အတန်းက ကျောင်းသူကလေးပေါ့၊ စာသင်နေချိန်မှာ ဆရာမက ဆရာတွေ စုဝေးရာအခန်းကို သွားတဲ့အခါမှာ မင်းဟာ စာသင်ခန်းအပြင်ဘက် လူသွားလမ်းပေါ်မှာ ထွက်ရပ် နေတတ်တယ်။ ဆရာမက မင်းရဲ့ရှေ့က ဖြတ်သွားတိုင်း မင်းက ဆရာမကို မေးလေ့ရှိတယ်။ " ကျွန်မဘာဖြစ်လို့ ဒီမှာ ရပ်နေတယ်ဆိုတာ သိသလား၊ ကျွန်မဘာအပြစ် လုပ်မိသလဲဆိုတာ သိရဲ့လား၊ ဆရာမ လမ်းပေါ်က အတီးအမှုတ်သမားတွေကို ဆရာမသဘောမကျ ဘူးလား" စသည်ဖြင့် မေးလေ့ ရှိတယ်။ ဆရာမက ပြန်မဖြေတတ်ဘူး။ ကြာတော့ ဆရာမဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုရင်၊ ဆရာတွေ စုဝေးခန်းကို သွားတော့ မယ်ဆိုရင် လူသွားလမ်းပေါ်မှာ မင်းရှိမရှိဆိုတာကို အရင်ဆုံး ကြည့်ရသေးတယ်။ မင်းရှိနေရင် ဆရာမ မသွားသေးဘူး။ မင်းမရှိတော့မှ ဆရာမ ထွက်ဝံ့တော့တယ်။
မင်းရဲ့အကြောင်းကို မင်းရဲ့ အတန်းပိုင်ဆရာမက ဆရာတွေ စုဝေးခန်းမှာ အမြဲပြောလေ့ရှိ တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာမအနေနဲ့ မင်းကို အခြားကျောင်းသားတွေထက်ပိုပြီး သိတာပေါ့။ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ မင်းပထမဆုံး ပါဝင် သရုပ်ဆောင်တာကို ကြည့်ပြီးကတည်းက မင်းကို ဆရာမ ချက်ချင်း မှတ်မိတယ်။ အချိန် ဟာ သိပ်ကြာနေပေမယ့်လို့ ဆရာမကတော့ မင်းကို ကောင်းကာင်း မှတ်မိနေတယ်"
ကျွန်မ၏ အတန်းပိုင်ဆရာမသည် ကျွန်မကို အပြင်ဘက်၌ မတ်တတ် ရပ်ခိုင်း ထားလေသလော၊ ကျွန်မ အံ့သြမိ ပါသည်။ ကျွန်မ ကျောင်းထုတ်ခံရခြင်းကို ထိုဆရာမ ပြောပြပြီးပါပြီ။
ဤတွင် အလျဉ်းသင့်သဖြင့်၊ ကျွန်မ၏ မိခင်အကြောင်းကို ဖော်ပြလိုပါသည်။ ကျွန်မ အသက်နှစ်ဆယ် မပြည့် မချင်း အမေသည် ကျွန်မကျောင်းထုတ်ခံရသည့် အကြောင်းကို လုံးဝမပြောပေ။ ကျွန်မ အသက်နှစ်ဆယ် ပြည့်သောအခါမှ အမေက ထိုအကြောင်းကို ပြောပြသဖြင့် ကျွန်မသည် အမေ့ကို အထူး ကျေးဇူးတင် ပါသည်။
"သမီး-သမီးဘာဖြစ်လို့ တိုမိုကျောင်းကို ပြောင်းရတယ်ဆိုတာ သိသလား"
အမေသည် ကျွန်မကို မေးပါသည်။ ကျွန်မက မသိပါဘူးဟု ဖြေလိုက်သောအခါ အမေက ပြောပါသည်။
"သမီး-ပထမဆုံးနေခဲ့တဲ့ မူလတန်းကျောင်းက ကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရလို့ပဲ"
အကယ်၍ အမေကသာ ထိုအချိန်ထိုအခါက "သမီးသိပ်ဆိုးတာပဲ၊ သမီးအခုကျောင်းထုတ်ခံရ ပြီ၊ နောက်ထပ်ကျောင်းထုတ်ခံရဦးမယ် ဆိုရင် သမီးဘယ်ကျောင်းမှာ သွားနေမလဲ"ဟု ပြောမည်ဆို က ပြောနိုင် ပါသည်။ အမေ ကသာ ထိုသို့ပြောခဲ့လျှင် တိုမိုဂါကူးအန်ကျောင်းဝင်းထဲသို့ ကျွန်မပထမဆုံး ၀င်ရောက်သည့်နေ့က ကျွန်မသည် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြစ်နေလိမ့်မည် မဟုတ်ဘဲ၊ အားငယ်စိတ် ၀င်နေလိမ့် မည်ဖြစ်သည်။ အမေက ကျွန်မကို ကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ဟိုတုန်းက လုံးဝမပြောခဲ့ပါ။ အမေ့လို မိခင်မျိုး ကျွန်မ ရခဲ့သဖြင့် ကျွန်မကံကောင်းပါသည်။
စစ်ကြီး ဖြစ်နေစဉ် တိုမိုကျောင်း၏ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံ အနည်းငယ်ကို ရိုက်ယူ နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဓာတ်ပုံများ ထဲတွင် အတန်းတင် စာမေးပွဲ အောင်သူများ၏ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံများသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ အတန်းတင်စာမေးပွဲအောင်သူများသည် မိမိတို့အတန်း အလိုက် ဓာတ်ပုံများကို အမှတ်တရ ရိုက်ကြပါသည်။ စုဝေး ခန်းမကြီးရှေ့ တွင် ရိုက်ကြပါသည်။ "လာကြဟေ့-လာကြ၊ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကြမယ်" ဟု တယောက်ယောက်က နှိုးဆော်လိုက်လျှင် မသက်ဆိုင်သော အတန်းများမှ ကျောင်းသား များသည်လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်မည့် နေရာသို့ ရောက်လာကြပြီး၊ သူတို့ပါ ၀င်ရောက် အရိုက်ခံကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ပြီး မည်သည့်အတန်းက စာမေးပွဲအောင်သူများ၏ ဓာတ်ပုံများဖြစ်သည်ကို ပြော၍မရနိုင်ပါ။ ဓာတ်ပုံကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မစ္စတာကိုဘာယာရှီသည် အလေးအနက်သိပ်မထားပေ။ သူ့အနေဖြင့် တိုမိုကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ၏ ဓာတ်ပုံဖြစ်လျှင် ကျေနပ်ပါသည်။ ခွဲခြားသည့် အလုပ် မျိုးကို သူမလုပ်ပေ။
တိုမိုကျောင်းအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်မတွင် ရေးစရာအကြောင်း များစွာ ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း စာရှုသူများအနေဖြင့် တော့တိုး-ချန်လို မိန်းကလေးငယ် တစ်ယောက်သည် အခြား အခြား သော လူများနှင့် အဆင်ပြေအောင်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျပြီး ၀င်ဆံ့သူ ဘ၀သို့ ရောက်လာပုံကို သိရလျှင် ကျွန်မ အနေဖြင့် ကျေနပ်သည်။
တိုမိုကျောင်းကဲ့သို့သော ကျောင်းများသာရှိလျှင် ကျောင်းထုတ်ခံရမှု့ များနှင့် ကျောင်းတွင်း အဆင် မပြေ မှုများ ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ကျွန်မထင်ပါသည်။ တိုမိုကျောင်းတွင် ကျောင်းလွှတ် လိုက်သော်လည်း မည်သည့် ကျောင်းသား မှ အိမ်သို့ ချက်ချင်းမပြန်ကြပေ။ နံနက်အချိန်တွင်လည်း ကျွန်မတို့သည် ကျောင်းသွား ဖို့ကိုသာ စိတ်စောနေကြပါသည်။ တိုမိုကျောင်းသည် ထိုသို့သော ကျောင်းမျိုးဖြစ်သည်။
ဆရာကြီး ဆိုဆာကူးကိုဘာယာရှီကို တိုကျိုမြို့ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ရွာတစ်ရွာတွင် ၁၈၉၃ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၈)ရက်နေ့၍ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ သူသည် ရေမြေတောတောင် သဘာဝနှင့် တေးဂီတသံသာများကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူဖြစ်သည်။ ကလေးဘ၀က သူသည် အိမ်အနီးရှိ မြစ်ကမ်းနဘေးတွင် မတ်တတ်ရပ်ရင်း မလှမ်းမကမ်းရှိ ဟာရူးနာတောင်ထိပ်ကို ကြည့်နေလေ့ရှိသည်။ မြစ်ရေစီးသံများကို သူ၏နားထဲတွင် တေးဂီတသံ များအဖြစ် ကြားယောင်နေမိသည်။
သူသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးသော ဆင်းရဲသားမိသားစုတစ်စုမှ မွေးဖွား လာခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ မွေးချင်းခြောက်ယောက် အနက် သူသည် အထွေးဆုံးဖြစ်သည်။ မူလတန်းအဆင့် ပညာရေး ပြီးဆုံးသောအခါ သူသည် လက်ထောက်ကျောင်းဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းသည်။ ဆရာဖြစ် လက်မှတ် ရရှိရေး အတွက် သူသည် ခက်ခဲစွာ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း သူသည် စိတ်မပျက်ဘဲ ဆက်လက်ကြိုးစားရာ၊ တိုကျိုမြို့ မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် ကျောင်းဆရာ အလုပ်ကိုရသည်။ ကျောင်းဆရာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ရင်း သူသည် တေးဂီတပညာကို လေ့လာဆည်းပူးသည်။
ထို့နောက်သူသည် ဂျပန်တေးဂီတ ပညာရေးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သော တေးဂီတသင်တန်းသို့ တက်ခွင့်ရသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးသောအခါ သူသည် ဆီကီအီမူလတန်းကျောင်း၌ တေးဂီတနည်းပြဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းခွင့် ရသည်။ မွန်းလွှဲပိုင်းအားလပ်ချိန်များ၌ သူသည် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အပင်များစုဆောင်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပန်းချီရေးဆွဲခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်းနှင့် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး၏ ဟောပြောပွဲများကို နားထောင်ခြင်းဖြင့် အချိန် များကို ကုန်လွန်စေခဲ့သည်။ သူသည် ကျောင်း၌ တေးဂီတကို သင်ကြားပြသရင်း ကလေးများ အတွက် ရွှင်မြူးဖွယ်ရာ တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်တိုတစ်ပုဒ် ရေးသားပြီး ကျောင်း၌ တင်ဆက်ကပြသည်။ ထိုပြဇာတ်တိုကို စက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သော ရွန်အိုင်ဝါဆာကီးဆိုသူသည် လွန်စွာ သဘောကျ နှစ်ခြိုက်သည်။ အိုင်ဝါဆာကီးသည် `ကျောင်း၏ အနုပညာအသင်း နာယက တစ်ဦး ဖြစ်သည့်အပြင် `ကျောင်းကိုလည်း `ငွေ ကြေးထောက်ပံ့မှု ပေးနေသူဖြစ်သည်။ သူသည် မစ္စတာ ကိုဘာ ယာရှီကို ဥရောပတိုက်၌ ပညာသင်ကြားရေး နည်းစနစ်များအားလေ့လာစေရန် `စေလွှတ်ဖို့ ထောက်ခံပြီး လိုအပ်သော ငွေကြေးများကိုလည်း ထောက်ပံ့သည်။
''သူတို့ကို သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုစရိုက်အတိုင်း လွှတ်ထားပါ၊ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ သူတို့ လုပ်ချင်တာတွေကို သွားမချုပ်ချယ်ပါနဲ့၊ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ထက်တောင်မှ ကြီးချင်ရင် ကြီးနေမှာ''ဟု ပြောလေ့ရှိသည်။ ထိုကျောင်းမျိုးသည် ဂျပန်ပြည်တွင် ရှေးအခါက မရှိခဲ့ပေ။
၁၉၃၀ပြည့်နှစ်တွင် မစ္စတာကိုဘာယာရှီသည် ဥရောပတိုက်သို့ ခရီးသွားပြန်သည်။ သူသည် ဒါလ်ခရိုဇီထံမှ ပညာများကို ဆည်းပူးသည်။ ထို့နောက်သူသည် အမြို့မြို့အနယ်နယ်သို့ လှည့်လည်ပြီး ပညာရေးဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများကို ပြုလုပ်သည်။ ဂျပန်ပြည်သို့ ပြန်ရောက်လျှင် သူ၏ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်း တည်ထောင်ရန်ကိုလည်း စိတ်ကူးထားသည်။
၁၉၃၇ခုနှစ်တွင် သူသည် တိုမိုဂါကူးအန်ကျောင်းကို စတင်တည်ထောင်သည့်အပြင်၊ သူသည် ဂျပန်ယိမ်း အက နည်းသစ်အသင်း ကိုပါ တည်ထောင်သည်။
မစ္စတာကိုဘာယာရှီသည် တိုမိုကျောင်းကဲ့သို့သော ကျောင်းမျိုးကို စစ်ကြီးပြီးသောအခါ နောက်ထပ်မထူ ထောင် နိုင်သည်မှာ စိတ်မကောင်းစရာပင်။
လွန်ခဲ့သော အနှစ်နှစ်ဆယ်ခန့်ကဖြစ်ပါသည်။ ကိုဒန်းရှားစာအုပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနမှ အယ်ဒီတာ တစ်ယောက် သည် ကျွန်မထံသို့ ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင်တွင် တိုမိုကျောင်း အကြောင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်မ စာရေးခဲ့သည်ကို သူ သတိပြုမိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအယ်ဒီတာ သည် ကျွန်မကို စာရေး စက္ကူများစွာ ပေးထားခဲ့ပြီး တိုမိုကျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာအုပ် အဖြစ် ထုတ်ဝေနိုင်အောင် ရေးပေးပါဟု ပြောပါသည်။ သို့သော် ကျွန်မသည် ထိုစာရွက်များအား အခြား အကြောင်း အရာ များကို ရေးသားခြင်း၌ အသုံး ပြုလိုက်မိပါသည်။ ထိုအယ်ဒီတာသည် ယခုအခါတွင် ကိုဒန်းရှား၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်လာပေသည်။ သူသည် လွန်ခဲ့သော အနှစ်နှစ်ဆယ်က အကြောင်း ကို မမေ့ပေ။
ကျွန်မသည် ကိုဒန်းရှားမှ ထုတ်ဝေသော 'အမျိုးသမီးငယ်'မဂ္ဂဇင်းတွင် တိုမိုကျောင်းအကြောင်းကို အခန်းဆက် ဆောင်းပါးများအဖြစ် ၁၉၇၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ ၁၉၈၀ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ ရေးသားခဲ့ ပါသည်။ မိရိုး-ချန်နှင့် တိုမိုကျောင်းမှ ကျွန်မ ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းများက ကျွန်မကို အကူ အညီ များစွာ ပေးကြပါသည်။
တိုမိုကျောင်းသည် ယခုအခါတွင် မရှိတော့ပါ။ သို့သော်လည်း တစ်ချိန်က ရှိခဲ့သော တိုမိုကျောင်းအကြောင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ယခုလို စာအုပ်ထုတ်ဝေရန် အခွင့်အရေးရခဲ့သဖြင့် ကျွန်မသည် လွန်စွာမှ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးမိ ပါသည်။
ကျွန်မရေးသော စာအုပ်သည် မမျှော်လင့်ဘဲနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အရောင်းရဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်လာ ပါသည်။ တစ်နှစ်အတွင်း၌ ၄,၅၀၀,၀၀၀ ရောင်းရခဲ့ရပါသည်။
ပို၍ အံ့သြစရာနှင့် ကြုံရသည်မှာ ကျွန်မ၏စာအုပ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံပညာရေးဌာနမှ ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်အ ဖြစ်ဖတ်ရန် အားပေးသမှုပြုခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးများအဖို့ ယခုစာအုပ်သည် ပုံပြင်စာအုပ်သဖွယ်မျှသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အသက်ခုနစ်နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများသည် အဘိဓာန်အကူအညီဖြင့် ဤစာအုပ်ကို ဖတ်ကြသည်ဟု ကျွန်မသိရပါသည်။ ကျွန်မ၏ ၀မ်း သာမှုသည် ပို၍တိုးလာပါသည်။
ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ပြဇာတ်အဖွဲ့များက ကျွန်မ၏စာအုပ်ကို အသုံးပြုရန် ခွင့်တောင်းလာ ကြပါသည်။ သူတို့သည် စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာအချို့ကို အနည်းငယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး တင်ဆက် လိုကြသည်။ သို့သော် ကျွန်မသည် ခွင့်မပြုပေ။ သို့သော်လည်း တေးဂီတပညာရှင် အာကီဟီရိုကိုမိုရီ၏ အကူအညီ ဖြင့် ကျွန်မက ဇာတ်ကြောင်းပြောသူ တာဝန်ယူကာ ဓာတ်ပြားသွင်းခဲ့ရာ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ ပါသည်။
ကျွန်မ၏ စာအုပ်ကို ကျောင်းဖတ်စာအုပ်အဖြစ် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ''လယ်သမား ကျောင်းဆရာ''ကို တတိယတန်း၌ လာမည့်နှစ်မှ အစပြု၍ သင်ကြား ရန် ပြဠာန်းထားပါသည်။ ''ကျောင်းစုတ် ကျောင်းအို''ကိုမူ စတုတ္ထတန်း၌ ပြဠာန်းထားပါသည်။ ကျောင်းဆရာ များသည် ဤစာအုပ်ကို သူတို့နည်း သူတို့ဟန်ဖြင့် အသုံးပြုလျက်ရှိနေကြပါသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် ပန်းချီသင် တန်းများ၌ ဆရာများသည် စာအုပ်ပါအခန်းတစ်ခန်းကို ကျောင်းသားများအား ဖတ်ခိုင်းပြီးနောက် ကျောင်းသားများအား သူတို့ အနှစ်သက်ဆုံး ပုံများကို ရေးဆွဲချင်သလို ရေးဆွဲစေ သည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
ကျွန်မသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးဖြစ်သော နားမကြားသူများ၏ အပျော်တမ်းပြဇာတ်အဖွဲ့ကို တည်ထောင်လိုသည်မှာ ကြာလှပါပြီ။ ထိုလုပ်ငန်းကို ဤစာအုပ်မှရသော စာမူခငွေများနှင့် စာအုပ်အတွက် ချီးမြှင့်သော စာပေဆုမှ ဆုငွေများကို ပေါင်းစပ်ပြီးနောက် အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါသည်။ နားမကြား သူ များ အပျော်တမ်းပြဇာတ် အသင်းကြီးတွင် အားတက်သရော ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို ဂုဏ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ဂျပန်ဘုရင်မင်းမြတ်က တည်ခင်းသော ဥယျာဉ်ပါတီပွဲသို့ ကျွန်မ တက်ရောက် ခဲ့ရပါသည်။ ဂျပန်ဘုရင်မင်း မြတ်နှင့် ကျွန်မသည် စကားပြောခွင့်ရပါသည်။ ထိုဥယျာဉ်ပါတီပွဲသို့ ဂျပန်အမျိုးသား ဓာတုဗေဒ နိုဘယ်ဆုရှင် ကင်နီချီဖူကူအီ လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ကလည်း ကျွန်မသည် ၀န်ကြီးချုပ်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် နိုင်ငံတကာမသန်စွမ်းသူများ အခမ်းအနား၌ ပါဝင် စကားပြောခွင့် ရခဲ့ပါ သည်။
ကျွန်မသည် ကျွန်မအလွန်ရေးလိုသော စာအုပ်ကို ရေးပြီးပါပြီ။ စာအုပ်က ကျွန်မကို စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှု များကို ပေးခဲ့ပါကြောင်း။
တိုကျို။ ၁၉၈၂။ တက်ဆူးကိုးကူရိုယာနာဂီ
ဘယ်သူတွေ ဘာတွေဖြစ်နေကြသလည်း ဆိုတာနဲ့ မနက်ဖြန်မှာ နိဂုံးချုပ် ပါတော့မယ်..
Posted by SHWE ZIN U at 5:08 AM5comments Links to this post
စစ်သားအများအပြား ကျဆုံးကြသည်။ အစားအသောက်များတဖြည်းဖြည်း ရှားပါးလာသည်။ လူတိုင်းသည် တထိတ်ထိတ် တလန့်လန့် ဖြစ်နေကြသည်။ သို့သော်လည်းနွေရာသီမှာမူ ရောက်နေကြ အတိုင်း ရောက်လာသည်။ နေရောင်ခြည်သည် အနိုင်ရသည့် တိုင်းပြည်နိုင်ငံများပေါ်၌ ကျရောက်သလို အနိုင် မရနိုင်သော တိုင်းပြည်နိုင်ငံများ အပေါ်သို့လည်း ကျရောက်ပါသည်။
တော့တိုး-ချန်သည် ကာမာကူးရားရှိ သူမ၏ ဦးလေးနေအိမ်မှ တိုကျိုမြို့သို့ ပြန်ရောက်ခါစပင်ရှိ သေးသည်။
တိုမိုကျောင်းတွင် စခန်းချခြင်းနှင့်် ရေပူစမ်းသို့ အပန်းဖြေခရီး ထွက်ခြင်းကို မလုပ်နိုင်ကြတော့။ ကလေး များသည် ယခင့်ယခင် နွေရာသီများကလို ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အလုပ်များကို မပြုလုပ်နိုင်ကြတော့။ တော့တိုး-ချန် သည် နွေရာသီရက်များ၌ ကာမာကူးရားရှိ သူမ၏မောင်နှမ၀မ်းကွဲများရှိရာသို့ သွားရောက် လည်ပတ် လျက်ရှိသည်။ယခုနှစ် နွေရာသီတွင် ထူးခြားမှု့ တစ်ခုနှင့် ကြုံရသည်။
သူမကို တစ္ဆေပုံပြင်များ ပြောပြလေ့ရှိသော သူမ၏ အစ်ကိုဝမ်းကွဲတစ်ယောက်သည် ယခုနှစ်တွင် တစ္ဆေပုံပြင် များကို မပြောပြနိုင်တော့။ သူသည်စစ်ထဲသို့ လိုက်ပါသွားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။သူမ ကို အမေရိကန် ပြည် အကြောင်း များများ ပြောလေ့ရှိသော သူမ၏ ဘကြီးဖြစ်သူမှာလည်း ရှေ့တန်း တစ်နေရာသို့ ရောက်နေသည်။ သူ၏အမည်မှာ ရှုဂျီတာဂူချီဖြစ်သည်။ သူသည် ထိပ်တန်းဓာတ်ပုံ ဆရာ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သူသည် နယူးယောက်မြို့တွင် နီဟွန်သတင်းဌာန၏ အကြီးအကဲ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ အမေရိကန် မက်ထရိုသတင်းဌာနတွင် အရှေ့ဖျားဒေသ ကိုယ်စားလည် အဖြစ် အမှုထမ်း ခဲ့ဖူး လေသည်။ သူသည် အဖေ၏အစ်ကိုကြီး ဖြစ်သည်။
ယခုရှေ့တန်းမှ ထုတ်ပြန်သော သတင်းဓာတ်ပုံများ အားလုံးမှာ ဘကြီး၏ဓာတ်ပုံများဖြစ်သည်။ ရှေ့တန်း ကျသောနေရာများသို့ သွားရောက်ပြီး ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးနေရသော ဘကြီးအတွက် တော့တိုး-ချန် ၏ ဆွေမျိုးသားချင်း များက စိတ်ပူပန်နေကြရသည်။
ကာမာကူးရာတွင် နေရစဉ်က တော့တိုး-ချန်သည် ညအိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် စိတ်ညစ်ညူးမှုနှင့်ကြုံရ သည်။ ဘကြီးရှုဂျီ၏သားကြီး ရက်-ချန်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရက်-ချန်သည် တော့တိုး-ချန်ထက် အသက်တစ်နှစ်ခန့် ပိုငယ်သူဖြစ်သည်။ ကလေးများအားလုံးသည် ညအိပ်သည့်အခါ ခြင်ထောင် ကြီးတစ်လုံးထဲ၌ အတူတူ အိပ်ကြရသည်။ အိပ်ရာသို့ မ၀င်မီ ရက်-ချန်က "ဘုရင်ဧကရာဇ် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ" ဟုအော်ပြီး အိပ်ရာထဲသို့လှဲအိပ်ချလိုက်သည်။
တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးသွားသော စစ်သားများ လုပ်ပုံလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရက်-ချန် က လူသေကောင် သဖွယ် မလှုပ်မယှက်ဘဲ ရှိနေသောကြောင့် ကျန်ကလေးများအဖို့ အိပ်ရသည်မှာ ကသိ၊ ကအောက် နိုင်လွန်းလှပေသည်။
တော့တိုး-ချန်၏ အမေနှင့် အဖေသည် ကာမာကူးရား သို့ လိုက်ပါလာခြင်း မရှိပေ။ အဖေသည် တိုကျို၌ အလုပ်ရှိ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နွေရာသီရက်များ ကုန်သောအခါ တော့တိုး-ချန်ကို သူမ၏ အစ်မ၀မ်းကွဲ က တိုကျိုသို့ ပြန်ပို့ပေးသည်။
အိမ်သို့ပြန်ရောက်လျှင်ရောက်ခြင်း တော့တိုး-ချန်သည် သူပြုလုပ်နေကြအတိုင်း ရော့ကီကို ပထမဦးစွာ ရှာဖွေသည်။ ရော့ကီကို ဘယ်နေရာမှာမျှရှာမတွေ့ပေ။ ၎င်းသည် အိမ်ထဲမှာလည်းမရှိ၊ အိမ်ပြင် မှာလည်း မရှိ။တော့တိုး-ချန် စိတ်ပူသွားသည်။ ယခင်ကဆိုလျှင် ရော့ကီသည် သူမအိမ်သို့မရောက်မီ လမ်းသို့ထွက်၍ ကြိုလေ့ရှိသည်။ တော့တိုး-ချန်သည် အိမ်ပြင်သို့ထွက်၍ အိမ်ရှေ့လမ်းမပေါ်တွင် ရော့ကီ၏အမည်ကို တကြော်ကြော်အော်ခေါ်လိုက်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်း၏အရိပ်အရောင် ကို လုံးဝမတွေ့ရ။ သူမက ရော့ကီကို လိုက်ရှာနေစဉ် ရော့ကီသည် အိမ်သို့ပြန်ရောက်ကောင်း ရောက်နေမည်ဟု တော့တိုး-ချန် စဉ်းစား မိသဖြင့် သူမသည် အိမ်သို့ အမြန်ဆုံးပြန်လာသည်။ သို့သော် ၎င်းကိုမတွေ့ရ။
သူမက အမေ့ကို မေးလိုက်သည်။
သမီးဖြစ်သူက ရော့ကီကို အပူတပြင်းလိုက်ရှာနေသည်ကို အမေသည် မသိမဟုတ် သိပါ၏။ သို့သော် အမေသည် သမီးကိုဘာမျှမပြော။ အမေသည် သမီးကို အဖြေပေးရန် အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့ နေဟန် ရှိသည်။ "ရော့ကီပျောက်နေတယ်" ဟူ၍သာ သူမကပြန်ပြောလိုက်သည်။
တော့တိုး-ချန် မယုံပေ။ ရော့ကီဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပျောက်ရမှာလဲ။
တော့တိုး-ချန်သည် အမေ၏မျက်နှာကို ကြည့်ပြီမေးလိုက်သည်။
"သမီး ကာမာကူးရားသို့ သွားပြီး မကြာခင်မှာပဲ"
အမေက စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ပြောလိုက်သည်။ ၎င်းနောက်အမေကပင် ဆက်လက်၍ ခက်သွက်သွက် ကလေး ပြောလိုက်သည်။
"အမေတို့လိုက်ရှာကြသေးတယ်၊ တွေ့တဲ့သူတိုင်း ကိုမေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူး သမီးရယ်၊ သမီးကို ဘယ်လို ပြောရမယ်ဆိုတာကို အမေစဉ်းစားနေတာပါ၊ အမေတို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတာ ပေါ့"
တော့တိုး-ချန်သည် အဖြစ်မှန်ကို နားလည်လိုက်လေပြီ။ ရော့ကီသေသွားခြင်းသာဖြစ်ရမည်။
အမေသည် သမီးဖြစ်သူ စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာ စိုးသောကြောင့် အဖြစ်မှန်ကို မပြောပြခြင်းသာဖြစ်ရ မည်။ အမှန်ကတော့ ရော့ကီသေသွားသည်ဆိုသည်မှာ သေချာသည်ဟု တော့တိုး-ချန်စဉ်းစားမိသည်။
တော့တိုး-ချန် သည် အဖြစ်မှန်ကို ကောင်းစွာသိလိုက်လေပြီ။သူမ မည်မျှကြာကြာ ခရီးထွက်ထွက်၊ ရော့ကီ သည် အိမ်မှဝေးဝေး ဘယ်ကိုမျှသွားလေ့မရှိပေ။ သူမပြန်လာမည်ကို ရော့ကီအစဉ်အမြဲ သတိထားသည်။
"ရော့ကီဟာ ငါ့ကို မပြောဘဲ ဘယ်ကိုမှ သွားလေ့မရှိပါဘူး"
သို့သော်လည်း တော့တိုး-ချန်သည် အမေ့ကို ဘာမျှမပြောတော့ပေ။ အမေ့စိတ်ထဲ မည်သို့ ခံစားနေရ မည်ကိုလည်း သူမသိထားသည်။
"ရော့ကီ ဘယ်ကို များ သွားနေပါလိမ့်"
တော့တိုး-ချန်သည် မျက်လွှာချပြီး ပြောလိုက်သည်။
၎င်းနောက် သူမသည် အိမ်ပေါ်ထပ်၌ရှိသော သူမ၏ အိပ်ခန်းသို့ တက်သွားသည်။ အိပ်ခန်းထဲသို့ ရောက်သော အခါ သူမသည် မငိုမိရန် တင်းထားလိုက်သည်။ ရော့ကီသည် သူမကို စိတ်ဆိုးပြီး ထွက်သွား လေရော သလား။ ရော့ကီ အပေါ် မကောင်းတာဘာများပြုမိပါလိမ့်၊ သူမပြန်စဉ်းစားကြည့်သည်။
"တိရ စ္ဆာန်များကို ဘယ်တော့မှ မစကြနဲ့နော်"
မစ္စတာကိုဘာယာရှီိသည် တိုမိုကျောင်းမှ ကလေးများကို အစဉ်ဆုံးမလေ့ရှိသည်။
"ဥပမာ ဆိုကြပါစို့၊ ခွေးကို အစာတောင်းခိုင်းရင် ခွေးက အစာတောင်း လိမ့်မည်။ အဲဒီအခါမှာ ခွေးကို စတဲ့ အနေနဲ့ အစာမပေးဘဲ ထားလိုက်ရင် ခွေးက မင်းတို့ကို အယုံအကြည် မရှိတော့ဘူး၊ ခွေး ဟာ စရိုက်ဆိုး လာလိမ့်မယ်"
တော့တိုး-ချန်သည် ဆရာကြီး၏ ဆုံးမစကားကို အမြဲနားထောင်သည်။ သူမသည် ရော့ကီကို ဘယ်တော့ မှမစပေ၊ ဘယ်တော့မှ မလှည့်စားပေ။ ရော့ကီအပေါ် မကောင်းတာ ဘာကိုမျှ မလုပ်ခဲ့ပါဟု သူမ စဉ်းစား မိသည်။
ထိုအခိုက် တော့တိုး-ချန်သည် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ရောက်နေသော သူမ ကစားစရာ ၀က်ဝံရုပ်၏ ခြေထောက်ကြား တွင် တစ်စုံတစ်ရာကို သတိပြုလိုက်မိသည်။ ထိုအရာကို မမြင်မီအထိ သူမသည် မငိုမိရန် စိတ်ကို ထိန်းချုပ် ထားနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၀က်ဝံရုပ် ခြေထောက်ကြား၌ရှိသော ထိုအရာကို မြင်လိုက်ရသည်နှင့် သူမသည် သည်းထန်စွာ ငိုကြွေး လိုက်မိလေတော့သည်။ ထိုအရာမှာ ရော့ကီ၏ အညိုရောင် အမွှေး အချို့ဖြစ်သည်။ ထိုအမွှေးများသည် ကာမာကူးရား သို့ သူမ မသွားမီ နံနက်က သူမ အခန်းထဲ၌ သူတို့နှစ်ဦး ကစားရင်း ရော့ကီိထံမှ ကျွတ်ကျန်ခဲ့သော အမွှေးနု များ ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
တေားတိုး-ချန် သည် ထိုိအမွှေးများကို လက်ဝယ်ကိုင်ထားရင်း အသံကျယ်စွာဖြင့် ငိုကြွေးမိလေ တော့သည်။ သူမ၏ မျက်လုံးအိမ်မှ ယိုစီးကျလာသော မျက်ရည်များသည် လည်းကောင်း၊ ရှိုက်သံများ သည်လည်းကောင်း ရပ်ဆိုင်းသွားခြင်းမရှိတော့ပေ။
ပထမ ယာဆူအာကီ-ချန်၊ ယခုတဖန် ရော့ကီ။ တော့တိုး-ချန်သည် မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် နောက်ထပ် ဆုံးရှုံး ခဲ့ရပြန်လေပြီ။
တိုမိုကျောင်းမှ ကလေးများ ချစ်ခင်ကြသော ကျောင်းစောင့်ကြီး ရာရိုး-ချန်သည် စစ်ထဲဝင်ရပေတော့မည်။ သူသည် ကလေးတစ်ယောက်ယောက် ဒုက္ခရောက်လျှင်၊ သို့မဟုတ် အခက်အခဲတွေ့ပြီး အကူအညီလိုလျှင် အမြဲတမ်း ကူညီလေ့ရှိသည်။ သူသည် ကလေးများ၏ ကယ်တင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ရာရိုး-ချန်သည် ဘာကိုမဆို ပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်သည်။ သူသည် စကားများများ မပြော။ ပြုံးရုံသာ ပြုံးသည်။ သို့သော်လည်း သူသည် ဘာလုပ်ရမည်ကို သိသူဖြစ်သည်။ တော့တိုး-ချန်သည် အညစ်အကျေးကန်ထဲသို့ ကျသွားစဉ်က သူမကို လာရောက် ကယ်ဆယ်သူမှာ ရာရိုး-ချန်ပင်ဖြစ်သည်။ သူသည် မရွံမရှာဘဲ သူမကို ရေချိုး ပေးသူ ဖြစ်သည်။ သူ့ နှုတ်မှ ညည်းညူခြင်းလည်း မရှိပေ။
"ငါတို့တစ်တွေ ရာရိုး-ချန်ကို လက်ဖက်ရည်ပွဲနဲ့ တည်ခင်းကြရအောင်"
လက်ဖက်ရည်ပွဲနှင့် နှုတ်ဆက်မည့် အစီအစဉ်ကို တိုမိုကျောင်းမှကလေးများ သဘောကျကြသည်။ သူတို့သည် မလုပ်ဖူးသေးသော အသစ်အဆန်းကို လုပ်လျှင် သဘောကျလေ့ ရှိကြသည်။
ဆရာကြီးသည် လက်ဖက်ရည်ပွဲဟူသော အသုံးအနှုန်းကိုသာသုံးသည်။နှုတ်ဆက်လက်ဖက်ရည် ပွဲဟု မသုံးနှုန်းပေ။ ကျောင်းသားကြီးများက နားလည်သည်။နှုတ်ဆက်ပွဲ၏ နောက်ဝယ် ၀မ်းနည်းခြင်းက တွဲ၍ ပါလာတတ်သည်။ရာရိုး-ချန်ကို နှုတ်ဆက်မည်ဟုပြောလျှင် သူသည်ပြန်မလာတော့ဟု ဆိုလျှင် တိုက်ပွဲ၌ ကျဆုံး သွားသည်ဟူသော သဘောဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားများသည် လက်ဖက်ရည်ပွဲကို တစ်ခါတစ်ရံမျှ မတက်ဖူးကြ။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် စိတ်လှုပ်ရှား နေကြသည်။
ကျောင်းဆင်းသောအခါ မစ္စတာကိုဘာယာရှီသည် ကျောင်းသားများအား စုဝေးခန်းမကြီးထဲ၌ နေ့လယ်စာ စားချိန်တွင် ခုံများကို ပြန်နည်းအတိုင်း စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍန်ဖြစ်အောင် ပြင်ခိုင်းလိုက် သည်။ထို့နောက် ကျောင်းသား များအားလုံးကို နေရာယူခိုင်းလိုက်သည်။ ကျောင်းသာ၊ကျောင်းသူ တိုင်း၏ရှေ့တွင် လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံးများ ချထားသည်။ ဆရာကြီးသည် ရာရိုး-ချန်၏အနီး တွင် ကပ်၍ ထိုင်သည်။ ရာရိုး-ချန်၏ ရှေ့တွင်မူ ဖန်ခွက်တစ်လုံးချထားသည်။ ဖန်ခွက်ထဲတွင် ဆာကေ(အရက်)ရှိသည်။ ဆာကေကို ရှေ့တန်း စစ်မြေပြင်သို့သွားမည့် သူများသာ သောက်ရသည်။
"ယခု လက်ဖက်ရည်ပွဲ ဟာဆိုရင် တိုမိုကျောင်းရဲ့ ပထမဆုံး လက်ဖက်ရည်ပွဲဖြစ်တယ်" ဆရာကြီးက ပြောသည်။
"ငါတို့ တစ်တွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး လက်ဖက်ရည် သောက်ကြရအောင်၊ မင်းတို့တစ်တွေ ရာရိုး-ချန်ကို ပြောစရာ ရှိရင် ပြောကြပါ။ မင်းတို့ အချင်းချင်းလည်း ပြောချင်တာပြောကြပါ။ ရာရိုး-ချန်ကိုမှ မဟုတ်ပါဘူး။တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် အလယ်ကို ထွက်ပြီး ပြောကြပါ"
သူတို့တစ်တွေ တိုမိုကျောင်း၌ ယခုလို လက်ဖက်ရည်ပွဲ ကျင်းပခြင်းသည် ပထမဆုံး အကြိမ်ပင် ဖြစ်သည်။ ရာရိုး-ချန် ဆာကေ သောက်သည်ကို သူတို့မြင်ဖူးခြင်းမှာလည်း ပထမဆုံး အကြိမ်ပင် ဖြစ်သည်။
ကလေးများသည် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် မတ်တတ်ရပ်၍ ရာရိုး-ချန်ကို ကြည့်ပြီး စကားပြော ကြသည်။ ပထမဆုံး စကားထပြောသော ကလေးများက ရာရိုး-ချန်ကို ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဖို့ နှင့် သတိဝီရိယ အမြဲရှိဖို့ ပြောကြသည်။ ထို့နောက် တော့တိုး-ချန်နှင့် တစ်တန်းတည်းသားဖြစ်သူ မီဂီးတာ က ပြောသည်။
"နောက်တစ်ကြိမ် ကျွန်တော် တိုင်းပြည်ကို ပြန်ရောက်လာရင် ခင်ဗျားတို့ အားလုံးအတွက် မီးသင်္ဂြိုလ် ထားတဲ့ ပြာတွေယူခဲ့မယ်"
ကလေးတိုင်းက ရယ်ကြသည်။ မီးသင်္ဂြိုလ်ထားသော ပြာတွေကို ယူခဲ့မည်ဟု လွန်ခဲ့သော နှစ်ကလည်း မီဂီးတာက သူ၏ သူငယ်ချင်းများကို ပြောဖူးသည်။ သူသည် စကားပြောခွင့်ရတိုင်း ထိုအတိုင်းပင် ပြောလေ့ ရှိသည်။ ပြောသာပြောသည် သူသည် ဘယ်တော့မျှ မယူခဲ့ပေ။
မီဂီးတာ၏ ပြောစကားကို ကြားရသောအခါ ဆရာကြီးသည် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားသည်။ ယခုလို အချိန် မျိုး၌ မီးသင်္ဂြိုလ်ထားသော ပြာအကြောင်း ပြောခြင်းသည် နိမိတ်မရှိပါဟု ယူဆစရာပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လည်း မီဂီတာသည် အရိုးခံအတိုင်း ပြောလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ သူ့စိတ်ထဲ၌ ထူးထူးခြားခြား ဘယ်လိုမျှ မရှိပေ။ ရယ်စရာပြောခြင်းတစ်မျိုးသာဖြစ်ကြောင်း ဆရာကြီးသိသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာကြီး သည် ကလေးများ နှင့် အတူတူ ရော၍ ရယ်လိုက်သည်။ ရာရိုး-ချန်ကလည်း လိုက်ရယ်သည်။
ထို့နောက် အိုအီသည် ထိုင်ရာမှထလိုက်ပြီး သူသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အတော်ဆုံး စိုက်ပျိုးရေးသမား တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရိုးရာ-ချန်ကို ကတိပေးလိုက်သည်။ ၎င်းနောက် ကီကိုအာအိုကီးသည် ထိုင်ရာမှထလိုက်သည်။ သူမသည် ရှက်တတ်သူ ဖြစ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း သူမ သည် ရယ်လိုက်ပြီးနောက် ဦးညွတ်ကာ ပြန်ထိုင်လိုက်သည်။ ထိုအခါ တော့တိုး-ချန် က ရှေ့သို့ထွက်၍ ကီးကိုအာအိုကီး ကိုယ်စား ပြောလိုက်သည်။
"ကီးကို-ချန်ရဲ့ ကြက်ပေါက်ကလေးတွေဟာ ပျံနိုင်တယ်၊ ဟိုတစ်နေ့တုန်းက ကျွန်မ မြင်လိုက်တယ်"
အခြား အလှည့်ကျသူ တစ်ဦးမှာ အာမာဒီရား ဖြစ်သည်။ သူက ပြောလိုက်သည်။
"ဒဏ်ရာ ရထားတဲ့ ကြောင်ကလေးတွေ၊ ခွေးကလေးတွေကို တွေ့ရင် ကျွန်တော့်ထံကို ခေါ်ခဲ့ကြပါ။ ကျွန်တော် ကုပေးမယ်"
တာကာဟာရှီ၏ အလှည့်သို့ ရောက်လာလေပြီ။ တာကာဟာရှီသည် သေးသေးညှက်ညှက် ကလေး ဖြစ်သောကြောင့် သူသည် ခုံအောက်မှ ငုံ့ထွက်၍ အပြင်သို့ ထွက်လာသည်။ သူက ပြောလိုက်သည်။
"ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရာရိုး-ချန်၊ အစစအရာရာအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အားလုံးသော ကိစ္စ အ၀၀ တွေကို ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါပဲ"
တာကာဟာရှီ ပြောပြီးသောအခါ အာအီကို ဆိုင်ရှိုး၏ အလှည့်သို့ ရောက်လာသည်။ သူမသည် မတ်တတ်ရပ် လိုက်ပြီး ပြောလိုက်သည်။
"ရာရိုး-ချန်၊ ကျွန်မ လိမ့်ကျတုန်းက ကျွန်မကို ပတ်တီးတွေ စည်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်၊ ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး"
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး၏ သမီးဖြစ်သူ မိရိုး-ချန်သည် ရာရိုး-ချန်အကြောင်းကို အသိဆုံး ဖြစ်သည်။ သူမ၏ မျက်လုံးအိမ် များတွင် မျက်ရည်များ ပြည့်နေသည်။
"ဦးလေး ရာရိုး-ချန် အနေနဲ့ ဦးလေးကိုယ်ကို ဦးလေး ဂရုစိုက်ရမယ်၊ စာရေးပါ၊ ကျွန်မကလည်း စာရေး မယ်"တော့တိုး-ချန် တွင် ပြောစရာစကားတွေ အများကြီး ရှိသည်။ သို့သော် မည်သည့်နေရာက စပြောရမှန်း မသိ ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် သူမက "ဦးလေး ရာရိုး-ချန် ခရီးသွားပေမယ်လို့ ကျွန်မတို့ ကတော့ နေ့တိုင်း လက်ဖက်ရည်ပွဲ ကျင်းပပေးမှာပါ" ဟူ၍သာ ပြောသည်။
တော့တိုး-ချန်၏ ပြောစကားသည် မှန်၏။ နောက်တစ်နေ့တွင် ကလေးများသည် အချင်းချင်း စုမိသည့် အခါ လက်ဖက်ရည်ပွဲ ကျင်းပတမ်း ကစားကြသည်။ သူတို့သည် ရေကို လက်ဖက်ရည်ဟု သဘောထား ၍လည်းကောင်း၊ ဆာကေဟု သဘောထား၍ လည်းကောင်း သောက်ကြသည်။ တချို့ကျောင်းသား များက "ငါတို့ ပြာတွေယူခဲ့မယ်"ဟု၍ နောက်ပြောင်ကြသည်။ ထိုအခါ ကျောင်းသားများက ရယ်ကြ သည်။ ထို့နောက် သူတို့သည် သူတို့ပြောချင်သည့် စကားများကို ပြောကြသည်။
'လက်ဖက်ရည်ပွဲ'သည် ရာရိုး-ချန်က တိုမိုကျောင်းမှ ကလေးများအတွက် ချန်ထားခဲ့သော အံ့သြဖွယ်ရာ လက်ဆောင်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ထို လက်ဖက်ရည်ပွဲကစားနည်းသည် တိုမိုကျောင်းမှ ကျောင်းသားများ မခွဲခွာကြမီ နောက်ဆုံး ကစားသွားကြသော ကစားနည်းတစ်မျိုးပင် ဖြစ်တော့သည်။
ရာရိုး-ချန်သည် တိုယိုကို "မီးရထားကိုစီး၍ ထွက်ခွာသွားသည်။ သူထွက်ခွာသည့်အချိန်နှင့် အမေရိကန် လေယာဉ်ပျံများ ရောက်လာသည့်အချိန်မှာ တိုက်ဆိုင်လျက် ရှိသည်။ ၎င်းလေယာဉ်ပျံများသည် တိုကျို မြို့ပေါ်သို့ ရောက်လာကြပြီး၊ ဗုံးများကို ကြဲချလေသည်။ နေ့စဉ် ရက်ဆက် လာရောက်ကြဲချသည်။
တိုမိုကျောင်း မီးလောင်ပြာကျသွားလေပြီ။ ထိုအဖြစ်အပျက်သည် ညဘက်၌ ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျောင်းနှင့် ဆက်လျက် တည်ရှိသည့် အိမ်တွင်နေထိုင်ကြသော မိရိုး-ချန်၊ သူမ၏ အစ်မ မိဆား-ချန်နှင့် သူတို့၏ မိခင်သည် ကူဟွန်းဘတ်စု ဘုရားကျောင်း၌ရှိသော ရေအိုင်အနီးရှိ တိုမို-စိုက်ခင်းသို့ တိမ်းရှောင် နေသည့်အတွက် အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်သွားကြသည်။
ဘီ ၂၉ဗုံးကြဲလေယာဉ်ပျံများပေါ်မှ ကြဲချသော မီးလောင်းဗုံးများသည် ကျောင်း၏ စာသင်ခန်းများအဖြစ် အသုံးပြု ထားသော မီးရထား တွဲဟောင်းများ ပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့သည်။
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက တယုတယ ပြုစုပျိုးထောင်းသော ကျောင်းသည် မီးတောက်မီးလျှံများဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ သူအလွန် နှစ်သက်မြတ်နိုးသော ကလေးများ၏ ရယ်မောသံများနှင့် ကလေးများ ၏ သီချင်းဆိုသံ များ၏နေရာတွင် ကြောက်စရာကောင်းသော အသံများက ကျောင်းထဲသို့ အစားထိုး ၀င်ရောက် လာခဲ့သည်။ ငြိမ်းသတ်ရန် မဖြစ်နိုင်သော မီးများကြောင့် ကျောင်းအဆောက်အအုံများ အားလုံး ပြာကျ သွားလေပြီ။ ဂျီယူဂါအိုကာ ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံး မီးများဖြင့် ဟုန်းဟုန်းတောက်လျက် ရှိ သည်။
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးသည် လမ်းမပေါ်၌ ရပ်ပြီး တိုမိုကျောင်း မီးစွဲလောင်နေသည်ကို ကြည့်နေပါ သည်။ သူသည် သူ၏ လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်အင်္ကျီအိတ်များထဲသို့ နှိုက်ထားရင်း ကြည့်နေသည်။
"နောက်တစ်ခါ ကျောင်းပြန်ဆောက်ရင် ဘယ်လိုကျောင်းမျိုးဆောက်ရင် ကောင်းမလဲ"
ဆရာကြီး သည် သူ၏အနီး၌ ရပ်နေသော သားဖြစ်သူ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တိုမိုကို မေးလိုက် သည်။ တိုမိုသည် ဖခင်၏ ပြောစကားကို အံ့အားသင့်စွာ နားထောင်နေမိသည်။
မစ္စတာကိုဘာယာရှီ ၏ ကလေးများအပေါ်ထားရှိသော မေတ္တာနှင့် စာသင်ရန် စိတ်အားထက်သန်နေ ခြင်းသည် ကျောင်းကိုစွဲလောင်နေသော မီးတောက်မီးလျှံများထက် ပို၍ အင်အားကြီးမား၏။ ပို၍ ခိုင်မာ တောင့်တင်း လေသည်။ ဆရာကြီးသည် စိတ်ညစ်ခြင်း မရှိပေ။ သူသည် ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်ပင် ရှိသည်။
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များဖြင့် ပြည့်ကျပ်နေသော မီးရထားတွဲတစ်တွဲ၌ တော့တိုး-ချန်သည် လဲလျောင်း လျက် ရှိသည်။ သူမသည် လူကြီးများကြားထဲ၌ ညပ်နေသည်။ မီးရထားသည် အရှေ့မြောက်အရပ်သို့ ဦးတည်၍ သွားနေသည်။ သူမသည် မီးရထား ပြတင်းပေါက်ကို ဖြတ်ကျော်၍ အပြင်ဘက်သို့ ကြည့် လိုက်သည်။ အပြင်ဘက် ၌ မည်းမှောင်လျက် ရှိသည်။ သူမသည် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး၏ ခွဲခွာခါနီး ပြောစကားများကို ကြားယောင် နေမိသည်။ "ငါတို့ ပြန်ဆုံကြဦးမှာပါ"ဟု ဆရာကြီးက ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင် သူမကို ဆရာကြီးက အမြဲပြောလေ့ရှိသော စကားဖြစ်သည့် "မင်းဟာ တကယ့် ကို လိမ္မာတဲ့ မိန်းကလေး ငယ် တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ မင်းသိတယ် မဟုတ်လား"ဟူသော စကားများ ကိုပါ ကြားယောင်နေမိသည်။ သူမသည် ဆရာကြီး၏ ပြောစကားများကို မမေ့လိုပေ။ မစ္စတာ ကိုဘာယာရှီနှင့်မကြာမီ ပြန်ဆုံရမှာပဲဟု စဉ်းစားရင်း သူမသည် အိပ်ပျော်သွားလေတော့သည်။
မီးရထားသည် တထိတ်ထိတ် တလန့်လန့်ဖြင့် လိုက်ပါလာကြသော ခရီးသည်များကို သယ်ဆောင်ရင်း အမှောင်ထုထဲ၌ ကျယ်လောင်စွာ အသံဖြင့် ခုတ်မောင်းသွားလျက် ရှိသည်။
Posted by SHWE ZIN U at 4:57 AM3comments Links to this post
ဒဂုန်ခင်ခင်လေး နှစ်ပေါင်း ၆ဝ အပိုင်း (၃)
သို့နှင့်မိုးကုတ်မြို့မှာ သုံးနှစ်ကြာခဲ့သည်၊ သုံးနှစ်ကြာသော်လည်း ငှက်ဖျားဆိုသော စကားကို နားမလည် ကြသလောက် ရှိကြပါသည်။ ဖခင်ဦးမြတ်ကျော်သည် သူကိုယ်တိုင်သော်၎င်း၊ ဇနီးနှင့် သ္မီးတို့အား၎င်း၊ အစား အသောက် အနေအထိုင်ကို အထူးဂရုစိုက်ပေးသည်၊ ယုတ်စွအုံး ဆန်ထမင်း နှင့်မြန်မာဟင်း များကို မစားစေဘဲ ပေါင်မုန့်နှင့်အာလူး ကြက်ဥ-ကြက်သား-ဆိတ်သား စသည်မှ တပါး အခြားအစားအစာ ကိုမစားရ၊ လက်လုပ်ချဉ်ပတ်များ နှင့် ပြင်ပမှရောင်းသော အစာကိုအဆိပ် အတောက်ကဲ့သို့ ရှောင်ကြဉ် စေခြင်း မီးဖိုထည်းမှ ကုလားလုပ်ကိုင်ပေးသော အစာသာလျှင် ငါတို့ စားရန်ဖြစ်သည်ဟု ယူမှတ် အစွဲနာ ခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် ၃-နှစ်ပတ်လုံး မည်သူမှအစားမှား၍ ဖျားနာခြင်းမရှိခဲ့ပေ၊ သို့သော် ကျန်ရစ်သူ ဘိုးဘွား မိဘတို့မှာ တနေ့မှစိတ်မချမ်းသာကြပါ၊ ရှေးအခါ ကရာဇ၀တ်ပြစ်မှုရှိသူများသာ မဲဇာရွှေလီ၊ ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနား၊ မိုးကုတ်၊ မိုးမိတ်တို့ကိုပို့သည်ဟု နားလည်ထားသဖြင့် ငှက်ဖျားမိပြီး သေကုန်ကြ တော့မည် ဟု ယူဆကြသည်။
ထို့ကြောင့်သုံးနှစ် ပြည့်သောအခါ အထက်အစိုးရများကို ပြောင်းရွေ့ပေးရန် ၀က်မစွတ်မြို့စားကြီးက နားပူ လေတော့ သည်၊ သို့ကြောင့် မိုးကုတ်မြို့မှနောက်တနေရာသို့ ပြောင်းရွေ့လာရပြန်ပါသည်၊ မိဘများ သည် မိုးကုတ်ကို မခွဲချင်ကြပါ၊ မိခင်မှာမိုးကုတ်မြို့၏ အမွေရတနာ ပတ္တမြား ကျောက်ကောင်း တွေကို သေတ္တာငယ် နှင့်အပြည့်အသိပ် ၀ယ်ယူခဲ့သလို ကျမကလည်း အိမ်တံစက်မြိတ်အောက်တွင် ချင်းချင်းနီ နေသော ပတ္တမြားမြေမှ ပတ္တမြားအဖြုံးများကို ကျုံး၍ ကျုံး၍ ကောက်ယူကစားရင်း တစိတ်ဝင် ပိတ်ဖြူအိတ် နှင့် တလုံး ပါလာခဲ့သည်။
ကျမတို့ ပြန်လာသောအခါ တောလားဝန်တင် နှင့် မဟုတ်တော့ပါ၊ သပိတ်ကျင်း အထိ အရေးပိုင် ခေါ် သော ပြင်သစ်လူမျိုး မိတ်ဆွေတဦး ထံမှ ထရောလီလိုလို ကားလိုလို ယာဉ်တစ်မျိုး ကိုစီး၍ ပြန်လာ ကြရပါသည်၊ ပြောင်းရွေ့ရမည့်မြို့ကတော့ မြင်းခြံမြို့ဖြစ်ပါသည်၊ သို့သောမန္တလေးမြို့ရှိ လူကြီး မိဘများ အိမ်မှာ ၄-၆ရက်ခန့် ၀င်ရောက်နားနေပြီး မိုးကုတ်မြို့တွင်နေ့ခင်း, ထိုင်ခင်းသာယာပုံများကို ဖေါက်သယ်ချ သောအခါ သူတို့ပူပင်သလို မဟုတ်၍ တအံ့တသြ ၀မ်းသာနေကြသည်။
မြင်းခြံမြို့ သို့ရောက်သောအခါ အလွန်အေးသောနေရာမှ အလွန်ပူပြင်းသောနေရာသို့ ရောက်လာကြ ၍ အစတွင် မနေတတ်, မထိုင်တတ်ဖြစ်ကြသော်လည်း နောက်တော့နေတတ်လာပါသည်၊ ကံအားလျော်စွာ အရိပ်အာဝါသ ကောင်းသော တိုက်တတိုက်ကို ငှားရ၍သက်သာရာရသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျမသည် ၄-နှစ် အရွယ်ခန့်ရှိ၍ အတော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရှိနားလည်သော အရွယ်သို့ ရောက်လာသည်၊ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ရှင်ကားတို ကလေးများကို တခါတရံ တအံ့တသြကြည့်ရစ် ပြုပါပြီ၊ ရုပ်ရှင်ကားဆို သော်လည်း ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ပါ၊ သဘောင်္ခုတ်ခြင်း၊ မီးရထားမောင်းလာခြင်း၊ မြင်းများပြေးနေခြင်း၊ တခါတရံ လူတယောက် ကို လူတယောက်က လိုက်ဖမ်းလျှင် စည်ပိုင်းထဲ ၀င်ပုန်းသည်၊ နောက်လူ မှီလာ၍ ဖွင့်ကြည့် လျှင် မုန့်သေတ္တာ တွေဖြစ်နေသည် စသော ရုပ်ရှင်ပေါ်ဦးစက လှုပ်ရှားမှုကလေးတွေ ရိုက်ပြသည်ကိုပင် တအံ့တသြ ပရိသတ် သဘောကျပုံ တွေကို မှတ်မိခဲ့ပါသေးသည်။
မြင်းခြံမြို့မှာ ဘယ်လောက်ကြာသည်ဟု အတိအကျမမှတ်မိ၊ အများဆုံး ၂-နှစ်ခန့်ရှိမည်ထင်ပါသည်၊ သည်အခါတွင် မန္တလေးကအဘိုးအဖွားများ အလည်လာသည်ကို မှတ်မိသော်လည်း ကျောက်ပန်း တောင်းက အဘိုးအဖွားများလာသည်ကို မတွေ့ရဘူးပါ၊ နောက်မှသိရသည်ကား အဘိုးမြို့အုပ်ကြီး ဦးဘိုးဆွေသေဆုံးရှာပြီး အဖွားမြို့အုပ်ကတော်ကြီးမမသက်မှာလည်း လှည်းပေါ်မှလိမ့်ကျ၍ တင်ပါး တဘက်အနာရပြီး တောင်ဝှေးထောက်သွားနေရသည်ဟု သိရှိရသည်။
ထိုအဖြစ်အပျက် တို့မှာ ကျမလူမှန်းမသိတတ်သေးချိန်ကနှင့်တူပါသည်၊ နောက်တချီ မြို့ပြောင်း အလွဲ ကိစ္စ ပေါ်လာသည်၊ မြို့အုပ်ကြီးဦးဘိုးဆွေမရှိတော့၍ သြဇာအာဏာ ညောင်းခဲ့ဘူးသဖြင့် ဦးမြတ်ကျော် အုပ်ချုပ်ရန် သင့်တော်သည်ဟူသော အယူအဆနှင့် တနယ်လုံးစီးရသော တိုက်နယ် အင်စပက်တော်ကြီး ရာထူးဖြင့် ပြောင်းရွေ့လိုက်ပြန်သည်။
ထိုအချိန်၌ ကျမအသက်မှာ ၅-နှစ်ကျာ် ၆-နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်၍ တွေ့မြင်သမျှ မှတ်သားမိသော ထင်ထင် ရှားရှား တွေ့မြင်သမျှ မှတ်သားမိသော အရွယ်ဖြစ်ပါသည်၊ သို့ကြောင့် မြင်းခြံမြို့မှ ကျောက်ပန်း တောင်းမြို့ သို့သွားရသော ခရီးစဉ်ကိုပါ မှတ်မိပါသည်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့သည် ပုပ္ပါးတောင်ခြေ တွင်ရှိ၍ အတွင်းကျသောအရပ်ဖြစ်ရာ မိတ္ထီလာဘက်မှလှည်းနှင့်သွားလျှင် လမ်းကြမ်း ဘောင်တက် တောင်ဆင်း တွေနှင့် ကျောက်ပုံချောင်းကိုဖြတ်၍ တလမ်း၊ မြင်းခြံမှတလမ်း၊ ရေလမ်းမှ သင်္ဘောနှင့် လာလျှင် ပုဂံညောင်ဦး မှာ ဆင်း၍ လှည်းနှင့် နှစ်ညဉ့်အိပ် မှ ရောက်သည်။
ယခုခေတ် ကဲ့သို့ ရေနံချောင်းမှ တိုက်ရိုက်ဖေါက်ထားသော ကတ္တရာစေး လမ်းများကို၎င်း၊ တောင်တွင်းကြီး မှ တဆက်တည်း ဖေါက်ထားသော အိပ်မက်ပင် မက်ကြသေးသည့်မဟုတ်ပါ၊ နှစ်ညဉ့်အိပ် လှည်းစီး ၍ လာရ သော်လည်း ဖုံထူသော သဲကြောင်းပေါ်မှာ ပေါင်းမိုးပိတ်နွားလှည်းကြီးတွေနှင့် တအိအိ မောင်းနှင် လာရသော ကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမရှိဘဲ သက်သက်သာသာ ရောက်သော ခရီးကို ရွေးချယ်၍ ရောက်လာ ကြသည်၊ ဖခင်၏ ဇာတိဌာနေ ဆွေမျိုးအသိုက်အအုံတို့ အလည်သို့ရောက်ရှိ လာသောအခါ အားလုံး ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် ရှိကြသည်၊ ကျမအားချစ်ခင်မှုကို အရင်းထား၍ အားလုံးက ၀ိုင်းမြှောက်စားပြန်ရာ မူလက မိဘ၏ အလိုလိုက်မှု၊ ယုယမှုခံရသူ ဖြစ်နေသဖြင့် ဆိုးချင်သမျှဆိုး၊ တေချင်သမျှတေ နေတတ်အောင် ၀ိုင်းသင်ပေးသလို ဖြစ်လာလေသည်၊ ကျမ၏အဘိုး မြို့အုပ်ကြီး ဦးဘိုးဆွေကိုမှတ်မိသော အရွယ်တွင် မတွေ့ရတော့ဘဲ သူ၏ ဓါတ်ပုံကြီးများကိုသာ အစပြု၍ မြင်ရပါ သည်။
သို့သော်ဦးဘိုးဆွေမသေမီကတည်သွားသော မြို့အပြင်ကျောက်တောင် ကျောက်ကလပ်များထိပ် ရှိ ရွှေတောင်ဦး ဘုရား၊ ဦးဘိုးဆွေ၏ဖခင်နှင့်အစ်ကိုများ တည်ထားခဲ့သောမြတ်ရွှေကူဘုရားနှင့် အခြားသော ၎င်းတို့ဆွေမျိုး သားချင်းတစုတည်ထားသော ဘုရားတန်ဆောင်း, ဂူကျောင်းဇရပ်များ ကိုသာ တွေ့မြင် ရပါသည်၊ အဖွားဖြစ်သူမမသက်ကို စာရေးသူစ၍မြင်ရသော အချိန်မှာ ပိုးထမီရင်ကွဲ တပတ်ရစ် ကလေးနှင့် ကိုင်လွန်း၍ ချောပြောင် နေပြီဖြစ်သော ၀ါးတောင်ဝှေး ကလေးထောက်လျက် သား, ချွေးမနှင့်မြေး တို့ကို သူနေသော အိမ်ဝင်းကြီး အ၀မှ ၀မ်းသာရွှင်ပြုံးစွာ ကြိုလင့်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အဖွား မမသက်သည် သားနှင့်ချွေးမ ကိုသီးခြား အိမ်ခွဲမနေစေလိုဘဲ သူနေသော အိမ်ကြီးမှာ အတူနေ စေသည်၊ အိမ်ကြီး ကလည်း ကျယ်ဝန်း၍ မူလနေသူမှာ မမသက်နှင့် ယောင်းမ (မြို့အုပ်ကြီး ဦးဘိုးဆွေ၏ နှမရင်း) မမယနှစ်ယောက်သာရှိ၍ ဆေးပေးမီးယူအိမ်ဖေါ်အမျိုးသ္မီးနှစ်ယောက် ရှိပါသည်၊ သို့သော် ခြံဝင်းကြီးမှာ အလွန်ကျယ်၍ သီးမျိုးစုံပွင့်မျိုးစုံတို့ကို စိတ်တိုင်းကျစိုက်ပျိုးထား သောကြောင့် ဥယျာဉ် သဘွယ်ရှိသည်၊ အိမ်မှာအုတ်တိုက်ခံပျဉ်ထောင်ပျဉ်မိုး၍ ၄-ဘက်ဆင်ဝင် အပြင် အုတ်ကလပ် များအစွန်း ထုတ်ထားသည်။ ၎င်းအုတ်ကလပ်မှာ ရှေးအခါက လူဆိုးများဝိုင်းလာ လျှင်အစောင့်များက အိမ်ပတ်လည် မှနေ၍ သေနတ်နှင့်ပစ်စရာသူရဲပြေး သဘောမျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်၊ အလားတူ ဦးဘိုးဆွေ တို့ဆွေမျိုး ညီအကို သားချင်း တစုတို့၏ အိမ်ဝိုင်းများလည်း ဆက်ခါဆက်ခါ တပြေးတည်းတည်ရှိနေသည်၊ ၎င်းဝိုင်းများ ကိုစုပေါင်း ၍ ၀ါးချွန်ဝင်းထရံများခပ်ထားသည်ကို မှတ်မိသေးသည်၊ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့လယ်ဗဟို တွင်ရှိ၍ ထိုဆွေမျိုးတစု၏၀ိုင်းကို မင်းဝိုင်းဟု ခေါ်ကြသည်၊ ယခု၎င်းကိုအစွဲပြု၍ မင်းဝိုင်းရပ် ဟုခေါ်ဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်၊ သို့သောသင်္ခါရသဘော အတိုင်းစစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း များမရှိတော့ဘဲ အဘိုးနှင့်အဖွားမမသက်တို့ အုတ်ခံရှေးတိုက်အိမ်ကြီးမှာ ဗုံးဒဏ်ပိလျက်ပြိုပျက်သွားရာ မပြို၍ ကျွင်းကျန် နေရစ်သော အုတ်နံရံ တပိုင်းတစ များသာ ယခုအချိန် ထိရှိနေပါသည်။
ထိုအချိန်က မြုိ့အုပ်ဝန်ထောက်စသည်တို့မှာ အလွန်သြာဇာအာဏာရှိသည်။ နယ်များတွင် အရေးပိုင် ရာဇ၀တ် ၀န်ကြီး စသူတို့က သုံးလေးလရှိမှ တခါတလေလာတတ်သည်။ ဦးမြတ်ကျော် ရောက်လာသော အခါ အဖေဖြစ်သူမြို့အုပ်ကြီး ဦးဘိုးဆွေကို ခင်မင်ရင်းစွဲရှိခဲ့ကြသည့် တိုင်း မြို့ရောနယ်ပါ ချစ်ကြောက် ရိုသေ ရှိကြသည်။ တိုက်နယ်အင်စပိတ္တော်ရာထူးမှာ နယ်လှည့်ရသည်။ တလလျှင် ၁၅ရက်ခန့်က နယ်လှည် လို့ချည့်နေရသည်။ ဦးမြတ်ကျော်က နယ်လှည့်သွားတိုင်း ပုပ္ပါးတောင်ကို မရောက်၍မဖြစ်၊ ပုပ္ပါးတောင် တ၀ိုက်မှာ ရွာကြီးရွာငယ်ပေါင်းက ခြံရံတည်နေါသည်။ နယ်လှည့်ထွက်တိုင်း ဗိုလ်တဲရှိသော ပုပ္ပါးမြို့ တောင်ဇင်း၊ လက်ပန်ဖျား၊ ဆတ်ထိန်း၊ ကပ်ကုန်း သောဌာနများတွင် ညဉ့်အိပ်စခန်းချ၍ ပုလိပ်ဌာန များကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရပါသည်။
ဗိုလ်တဲမရှိသောရွာများတွင် မြို့သူကြီးများအိမ်၌ တည်းခိုရသည်။ ၎င်းမြို့သူကြီးများမှာလည်း တစိမ်းတရံ ဆန်တွေမဟုတ်ကြဘဲ မြို့အုပ်ကြီးဦးဘိုးဆွေတို့၏ ဆွေမျိုးအကိုင်းအခက် အဆက် အနွယ် များသာ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဦးမြတ်ကျော်သည် နယ်လှည့်ထွက်တိုင်းဇနီးနှင့် သ္မီးကိုခေါ်သွား လေ့ရှိသည်။ ထိုခေတ် အချိန်က နယ်လှည့်ရသည်မှာ နွားလှည်းများနှင့် ဖြစ်ပါသည်။ တခါတရံ လည်း လူကမြင်းစီး၍ ပစ္စည်း များကို လှည်းနှင့်တင်သည်။ ကျမကို မိဘများက အလွန်အကျွံ အလိုလိုက်သည်၊ အဘိုးအဖွား အဆွေအမျိုး အသိုက် အအုံ ကလည်း ၀ိုင်း၍မြောက်စားချစ်ခင်ကြသည်။ ရောက်လေရာဌာနတိုင်းကလည်းဝိုင်း၍ ချီပင့်ကြ ချစ်ခင်ကြသည်၊ ကျမကိုယ်၌ကလည်း လူလောက ကြီးထဲရောက်၍ လူမှန်းသိသောအချိန်ကစပြီး၊ မတောင့်မတ မကြောင့်မကြ နှင့် ချမ်းသာသုခကိုသာ မျက်ဝါး ထင်ထင် လက်တွေ့ခံစားရမှုတို့ကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခ ဆိုသည်မှာ ဘယ်လိုဟာမျိုးခေါ်မှန်းမသိ အောင်ရှိနေသာ အရွယ်ဖြစ်ပါသေးသည်။
ထိုသို့ ပတ်ဝန်းကျင်၏ အလိုလိုက်မှုကြောင့် ဆိုးနွဲ့ပေတေမှုတွေက တဖြည်းဖြည်းတိုးလာသည်၊ ဖွားဖွား မမသက်သည် မနက်တိုင်းနိစ္စပါတ်ဘုရားကို ဆွမ်းပန်းကပ်လေ့ရှိရာ သူ့ဆွမ်းတော်ပွဲများမှာ မနက်တိုင်း ဘန်းကြီးဘန်းငယ် အသွယ်သွယ်နှင့်သစ်သီးမုန့်ပဲတို့ကို အလှအပချယ်လှယ်၍ ကပ်လေ့ရှိသည်၊ ခြံထဲမှ ထွက်သမျှ ခူးပေးရသောဘု၇ားပန်းများကိုလည်း ပီးကပြစ်မဟုတ်ဘဲ ပန်းထီးပန်းခိုင် သဖွယ် အလှအယဉ် ချယ်လှယ်ပြုပြင် လုပ်ကိုင်ပြီးမှ ကပ်လှူလေ့ရှိသည်၊ ကျမသည် တော့တက် မလိုက်သော နေ့ရက်များ၌ ဖွါးဖွါး၏ ဘုရားဆွမ်းပန်း အလှပြင်ဆင်နေခြင်းကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ ထိုင်ကြည့်နေတတ်သည်၊ ထိုအခါ ဖွါးဖွါးသည် လက်မှပန်းခိုင်ပန်းထီးများ ပြုလုပ်ရင်းနှုတ်မှ လည်းကျမအားဒါနအကြောင်း, သီလ အကြောင်း ကုသိုလ်, အကုသိုလ်အကြောင်းတို့ကို ခလေးများ နားလည်လွယ်သော စကားတို့ဖြင့် ပြောကြားလေ့ ရှိသည်။
တခါတရံ နေ့ခင်းနေ့လည် ဆိုလျှင် ပုံဝတ္တုများကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြောကြားတတ်သည်၊ ဖွါးဖွါး ပြောကြားသော ပုံဝတ္တုများသည် ငါးရာ့ငါးဆယ်နိပါတ်တော်တည်းမှ ပုံများချည်းသာဖြစ်ပါသည်၊ ကျမအဘို့ ငယ်စဉ်က ကုလားမအထိန်း များနှင့်သာ နေလာရသဖြင့် ပုံဝတ္တုများကို တကြိမ် မှ နားမထောင် ဘူးပါ၊ သို့အတွက် ခလေးတိုင်း နားထောင်ပြီးသား သမရိုးကျဖြစ်သောရွှေယုန် ရွှေကျားပုံ တို့၊ ငန်းတော် ရေမြွေမင်း မဒွေး စသောပုံပြင်များကိုလည်း မကြားဘူးသေးပေ၊ ယခုစတင်ကြားရ သောပုံပြင်များမှာ အလွန် အဆင့်အတန်း မြင့်သောငါးရာ့ငါးပယ် နိပါတ်တော်ပုံပြင်များဖြစ်၍ ဘုရာလောင်း မျောက်မင်းနှင့် ဒေ၀ဒတ် တို့ ကအစ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့မှ ဝေဿန္တရာ၌ ဂဏှာဇာလီ လှူခဏ်းမှာ ခလေးချင်း သနားပြီး မျက်ရည် များဖြိုင်ဖြိုင်ကျခဲ့ရသည်၊ သို့သော် ထိုစဉ်က တန်ဘိုးရှိသော နိပါတ်တော်များ၊ ဇာတ်ကြီး ဆယ်ဘွဲ့ များဟုသိနားလည်၍တော့မဟုတ်ပါ၊ ပဋ္ဌမဦးစွာကြားရဘူးသော ပုံပြင်များအဖြစ် အစွဲနာ၍ မှတ်မိနေ ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
သို့ကြောင့် ကျောင်းမနေရသေး၍ စာတလုံးမှ မသင်ရမှီ ၆-နှစ်အရွယ်ကပင် ငါးရာ့ငါးဆယ် နိပါတ်တော်နှင့် ဇာတ်ကြီး ဆယ်ဘွဲ့ပါ ၀တ္ထုဇာတ်လမ်းများကို နောကြေအောင် မှတ်မိနေပြီဖြစ်ပါ သည်၊ မေမေသည် နောက်ပိုင်း အချိန်ျများတွင် သားသ္မီးကိုယ်ဝန်ရှိုလာ၍ တောတက်ရာသို့ မလိုက် နိုင်တော့ဘဲ အိမ်မှာ နေရစ် ရသောအခါ ကျမသည် အိမ်ခြံကြီးအတွင်းတွင် ပြေးလွှားကစားသည့် အခါကစား၍ ဖွားဖွားနှင့် အမေနားမှာ မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့နေတတ်သဖြင့် မေမေက နားအေး အောင်ကျောင်းထားပေးမည်ဆိုသည်၊ ဖွားဖွားတို့ အိမ်နှင့် တလမ်းကြားတွင် ၇-တန်းအထိသင်ကြား ပေးသော မြန်မာစာသင်ကျောင်း တခု ရှိသည်၊ ထိုကျောင်းတွင် ရွယ်တူကစားဘက်တွေ ရှိ၍လည်း သူတို့နှင့်အတူ ကစားချင်သဖြင့် ကျောင်းထား မည်ဆိုသည်ကို သဘောကျမိသည်။
သို့သော် ကျောင်းထားသည်ကို သဘောမကျသူ့မှာ ကျမဖခင်ဦးမြတ်ကျော် ဖြစ်ပါသည်၊ သူ့အလိုက မန္တလေး နှင့် ရန်ကုန်ရှိကွန်ဗင့်ခေါ် အင်္ဂသီလရင် ကျောင်းများသို့တခါထည်း ကျောင်း အိပ်ကျောင်းစား ပို့ထားရန် ရည်ရွယ်ထားသူဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်၊ သို့သော်မေမေက ကျောင်းခွဲပို့ထားရန် ငယ်ပါ သေးသည်၊ တနှစ်စနှစ်နှစ်စ ဒီကဗမာကျောင်းမှာထားပြီး ဗမာစာကို ဘတ်တတ်အောင် သင်ပါစေဦးဟု ဆိုသဖြင့် သဘောတူ လိုက်ရသည်။
ကျောက်သင်ပုန်း ကျောက်တန်ကိုင်၍ ကျမသည် ကျောင်းသို့စတင်သွားပါပြီ၊ ကျောင်းမှာ ယောင်္ကျား လေးနှင့် မိန်းကလေး အများရှိပါသည်၊ ထိုခေတ်ထိုမြို့ရှိ ကျောင်းသားအားလုံးထဲတွင် ကျမတယောက်သာ လျှင် အင်္ဂလိပ်ဂါဝန် နှင့် သားရေဘိနပ်၊ ခေါင်းကိုဦးထုပ်ဆံပင်က (ခရော့စ်)ခေါ် အတို၊ ကျောက်သင်ပုန်းက တဘက် နှင့် တယောက်တည်း တဘာသာထီးထီးကြီး ဖြစ်နေပါသည်၊ မိန်းကလေးများ ဗမာအင်္ကျီ လုံချည်နှင့် ဆံရစ်ဝိုင်း ယောင်ထုံးသို့မဟုတ် ငယ်သူများကဆံရစ်ဝိုင်းမှ ကြက်တောင်စည်း ကလေး ဗူးပွင့်ခွဲ လျက်ရှိကြသည်၊ ယောင်္ကျားကလေးများကလည်း ဦးစွန်းဖုတ် ယောင်တုံးအချို့ ကထုံးပြောင် ကလေး တွေနှင့် ဖြစ်ကြသည်၊ ဗိုလ်ဆံတောက် ပင် ပေါ်ခါစဖြစ် ပါသည်။
သူတို့အနေနှင့် ကျမကျောင်းသို့ လာသောအခါ ထူးထူးဆန်းဆန်း ပြူးတူးပြဲတဲ ကြည့်ကြသည်၊ အချို့ ကလည်း ကုလားမဂါဂရာကြီးဝတ်လို့ ဟယ်ဟုတအံ့တသြပြောသည်၊ အချို့က ယောင်္ကျား လဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘွတ်ဘိနပ် စီးထားသတဲ့ လို့ဆိုသည်၊ အချို့ကလဲကျမ မကြားတကြား ကုလားမ ခြေတန်ရှည် လင်းမြွေ ကိုက်လို့သေဟု နောက်ကြပြောင်ကြသည်၊ ကျမကျောင်းလာ လျှင်အနဲဆုံး ၃-ခါ ၄-ခါတော့ ကုလားမ လာပြီ ကုလားမ ခြေတန်ရှည်စသော အသံများကို ကြားနေရသောအခါ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ အများနှင့် တစ်ယောက်တည်း ဆိုတော့ကြောင်စာစာ ဖြစ်နေ မိပါသည်။
ဝလုံးကို ဝိုင်းအောင်ရေးတတ်ပြီ ဆက်ရန်
Posted by SHWE ZIN U at 3:40 AM3comments Links to this post